Dib u Eegista Macaamiisha ee Dolls Dolls
Caruusad jinsiyeed Qiimo
$ 500 - $ 800 dib u eegista caruusadaha
$ 800 - $ 1200 dib u eegista caruusadaha
$ 1200 - $ 1500 dib u eegista caruusadaha
$ 1500 - $ 1800 dib u eegista caruusadaha
$ 1800 - $ 2200 dib u eegista caruusadaha
$ 2200 - $ 2500 dib u eegista caruusadaha
$ 2500 - $ 3000 dib u eegista caruusadaha
Dhammaan Reviews Dolls
Haddii aad runtii rabto inaad iibsato caruusadahayaga, laakiin weli waxaa jira walaacyo qaarkood oo ku dhibaya. Waxaad halkan u imaan kartaa si aad u aragto qiimeynta macaamiisha kale ee caruusadaha. Waxaa laga yaabaa in fikradahooda ku saabsan alaabtayada ay ku caawin karaan. Dabcan. Waxaan sidoo kale soo dhaweyneynaa iibsade kasta inuu ka tago fikradahaaga qiimaha badan halkan. Ammaantaadu waxay noqon doontaa xaqiijintayada ugu weyn. Waxaan sidoo kale si firfircoon u qaadan doonaa soo jeedimahaaga. Waxaan rajeyneynaa inaan u keenno adeeg wanaagsan macaamiisheena.
165CM Athena Timo Gaaban oo Cabbir buuxa leh Style C Cup Dib u eegis Doll ah
Sida boosta kale muujisay, caruusadan waxay umuuqataa mid aad u qurux badan. Laakiin waxay u muuqataa in kuwii iyada iibsaday ay faraxsan yihiin oo xoogaa lacag badbaadiyeen, qiimaha dhabta ah ee caruusaduna waa qiyaastii $ 1,500. Waan jeclahay dhammaan faahfaahinta iyo tayada ay ku darayaan badeecada. Adeeg macmiil oo heer sare ah iyo jawaab degdeg ah oo su'aal ah. Qiimaha sidoo kale waa weyn yahay. Khibradeyda, caruusadaha badankood ee tayadaani aad ayey qaali u yihiin. Waxay u egtahay iibsashada nus ka mid ah $ 2,000 jilitaanka galmada! Heshiis wanaagsan, caruusad weyn, iyo iibiyaha weyn!
Taariikhda Added: 2020-04-07 03:01:24 waxaa qoray Uria Wright
Akhri Aragti Details Product
158CM Eunjin Madow Timo Nadiif ah Silicone Nooca Xirfadaha Dib u eegista Doll ee Jinsiga
Tani waa dabeecadayda labaad ee dabeecadda. Midkani mid kale ayuu afuufayaa. Qiimo aad u wanaagsan oo lacag ah. Adeegga shirkaddu waa mid labaad! Dollkeygii ugu horreeyay (shirkad kale) waxay qaadatay ku dhowaad 2 bilood inay halkaan timaado, qalfoofkeeduna uma xoog badna sida tan. Haddii aad rabto inaad iibsato caruusad jinsi ah, miyaan aad ugu qancay iibsigan? Ha ka waaban inaad adeegsato shirkadan. Halkaas ayey si xirfadaysan ugu shaqeeyaan. Wax walbana markale !! Jacaylka iyada! Hubso inaad hubiso dhammaan jilitaanka galmada sawirro si taxaddar leh. Midka ugu dambeeya waa waxa aad heli doonto. Fadlan la soco sida aysan ugu fiicnayn sawirkii hore. Kaliya digniin.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:57:52 by Christiana
165CM Salome Qaab Fiican Qaab RZR Style D Cup Dib u eegista Doll Doll
Boomadan ayaa ka wanaagsan xayeysiinta. Waa sharci iyo xaqiiqo ahaan, qalfoofka birta silikoon heer-caafimaad, oo si buuxda ayaa loo xayaysiiyaa iyadoo la raacayo xayeysiinta. Tan ka sokow, gaadiidku waa mid aad u dhakhso badan oo taxaddar leh (ma laha sumado ama sawirro santuuqa). Laakiin si ka sii wanaagsan, iibiyaha ayaa aad ugu wanaagsan isgaarsiinta. Haddii aad rabto, waad dalban kartaa caruusado la habeeyay oo adiga ayey kuu sameynayaan. Kaliya iska hubi inaad u dirto iyaga. Boonkeyga ma dhaawicin, oo sidii aan codsaday, dhammaan astaamihii aan ku codsaday emailka ayaa deg deg ahaa, oo dhaqso ayey u yimaadeen. Iibiyaha si deg deg ah ayuu uga jawaab celiyaa, wuxuu u furan yahay isgaarsiinta, wuxuuna ku siinayaa sida saxda ah waxaad rabto. Kaliya xusuusnow inaad sheegto. Saameynta kaliya ee xun ee tan jilitaanka galmada waa miisaan (aad u culus), laakiin tani way igu fiicantahay maxaa yeelay culeyskiisu wuxuu ka dhigayaa mid macquul ah oo waara.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:54:28 by Cedric Harper
160CM Kitto Qurxinta Muuqata Japan Style D Cup Reviews Doll Doll
Gabi ahaanba qiime lacag. Timahaygii dahabiga ahaa ma keenin, laakiin waxay lahayd shaashad auburn ah. Waxay kaloo leedahay kululeeyaha daloolka iyo xarig cad, oo aad ugu habboon. Cabashadayda kaliya ayaa ah inay sii waari karto, laakiin weli qiimo wanaagsan. Waxaan la xiriiray shirkadda oo aan waxoogaa isbeddel ah ku sameeyay iyada. Waxay ku sameeyeen shaki la'aan. Isbedeladaan awgood, waxaa loo maleynayaa inay qaadan doonto ku dhowaad bil in halkaan la yimaado, waa hagaag, laga soo bilaabo maalintii ugu horreysay ee aan amar ku bixiyo, waxay timid 8 maalmood gudahood. Wax kasta oo aan weydiistay! Aan kuu sheego ... jilitaanka galmada aad ayey u jilicsan yihiin, galmo badan yihiin waana qancin karaan!
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:50:27 oo uu qoray Jack Craigie
160CM Dora Madow Timaha Aasiya Qaabka E Koobka Galmada Dib u eegista Doll
Waxay xirtay timo madow (wali waxaan isku dayayaa inaan ogaado sida loo isticmaalo / nadiifinta / qaabka saxda ah) iyo khafiif cad oo Sailor Moon / kalkaaliso yar oo goonida ah, dusha sare ee dalagga, xirmooyinka gacanta iyo koofiyada nuuca koofiyadda. Waxaan sidoo kale dalbaday dhar kale (dharka oo dhan aad ayuu u yaryahay, natiijooyinka cabirkeeda waxay ku qoran yihiin buugga tilmaamaha). Naasaheeda waa kuwo waawayn oo nool, laakiin baaxadda le'eg guud ahaan dharka ayaa loo isticmaali karaa dusha sare. Waxaan kugula talineynaa inaad iska ilaaliso culeysyada adag ama culeyska adag, oo ay ku jiraan gacmo gashi, maxaa yeelay way adkaan kartaa in wax lagu dul rogo jilitaanka galmadagacmaha adigoon xoogaa foorarin meelahooda. Qalabka dabacsan ama laastikada ah ayaa ugu fiican dusha sare.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:46:58 by Bowman
160CM Caroline Short Brown Timo Xaqiiq ah Style Qurux Badan Naasaha Faallooyinka Doll Faallooyinka
Haddii aad raadineyso toy si aad u qanciso rabitaankaaga galmada marar badan maalintii (anigu xukumi maayo), markaa tani ma noqon karto ikhtiyaarka ugu fiican, kaliya maxaa yeelay marwalba way adkeyd in la dhaqaajiyo iyada waana in la nadiifiyo (haddii aad rabto iyada inay sii socoto Muddo dheer, tani waa waajib). Isbedello yar oo ku yimaada qaab-dhismeedkeeda iyo qaab-dhismeedkeeda macnaheedu waa iyada oo kor loo qaado (dhammaan 59 rodol) oo iyada la dhigo oo si taxaddar leh xubnaheeda loogu dhaqaajiyo meesha. Si kastaba xaalku ha ahaadee, aniga ahaan, shaqadani waa mid khiyaali ka badan tan galmada lagu ciyaaro, in kastoo jilitaanka galmada hubaal inaad bixiso alaabta lagu ciyaaro galmada.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:43:30 by Armand
160CM Yasuko Timo Madow Wadajirka Japan Style Faro-galinta Dhibcaha Galmada Aadanaha
Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan gabalkan waa iswaafajin. Sida iska cad, waad iibsan kartaa dhar kasta oo aad rabto, laakiin soosaarayaashu waxay sameyn doonaan madax badan oo kala duwan, sidaa darteed waxaad dooran kartaa midka aad ugu jeceshahay iyo wig kasta oo aad ka heli karto. Soo-saaraha ayaa sidoo kale tixgelin doona dookhyada midabka maqaarkaaga, midabka indhaha iyo waxyaabo yaryar oo kale. Waxaan sameeyay codsiyo fudud, kuwani waa fududahay, sidaa darteed ma hubo inta ay diyaar u yihiin inay aadaan dhanka caadada jilitaanka galmada (iyada oo aan kharash lagu darin).
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:40:03 by Ingemar Blake
157CM Simona Jaalaha Timaha Ardayga Qaabka B Koobka Galmada Doll Faallooyinka
Dalbashada, rarka, habeynta iyo adeegga macaamiisha dhammaantood waa wax weyn. Sanduuqa weyn (oo laga yaabo inay adkaato in la qaado, marka u diyaarso xoogaa qaadis ah) wuxuu imanayaa albaabka gurigayga halkii uu ka imaan lahaa hoolka hore, taas oo wanaagsan. Kani waa caruusaddii ugu horreysay ee caruusadda carruurtu ku ciyaarto ee aan helo, waa shaqo faahfaahsan. Way ka culus tahay qaar ka mid ah caruusadaha kale ee ku taxan dhererkan, ra’yigayguna waa ka fiicanyahay uguna macquulsan yahay. Ilaa intaad si sax ah u aqbasho oo aad u taageerto culeyskeeda, wax walba waad kula sameyn kartaa iyada. Ha ku xulin gacmaheeda ama lugaheeda, iskuday inaad kala firdhiso xarunteeda culeyska iyo culeyska, maxaa yeelay qabashada aag ay wax ku qaaddo waxay sababi doontaa maqaarka jilitaanka galmada in la jeexo qalfoofka birta.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:35:30 by Fitch Quiller
146CM Sheila Long Timaha Aasiya Style Big Naasaha Big Reviews Doll Sex
Caruusadda waa qurux badan tahay, laakiin sidoo kale waqti yar ayey qaadatay. Guud ahaan, aad ayaan ugu qanacsanahay. Xaqiiqdii waxay umuuqataa mid kafiican sawirka. Cilladaha kaliya ee aan rabo inaan dhaho ayaa ah in siilka iyo daloolka siilka aan si sax ah loo saarin isla qaab dhismeedka haweeneyda. Inta badan godadka dabada waxay ku yaalliin inta u dhexeysa dhabannada badhida, caruusadana meel fog ayaa ka hooseysa. Godka siilka waxaa si toos ah loo hoos dhigaa kintirka. Haddii aan isbeddelladan la samayn, meelaynta raaxada iyo raaxaysigu way xadidan yihiin. Waxay umuuqataa in qofka caruusadan sameeyay waligiis uusan galmo la sameynin haweeney jirkiisa darteed. Guud ahaan, waxay qabataa shaqada, iyo jilitaanka galmada waa qurux.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:30:30 by
158CM Kimiko Brown Timo Jaangooyo Jaceel Naaso Weyn Naaso Wasmo Ah Faallooyinka Doll
Iibiyaha ayaa ahaa mid waxtar badan oo xawaaraha dhoofinta ayaa dhaafay wixii laga filaayay. La xiriir faahfaahinta iyo tilmaamaha. Qof kasta oo xiiseynaya inuu bilaabo ururinta, tani waa caruusad weyn oo ugu horreysa. Adeegga macmiilku aad buu u fiicnaa sidii aan filayey. Haddii ay tahay aaladdaada feedhka, waxaa jiri doona qalooca barashada marka la guurayo iyo meelaynta iyada. Haa, xoogaa wey culus tahay, laakiin aad ayey u qanacsan tahay. Waxaan diray sawirro iyo fiidiyowyo, laakiin weli ma heli karo taageero. Way igu sii ordayeen aniga. Waxaan qorsheynayaa inaan iibsado wax badan jilitaanka galmada shirkadan.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:26:22 by Landon
170CM Barafka Lotus Gray Timaha Gabdhaha Shiinaha Qaabdhismeedka Naasaha Yar ee Dib u eegista Doll
Way u qalantaa lacagta. Waa inay ka duwanaan kartaa sawirka, laakiin waan hore u ogaa inuu geli doono. Si kastaba ha noqotee, wali waxay u muuqataa mid weyn oo xiiso leh. Sida ku xusan faallo kale, godadkeeda si anatomy ahaan sax ah looma dhigin, laakiin wali waad heli kartaa. Waxay ahayd mid aad u adag oo culus. Dadaal yar oo lagu dhaqaajiyo. Kuma qanacsana qiimaha qiimahan, laakiin waa inaad ogaataa waxa dhici doona. Si taxaddar leh oo dhaqso ah u dir. Badeecad aad u fiican. Sida kor ku xusan. Cillad la'aan ama dhibaatooyin. Wax ku iibso kalsooni. Qiimaha sheyga weyn. Way ka culus tahay sidii aan filayay. Caruusada galmada dharka madow ayay ka qaban doontaa.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:20:32 by Gordon
145CM Shannon Timo Madow EVO Style Casaan Dibno Reviews Doll Reviews
Waxaan u samray baakadka illaa uu gurigayga ka gaadhayo. Waxaan sameeyay baaritaan badan oo ku saabsan caruusadaha tpe ka hor intaanan iibsan tan, waa inaan sheegaa inaan aad ugu qanacsanahay natiijooyinka. Caruusadda waa cilad la'aan. Naasaheeda waa quruxsan yihiin oo way jilicsan yihiin, wejigeeduna waa qurux. Waxaan rajeynayaa inay leedahay indho buluug ah halkii ay ka noqon lahayd bunni. Way culus tahay, sidaa darteed haddii aad qorsheyneyso inaad iibsato, u diyaargarow jimicsi hufan. Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad kala bixisid Laakiin tani maahan wax weyn. Waxaan dhihi lahaa qiimaheeda waa qumman yahay. Taabashadeeda waa mid aad u jilicsan, sidaan qabo, way ka fiican tahay tan jilitaanka galmada xayeysiinta. Waxaan aad ugula talinayaa iibiyahan waxaanan rajaynayaa inay i siin karaan il cusub.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:16:12 by Bob Bertie
145CM Lazuli Timo Jaale Yurub Qaabdhismeedka Kartoonada EVO Dib u eegista Doll Gelinta
Anigu waxaan ahay taageere manga ah runtiina waxaan jeclahay 18-ka 'Dragon Ball'. Caruusadan waxay sifiican usoocelineysaa dhamaan faahfaahinta. Mahadsanid urdolls. Wax cabasho ah oo aan qabtaa ma jirto waxaanan la yaabay adeegga macaamiisha ee fiican iyo mashruuca laftiisa. Qofka la xiriiro oo dhan wuxuu kujiraa xiriirintiisa wuxuuna hubiyaa in wax waliba hagaagsan yihiin, runti waxay direen timo dheeri ah oo indho la'aan ah, wax walbana way ka dheereeyaan sidii la filayay ama tilmaamaha. Sida loogu talagalay jilitaanka galmada lafteeda, way dhaaftay dhammaan filashooyinka, aad u macquul ah oo xiiso leh. Dhab ahaan waan kugula talinayaa.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:11:39 by Washington
155CM Dana Dierser Timo Gaaban Super Soft Style Pure Silicone Sex Doll Reviews
Tani waa badeecad tayo sare leh. Aad ayaan ula yaabay ugana yaabay faahfaahinteeda qaab dhismeed. Baadhitaan badan ka dib bilihii la soo dhaafay, waxaan ogaaday in tani ay sidoo kale tahay qiimo fiican. Wixii su'aalo ah ama su'aalo ah ee ku saabsan badeecada, urdolls waxay sidoo kale siisaa adeeg macmiil aad u fiican. Macaamiil ku qanacsan. Way ila yar tahay aniga, ka dibna waxaan jeclahay dhexda iyo dajinta, maxaa yeelay intiina badan waxaad jeclaan kartaan waxyaabaha noocaas ah, illaa iyo hadda waxay umuuqataa shirkad weyn, qiimo aad u fiican, oo jinsi ah, waxaan u maleynayaa jilitaanka galmada waxay noqon doontaa waqtiyo aad u wanaagsan, marka aad runtii u baahato qof kula jooga oo keliya lol.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:06:04 by Monroe
160CM Miyuki Timo Madow EVO Style F Cup Dib u eegis Doll
Waxaan dhihi lahaa waxaan ku hareerayaa waxyaalahan oo kale. Laakiin si daacad ah, tani waa xulasho wanaagsan. Waxay noqon doontaa caruusad weyn, wiil yar waxaan ahay 6 fuudh 4 laakiin waxaan shukaansaday haweeney dhowr sano ka hor waxayna ahayd 5 fuudh 1 sidaa darteed wax walba waan idhi oo si uun baan u helay. Aad bay u macaan tahay oo kacsi badan tahay. Maxaa yeelay anigu waxaan ahay qofkii ugu horreeyay jilitaanka galmada, iyadu waa weyn tahay, mana sugi doonno inay la joogto. Runtii waan jeclahay fikradaha shirkada iyo tollooyinka aad rabto inaad runtii ka caawiso dhinacyada oo dhan. Waxaan helay email-kooda.
Taariikhda Added: 2020-04-07 02:01:07 waxaa qoray Rodney
160CM Bet Yellow Timaha Dollhouse 168 Style Big Ass Galmada Doll Reviews
Iyadu kulligood anigaa iska leh hadda! Qiimaha dhoofintu waa mid aad u dhakhso badan, waxaan ku helay alaabtii aan doonayay wax ka yar 15 maalmood. Markii aan qaabilay, waxay ahayd sanduuq weyn, oo alaabooyinka ku jira sanduuqa lama calaamadin. Markii aan furay sanduuqa, waxaan ogaaday in caruusadda si fiican loo ilaaliyo oo aan waxyeello gaadhin. Maqaarka caruusadu waa mid aad u siman. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira saliid yar. Laakiin dhib malahan haddii aad iyada isticmaasho. Ka dib daaweynta talc, dufanka ayaa si weyn loo hagaajiyay. Kala-goysyada jilitaanka galmada sidoo kale way jilicsan yihiin waxaana lagu dhejin karaa meel ku habboon. Waxaa xusid mudan in adeegga macaamiisha uu aad u wanaagsan yahay. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan wax iibsado.
Taariikhda Added: 2020-04-07 01:56:14 waxaa qoray Arthur Webb
150CM Jessica Red Red Timaha Qaarada Yurub Qaabdarada Qafiifka ah Galmada Dib u eegista Doll
Qiimo aad u fiican oo lacag ah. Jidhkeedu aad ayuu uqurux badan yahay waana mid aad u qurux badan. Way ka weynaan kartaa wejigeeduna wuxuu u ekaan doonaa qaan gaar. Isku soo wada duuboo, way fududahay in la isticmaalo loona kaydiyo si taxaddar leh. Qof walba waan kula talin lahaa. Qiimaha mar kale waa tayo la yaab leh. Tani waa khiyaamada lagu sameeyay qalabkan-> istaarijka galleyda ayaa ah saaxiibkaaga ugu fiican. Iska ilow budada talcum. Ka dib marka la maydho, maqaarku wuu yara adag yahay in la taabto. Codso istaarijka galleyda si maqaarku u noqdo mid jilicsan. Haddii aadan hubin maaraynta cabbirka buuxa oo ah 150cm jilitaanka galmada, midkood ayaa aad loogu taliyaa.
Taariikhda Added: 2020-04-07 01:51:58 waxaa qoray Stanley
150CM Eirian Gray Timaha Jabka Jabbaan Jaangooyooyin Naaso Waaweyn Reviews Doll Sex
In kasta oo ay aad u culus tahay, haddana aad ayey u culus tahay. Waan ku faraxsanahay inaan helay tan. Waxaan heli doonaa doll cabbirkoodu dhan yahay, laakiin waxaan maqlay inay ku adag tahay maarayntiisa. Waxaan qiyaasi karaa sida caruusada gacmaha iyo lugaha ay ku cuslaan karaan. Tani waxay leedahay jir qalfoof bir ah iyo madax culus. Wax cabasho ah haba yaraatee majiraan. Wuxuu ku yimaadaa sanduuq laba jibbaar ah, laakiin xitaa sanduuqa asalka ah waxaa kaliya oo la sheegay in lagu sameeyo Shiinaha. Hal wig waa timo dhaadheer-kan kalena wuu goynayaa, laakiin waxaan ku qasbanaaday in aan jarjaro xargaha si aan u arko indhaheeda. Waxay umuuqataa mid dhab ah, astaamaheeda waa kuwo aad ufiican, naasaheeda waa kuwo adag, quruxsan jilitaanka galmada waxay leeyihiin dameer yar, faahfaahsan, waad ogtahay.
Taariikhda Added: 2020-04-07 01:47:19 waxaa qoray Wilde
150CM Akira Gray Timaha Jabka Jabbaan Jilib EVO Version Dib u eegista Doll Reviews
Tani waa wax weyn. Maaha sida urka qaaliga ah ee urta sida warshadaha kiimikada. Wejigu aad buu u qurxoon yahay, iyo baalasha indhaha ee dhabta ahi waxay ka kooban yihiin eyeliner. Waxaa jira dhajin dun ah oo madaxa ah haddii aad rabto inaad lakulanto jirka. Qoorta on jirku sidoo kale waa la fidiyaa si aad madaxaaga ugu foorarin kartid dhinaca hore ama dhinaca (si aan caadi ahayn). Laba wig, qalabyada nadaafadda, galoofyada cad, shanlo haddii aad rabto inaad xirato, iyo laba bajaamood oo leh shaashado iska-arag ah. Kama adkaan karo faahfaahinta sunnayaasha indhaha iyo baarkooda dhabta ah laguma sawirayo baarkooda, indhaha ayaa la gelinayaa runtiina waad u jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2020-04-07 01:42:23 by Benedict
148CM Antonia Simon Green Hair Timo EVO Nooc Naaso Waawayn Reviews Doll Sex
Waxaan soo iibsaday badeecadan maxaa yeelay waxay leedahay weji qurxoon. Wejigu wuxuu lamid yahay sawirka. Aad ayaan ugu qanacsanahay iibsigayga. Waxaan u maleynayaa inay tahay inaan u bixiyo $ 100 dheeraad ah jirkeena weyn, laakiin kan yar wuxuu leeyahay indho buluug ah oo kaliya, oo umuuqda mid cajiib ah. Badeecad weyn, aad u macquul ah. Waxay dareemeysaa wax weyn, sidaan idhi, caruusadu waa wax macquul ah! Waxaan jeclaan lahaa inaan yeesho jir ka weyn iyo weji yara bislaaday, laakiin waan fiicanahay. Dhibaato yar ayaa ka haysata isticmaalka xubinta taranka haweenka iyo godadka dabada - kaliya "sidee ayaan u hagaajiyaa jilitaanka galmada si tan loo sameeyo ", laakiin waa iftiin ku filan in la isticmaalo. Isku soo wada duuboo, waa wax soo saar tayo sare leh.
Taariikhda Added: 2020-04-07 01:38:19 by Carey Dillon
146CM Betty Malan Timo Jaale Big Ass Style EVO Version Dib u eegista Doll Doll
Haddii aad rabto inaad lalmiso doll-ka intaad seexanaysid, dooro doll weyn, oo weyn oo kugu filan inaad ka fikirto inaad sudhan tahay jirka dhabta ah. Iyadu aad bay u qurux badan tahay, waxaan jeclahay inaan eego iyada, aad bay u qurux badan tahay una taxaddartaa. Isticmaal budada ilmaha iyo saliid si aad uga dhigto maqaarkeeda mid jilicsan oo jilicsan. Waxay xidhatay timo gaduud ah, sida sawirada iyo wigyada gaagaaban ee casaanka-greyga ah. Kama niyad jabin. Ma cusla ama fudeyd. Samee cilmi baaris ku saabsan sida loo qaato jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:50:50 waxaa qoray Ralap Tony
156CM SaSa Black Hair Timaha Jaangooska Jirka yar Naasaha Dib u eegista Doll Reviews
Hagaag, waxaan la joogay qaabkan dhowr bilood. Sugitaanku waa fiican yahay. Waxay umuuqataa mid dhab ah. Taabashadu way ka yara fiican tahay isticmaalka. Qalbigu waa macquul-mararka qaarna wuu ka fiican yahay runta. In kasta oo biyo raaciyuhu laftiisu aad u jilicsan yahay, haddana way iska fududahay in la nadiifiyo iyadoo la isticmaalayo xalka biyo raaci ee la socda. Dhowr adeegsi ka dib, sunnayaasha ayaa iga dhacay, laakiin anigu kama walwalayo. Ka dib isticmaalka soo noqnoqda iyo nadiifinta, wax cillad ah oo maqaarka ah lama helin. Wax soo saar aad u fiican haddii aad leedahay meel aad ku kaydiso meel aysan dadka kale heli karin. Cabashadayda kaliya ayaa ah in jilitaanka galmadawajigiisa wuu yaryahay.
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:46:39 waxaa qoray Stan Swift
172CM Motooka Mayumi Short Brown Timo Jabbaan Qaab Jaangooyo Big Naaso Reviews Doll Sex
Marka caruusadda waxay u egtahay sidii aan ka fikiray. Waxaan kala soo baxay sanduuqa, waxaan saaray geeska sariirtayda, gacmahayga gadaal ayaan gadaal ugu riixay oo waxaan ku riixay meel fadhi ah, ka dibna dhabarka ayaan kalabar u laabay. Ma hubo haddii aan wax xun haysto. Tifatir: La hadal waaxda adeegga macaamiisha, waxay u direen hay'adda cusub 3 maalmood gudahood. Dhib malahan midkaan. Adeegga macaamiishu aad buu u wanaagsan yahay. Madaxa dollku waa qurux badan yahay oo jilicsan yahay; jirka caruusadu aad ayuu ufiican yahay qaabkiisuna waa u balaaran yahay sida sharraxa. Naqshadaynta miisaanka fudud awgeed, markaan nadiifiyo oo aan dayactiro, waan qaban karaa jilitaanka galmada hal gacan. Ka dib markii ugu horeysay ee la maydho, urka ayaa ku dhowaad aan jirin.
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:42:52 by Anna
168CM Yuko Hanawa Black Hair Timaha Jaangooska Qaabka weyn Naasaha Big Reviews Doll Reviews
Waxay sifeeysaa qaab kasta oo taabasho ah ... kumana tijaabin doono afka ama siilka maxaa yeelay bushimaha khafiifka ah ayaa dhalaali kara ama jeexi kara oo dumiya wejigeeda quruxda badan ceeb uun bay noqon doontaa. Dhaqiddu waxay umuuqataa mid fudud, qalajinta ma ahan. Ma aqaano sida loo sameeyo. Haddii aan isticmaalo shukumaan ama microfiber waxay soo jiidan doontaa qaar ka mid ah gudaha ... Waan ogahay inay u egtahay mid fiican ama xun oo laga yaabo inay ka miisaan badnaato waxtarka, laakiin kaliya fiiri iyada. Keen bisadda jeebka aad jeceshahay jilitaanka galmada oo magaalada aad.
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:37:11 by Shelley
170CM Leila Tobias Timo Gaaban Aasiya Style Big Naaso Big Reviews Doll Sex
Gabadhani waa mid aad u qurux badan. Sawirkeygu wuxuu ku saxanyahay midabkeeda. (Shaandho la'aan ama wax kaleba) Iyadu / iyadu waxay la yimaadaan bikinimo iyo nooc ka mid ah nigisyada, laba wig iyo shanlo. Sababahan awgood, waxaan siiyay afar xiddigood. Dhibaatada kaliya ee aan la kulmay waxay ahayd in daloolka uu aad u yaraa. Suugaan ahaan, farahayga yar. Dabcan way fidsan tahay, laakiin waa hab kacsan. Xalka macquulka ah - Waxaan bir birta ah ku ridayaa daloolka futada oo waan diiriyay ilaa farteydu aad u kululaato (ma aha mid kulul laakiin ma diirran), xilligaas ayaan damiyay. Waxaan sameeyay dhowr jeer illaa tan jilitaanka galmada daloolku wuu sii weynaaday, laakiin weli wuu adag yahay.
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:30:49 by Angelo
170CM Miwako Timo Gaaban Jabaan Jaceelka Qaabka Naasaha Weyn Ee Naasaha Loogu Sameeyo Faallooyinka Doll
Haddii tani ay tahay iibsigaagii ugu horreeyay, waxaan u maleynayaa inay tahay taleefan wanaagsan in lala shaqeeyo urdolls. Marka ugu horeysa waxay umuuqataa mid qaali ah, laakiin sheygu wuxuu u dhigmaa caruusad aad qaali u ah, xitaa waxaa laga yaabaa inay ka timaado dib u habeyn xagga alaabada ah. Haddii aanad khibrad u lahayn nooc kasta oo ka mid ah badeecooyinka dadka waaweyn, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad isticmaasho alaab yaryar, si fudud loo ilaaliyo si aad ula qabsato. Caruusadan waa mid macquul ah ... waxay ka dhigeysaa iyada wax aan caadi aheyn inay aruuriso boodh. Ka fikir jilitaanka galmada sida qalab ama qalabeyn qalaad!
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:24:15 by Noel Harte
145CM Natasha Yellow Timaha Qaab-dhismeedka Qaabka Yurub D Koobka Naasaha Reviews Doll Reviews
Ka dib markaan akhriyay qaar ka mid ah fagaarayaasha ku saabsan xakamaynta tayada, markii hore waan ka labalabay inaan wax ka iibsado urdolls, laakiin waxay bixiyeen shan xiddig halkan. Way adag tahay in la aamino inay aad u jaban tahay marka la barbar dhigo unugyada la midka ah ee dukaamada kale. Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in maalintii xigtay ay soo gashay dahab. Waqtiga loogu talagalay dukaamada badankood waa 4-6 toddobaad. Baakaduhu waa kala duwan yihiin oo UPS si fiican ayey u maamushaa. Cilladaha kaliya ee halkan ka jira ayaa ah inaad habeyn yar ku leedahay astaamaha qaarkood, laakiin haddii aad wax ka dhiibato iibiyaha waxaan hubaa inay la jaan qaadi karaan qaar jilitaanka galmada doorbidyada (midabka timaha, midabka indhaha, haddii kale waxaan aaminsanahay inay tahay mid aan kala sooc lahayn).
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:20:06 by Woodrow
145CM Kiki Brown Timaha Aasiya Qaabdhismeedka D-Cup Dib u eegista Doll
Caruusada jinsiyeed waa sida saxda sawirka! Dabcan, sawirradan sidoo kale waxay leeyihiin waxbadan oo nal iyo saameyn asal ah, laakiin muuqaalka sidoo kale waa mid aad u muuqda. Sidoo kale buska ayaa ka weynaa sidii aan filayay, laakiin si farxad leh ayaan ula yaabay. Caruusadda ayaa sidoo kale ku habboon jirkayga furaashka, oo leh qiyaastii 23 inji oo nadiifin ah hoosta. Waan hayey barkinta xumbada ee ay soo gashay, si ay ugu fududaato in iyada loo raro rooga iyada oo aan waxyeello loo geysan jilitaanka galmada. Inaad mid yeelato waxay dadka qaar u noqon kartaa wax laga mamnuuco, sidaa darteed qorshaynta ku saabsan kaydinta iyo asturnaanta ayaa ah laba tillaabo oo wanaagsan ka hor inta aanad mid mid rogrogmin. Laakiin ha udhimin sharafta caruusadda, meel uun ku qariya!
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:14:53 by Cleveland
145CM Rita Berkeley Madow Timaha Aasiya Qaab-dhismeedka Naasaha Yar ee Naasaha Dib u eegista Doll
Waxaan u maleynayaa inaan halkan ku xuso. Dhererka tan jilitaanka galmada waa 145cm. Jidhku aad buu u khafiifsan yahay oo dhuuban yahay. Tani waxay runtii ka dhigeysaa mid fudud oo fudud in la dhaqdhaqaaqo. Wejiga caruusadu waa mid aad u yar. Aad ayaad uyartahay, marka sawirada la soosaaray waa sax, markaa naftaada si xikmad leh u qiimee marka loo eego caruusadaha kale. Haddii tani ay dhibaato tahay, fadlan la xiriir iibiyaha oo weydiiso madaxyo badan oo u muuqda dad waaweyn, waa la heli karaa oo si fudud keligood ayaa loo beddeli karaa, way iska shidmaan / daminayaan.
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:09:04 by Andre
145CM Miyu Jaale Timo Aasiya Qaab Casri Ah Naaso Waawayn Reviews Doll Sex
Cajiib! Qurux badan jilitaanka galmada. Faahfaahin aad u macquul ah. Cagaha iyo gacmaha oo sax ah, oo ay kujirto isticmaalka suulasha cidiyaha iyo ciddiyaha. Wejiga iyo jidhka oo qurux badan, maqaar aad u fudud. Qalfoofka ku xiran waa mid cajiib ah! Dhammaan kala-goysyada waxay ku dhaqaaqayaan dhaqdhaqaaqa saxda ah, iyo wareegga miskaha, garbaha, jilbaha, iyo xusullada ayaa laaban oo loo rogaa sida saxda ah. Kala-goysyadu way xoogan yihiin si ay ula jaan qaadaan boos kasta oo ay dhigato. Waxay umuuqataa inay aad ufiican tahay. Qiimaha farshaxanka cajiibka ah!
Taariikhda Added: 2020-04-06 23:03:32 by Gilbert
Timaha Gray 158CM Rin Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Wax walba waxay ku jiraan xaalad qumman. Waan ka helaa timaheeda iyo nigisyada. Xaqiiqdii waxaan kugula talin doonaa caruusadan galmada qofkasta oo maskax furan. Safarka taxaddarku wuxuu noqon doonaa caqabad. Si kastaba ha noqotee, waxay u qalantaa dinaar kasta. Saamiga caruusadaha ayaa u dhigma kan gabdhaha 18 jirka ah. Way igu fiicnayd aniga. Dollkeyga kale wuxuu ahaa 5 cag 2 inch oo doll culus oo qaloocan. Si dhakhso leh ayaa loo raray, loo baakadeeyey, farahana aad bay u jilicsanaayeen, fiilooyinkuna aad bay u yaraayeen oo way fududahay in la jabiyo. Ku jilitaanka galmada waa mid aad u jilicsan oo aad u wanaagsan, waxaan rajeynayaa inaan heli karo doorasho taagan. Sida lagu sharaxay. Caruusadda ugu horreysa ee la iibsado. aad u faraxsan. Laabta ayaa laga yaabaa inay ka jilicsan tahay laakiin ma xuma; faahfaahin wanaagsan. Cabsi badan sida sawir, u argagaxsan sidii gabadh bikrad ah, waxay qaadataa wakhti in lagu jebiyo qiimaha wanaagsan, tayada iyo wax soo saarka sheyga.
Taariikhda Added: 2019-11-25 01:58:01 by Lennon
Timaha Jaalaha ah 161CM Kaede Sex Dib u eegista Macaamiisha Macaamiisha
Runtii waan jeclahay caruusadan. Haddii aan siin karo 6 xiddigood, waan doonayaa. Waxay timid ka hor sidii la filayay. Wax walba waxay ku jiraan xaalad qumman. Waxaan jecelahay inaan soo raro wig iyo nigis. Xaqiiqdii waan kugula talin doonaa tan jilitaanka galmada cid kasta oo maskax furan. Nasiib darrose, waan dhayalsaday baaxaddeeda, sidaa darteed safarka taxaddarku wuxuu noqon lahaa caqabad. Si kastaba ha noqotee, waxay u qalantaa dinaar kasta. Boombaladdu waxay u dhigantaa saamiga gabdhaha 18 jirka ah. Wanaag igu filan, caruusadeyda kale waa 5ft 2 inch oo qalooca culeyska buuxa ee jirka leh, oo qiyaastii ah 120 rodol, marka tani waa gargaar fiican, goobta waa mid aan dhammaad lahayn. Waxaa laga yaabaa in jimicsiga 21 jirka ah ee Shiinaha uu yahay isbarbardhig ka wanaagsan.
Taariikhda Added: 2019-11-25 01:52:11 waxaa qoray Elton Gilbert
Timo dheer 148CM Vita Roy Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Sida kor ku xusan, sheygu waa dhakhso oo dhakhso badan. Marka side sida FedEx uu la yimaado doll, hubi inaad joogto guriga. Waxaan halkan ku soo lifaaqayaa sawir tusaale ah. Waxaan ka doonayaa halkaa caruusado kale, laakiin kani waa weji i dareensiinaya inaan aad u qurux badanahay. Ma leh dharka halkaan lagu muujiyey, laakiin waxaad heli kartaa wax galmo ah jilitaanka galmada dharka urdolls-ka aniga oo kale ah. Dharka cabbirkoodu waa "S" ama wuu ka yaryahay. Xamaasaddayda, waxaan ku dhawaaday inaan ku daro in adeegga macaamiishoodu weyn yahay!
Taariikhda Added: 2019-11-25 01:44:21 by Allen
Timaha Curly 165CM Fikradaha Macaamiisha Fiktooriya ee Galmada
Sida iska cad maahan bedelida xaqiiqada, laakiin waa wax aad u faraxsan. Waxaan rabaa inaan sameeyo cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan dayactirka ka hor inta aan amrin, maxaa yeelay waa inaan iibsadaa waxyaabo badan oo kale si aan uga caawiyo ilaalinteeda, waxaan rajeynayaa inay waqti dheer sii jiri karto, sidaa darteed dhib kama qabo inaan sidan sameeyo. Ma aha inaan bixiyo kharashka jilitaanka galmada, laakiin waxay qaadan kartaa toddobaad ama wax ka badan. Waxaa jira khibrado wanaagsan oo ku xeeran. Kama qoomameyn doontid! Caruusadan waa weyn tahay, waxaan filayaa wax kayar sababta oo ah qiimaha aadka u hooseeya, laakiin waxaan si farxad leh ula yaabay tayadeeda.
Taariikhda Added: 2019-11-13 04:27:57 by Hiram Nick
Blue Eye 170CM Cecilia Arthur Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waqti badan ayaan ku qaatay iibsashada a jilitaanka galmada, gaar ahaan markii aan arkay inay ku bexeen qiimo ka badan $ 1, baadigoob badan ka dib, waxaan ogaaday in qiimahaasi kala badh uun yahay. Filashooyinku way hooseeyaan qiimahaas, laakiin haddaanan jeclayn, ugu yaraan lacag intaas le'eg igama khasaarin. Markay soo gashay, waxaan bilaabay inaan isku keensado. Fikirkeygii uhoreeyay wuxuu ahaa wow, kani waa mid culus. Fikirka labaad waa wow. Waxaan u maleynayaa in waxan ay doqon tahay. Ka dib markii aan xiro xijaab oo aan fadhiisto, waxaan xaqiiqsaday inay u muuqatay mid ka fiican sidii aan filayay. Ma dhihi doono waxay umuuqataa sawir, laakiin wey muuqataa. Waxaan ku jiraa 'qaabka suufiyada' oo waxaan in muddo ah ka imid dumarka, tani waa wehel wanaagsan. Waxaan helay waxyar oo ah dawada loo yaqaan 'dopamine' iyo hormoonno kale oo isoo jiifa, markaa way qurux badnayd hareeraha.
Taariikhda Added: 2019-11-13 04:17:01 by Smedley
Timaha Jaalaha ah 170CM Marcia Austin Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Marka caruusadda waxay u egtahay sidii aan ka fikiray. Waxaan kala soo baxay sanduuqa, waxaan saaray geeska sariirtayda, gacanta ayaan gadaal saaray oo waxaan ku riixay meel fadhida, anigoo la hadlaya waaxda adeegga macaamiisha, waxayna u direen xoogaa dhar dheeri ah. Tani waa macaamil ganacsi aan dhibaato lahayn. Adeegga macaamiishu aad buu u wanaagsan yahay. Ka fikir sida shey qalaad ama alaab guri! Waxa kaliya ee aan ka caban karo waa adkaanta sanduuqa, laakiin waxaan rajeynayaa inay nasato waqti ka dib. Isku soo wada duuboo, tan jilitaanka galmada waa u qalantaa lacagta oo si dhakhso leh ayaa loo qaadaa.
Taariikhda Added: 2019-09-17 04:02:42 by Channing Katrine
Timo Madow oo Dheer 148CM Ruiya Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxay ahayd inaan horay u dalbado. Waa cajiib qurux badan. Dariiqa la filayo ayaa ka fiican. Aad ayaan ugu yarahay xamaasadeyda Hollywood. Waxay ka samaysan yihiin waxyaabo ammaan ah oo aad u nadaafad badan xitaa iyada oo aan la ilaalin. Waan daawan karaa saacado. Wiggu wuu ka duwan yahay sawirka laakiin wuu fiican yahay. Dharka dharka dumarka lagu daro oo aad u weyn, laakiin maxaad filaysaa bilaash? Haddii aan markale sameeyo, waan istaagayaa. Illaa iyo hadda, ma jiraan khataro la yaqaan oo la xiriira jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-08-23 03:21:50 by Gene Roy
Timo Madow 100CM Kelly Max Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Ibaha naasaha ayaa lagu muujiyey halkan waxayna la mid yihiin jirka. Sida loo helo timo madow iyo indho madow sawirada aan iibsaday. Qiimaheedu wuxuu ina siinayaa adkeysi. Qaab dhismeedka iyo qaab dhismeedku way kala duwan yihiin! Wigs waa yaab! Waxaan ka dhigay cirib! Waa inaan sugaa caruusadaada galmada si ay ugu dambeyn guriga u yimaadaan. Hadda waxaa la joogaa waqtigii wax yar laga baran lahaa TPE caruusada galmada iyo tilmaamo iyo tusaalooyin qaar si loo helo caruusadaha galmada ugu fiican.
Taariikhda Added: 2019-08-23 03:11:12 waxaa qoray Daniel Edmund
Buluuga Timaha Buluugga ah 165CM Lydia Forster Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Xirmada ayaa la keenay iyada oo aan gudaha lagu dhex calaamadin. Aad u taxaddar badan, ninka gaadiidka wuxuu u maleynayay inay tahay qori badbaado. Sidii la filayay, su'aalo badan ayaa inta badan la kiciyaa inta lagu guda jiro sameynta go'aankan muhiimka ah. Waxaan ka jeclahay si ka wanaagsan saaxiibadaydii hore lol maxaa yeelay waa ka raqiisan tahay alaabtayda carruurtuna waligay maya ma odhan doonaan, laguma darin. Alaabta wanaagsan waa wax qurux badan. Iyada oo intaa ka badan jilitaanka galmada weli waa la sameynayaa, dad aad iyo aad u tiro badan ayaa bilaabaya inay rumaystaan ​​inay caadi tahay in la yeesho hal ama laba caruusado oo jinsi ah.
Taariikhda Added: 2019-08-23 03:01:35 waxaa qoray Isaac Wordsworth
Timaha Jaalaha ah 165CM Leona Herbert Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Dhib malahan inaad ka iibsato markale. Tani waa tayo TPE caruusada galmada sheyga Sidii la filayey, su'aalo badan ayaa la isweydiiyey markii go'aankan la gaadhay aad baanna ula yaabay ugana yaabay faahfaahinta dhismaha. Baadhitaan badan ka dib bilihii la soo dhaafay, waxaan ogaaday inay taasi sidoo kale tahay qiimo fiican. Waxay sidoo kale siiyaan adeeg macaamiil heer sare ah wixii su'aalo ama weydiin ah oo ku saabsan wax soo saarkooda. Macaamiil ku qanacsan.
Taariikhda Added: 2019-08-23 02:50:51 waxaa qoray Sidney Willard
Timaha Jaalaha ah 150CM Dana Dierser Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Boombalaydu sidaa iguma cusleyn aniga, laakiin dhibaatada keliya ayaa ahayd urka gaariga cusub. Taasi way tagi doontaa. Daboolku waa furaha. Waji qurxoon, naaso nool, cidhiidhi, qiimo jaban, jilitaanka galmada waligaa ha khiyaameyn, qashin, ama ha dhihin maya. Ugu dambeyntiina, markaan tixgeliyo dhammaan dhinacyada dhibaatada, waxaan qaadan doonaa go'aan macquul ah oo miyir qaba. In kabadan intii aan filayay. Way quruxsan tahay dhinac walba. Waan ku faraxsanahay inaan ugu dambeyntii burburay oo aan halkan imid. Macaamiil aad u qanacsan.
Taariikhda Added: 2019-08-23 02:41:45 by Arthur Alerander
Timo Madow 160CM Stacey Bacon Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Iyada wadada, aniga ahaan, culeyskeedu waa 80 rodol, ka dibna waxaan jeclahay dhexda iyo dajinta, maxaa yeelay inta badan waxyaabaha laga yaabo inaad sidaas jeceshahay, illaa iyo hadda waxay umuuqataa shirkad weyn, qiimo aad u weyn, caruusado jinsi ah oo aad u kacsi badan , Waxaan u maleynayaa inay noqon doonto xilli weyn, marka aad runtii u baahan tahay qof kula jooga oo keliya, aad u qosla. Go'aanka kama dambaysta ah ee laguu iibsado a jilitaanka galmada laftiisa waa mid aad u culus, waxaana laga yaabaa inaad qaadato waqti dheer si aad u sameyso.
Taariikhda Added: 2019-08-23 02:28:42 by Henry Bray
Aragtida Brown Brown 160CM Sabina Coleridge Sex Doll Reviews Macaamiisha
Tani waa iibiye weyn iyo wax soo saar. In kasta oo ayna lahayn cillado, waa caruusad jinsi aad u wanaagsan, gaar ahaan xagga qiimaha. Haa, waxaa jiray ur yar markii hore, laakiin tani waa astaamaha caadiga ah ee dhammaan alaabooyinka ay sameeyeen TPE. Wuu yaraan doonaa muddo ka dib (waana dhaafey laba usbuuc) iyadoo si sax ah loo dhaqo iyo la jaro. Curcurka xoogaa daciif ah. Positive waa xad dhaaf. Inta lagu jiro xilliga fasaxa waalida ah, caruusadaha ayaa la keenaa kahor taariikhda ballanqaadka. Gaarsiinta ah jilitaanka galmada waxay la mid tahay jirka saxda ah, timaheeda iyo indhaha cagaaran ee caado u ah.
Taariikhda Added: 2019-07-04 05:40:57 by Peter Hutt
Indho Weyn 100CM Vita Tony Sex Doll Faallooyinka Macaamiisha
Vita waa caruusada galmada ee aan rajeynayo. Marka hore, waxaan rabaa in aan iraahdo waxay timid waqti kahoreya sidii aan filayay (labo todobaad kadib). Tani ma wax fiicanbaa mise waa wax xun? Waayahay, maxaa yeelay, uum, waxaan aad ugu hamuun qabaa inay timaado. Ma fiicna, maxaa yeelay ma aanan joogin magaalada markii aan imid, waa inaan u oggolaado deriska inay fiiro gaar ah u yeeshaan baakadeeda illaa aan ka soo laabanayo. Markaan intaas iri, kani waa mid ka mid ah wax iibsigii ugu fiicnaa ee aan abid sameeyo. Ilaa inta ay eegayso muuqaalkeedu, waxay aad ugu dhowdahay sawirka tusaalaha ah. Sawirradaydu waxay muujin doonaan xoogaa khiyaanooyin khiyaano ah. Baarayaasha sunniyaheedu waxyar bay ka duwan yihiin, bushimaheeduna wax yar bay u kala duwan yihiin, laakiin tani saamayn ayey ku yeelan kartaa jilitaanka galmada labiska liiska.
Taariikhda Added: 2019-07-04 05:31:09 by Chad Defoe
Brown Timo dheer 100CM Juun Jinsi Doll Macaamiisha Dib u Eegista
June Doyle wuxuu u egyahay sawir ahaan. Iyadu waa wax yar oo quruxsan. Waxaan siiyay been dheer oo madow ah iyada, waxay umuuqataa jilaa / heesaa TV. Tayada way wanaagsantahay ilaa iyo hada, laakiin waxba lama aanan qaban iyada. Waxay fadhiisatay kursi ag fadhiya miiskeyga waxbana ma dhaheyn. Waxay i siisay wehelkii ugu fiicnaa. Kaliya waxaan u baahanahay inaan u soo iibiyo labadeeda qaybood ee dharka ah, ilmuhu waa mid dhex dhexaad ah, weligiis meelna ma geyn, weligiis ma caban. Meel uun bay iska fadhiisatay oo waxay haysatay buug wanaagsan. Waxaan doonayaa inaan soo iibsado mid kale jilitaanka galmada sida saaxiibkeed.
Taariikhda Added: 2019-07-04 05:23:12 by Todd Orlando
Big Ass 163CM Novia Hill Dib u eegista Macaamiisha Doll Doll
Sida dadka kale yiraahdeen, culeyska caruusadda galmada (106 rodol) waa caado, laakiin ma aha wax khasaaro. Way waaraysaa. Mar alla markii aad si fiican u baratid, addimmadeedu way fududahay in la dhaqaaqo, laakiin ku sii joog meeshaad rabto. Maqaarka ka baxsan sanduuqa waxay leedahay dareemo dufan, laakiin jilicsanaanta jilicsan ayaa gabi ahaanba la mid ah maqaarka. Marka iyada la nadiifiyo oo la jajabiyo, maqaarkiisu wuxuu dareemayaa runtii wax cajiib ah. Sidoo kale ma aanan dareemin wax kiimiko la yaab leh jirkeeda. Waxaan isku diyaarinayaa tan ku xigta jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-07-04 03:54:21 by Barry Bacon
Indhaha Buluugga ah 150CM Zoe Ralph Dib u eegista Macaamiisha Jinsi Doll
Markii aan helay caruusadda, waxaan eegay jirkeeda mana helin wax ilmo ah ama midab doorsoon ah. Tan waa in laga filaa maxaa yeelay sifiican ayey uga buuxsantay sanduuqa la diray. In kasta oo caruusadda sawirka ku jirta ay leedahay xarig dahabi ah, haddana waxaan haystaa timo dhaadheer oo toosan oo midab bunni ah oo ku habboon iyada oo u muuqda mid tayo ahaan leh. Waxay sidoo kale soo qaadatay labo nigis oo midab cad ah, oo ku habboon, iyo weel diiran. Tan laguma sheegin bogga, markaa tani waa faa'iido. Madaxa caruusadda ayaa qurux badan oo jilicsan; ah jilitaanka galmadaJidhkiisu aad ayuu u wanaagsan yahay qaabkiisuna waa u weyn yahay sida sharraxaadda.
Taariikhda Added: 2019-07-04 03:45:00 by Noel Ivan
Timaha Jaallaha ah ee Casaanka ah 150CM Bridget Whittier Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Caruusadan galmada waa sida saxda ah ee aan rabo. Waxaan ka baari jiray boodhadhka farriimaha ee 'TPE doll' ee internetka. Waxay umuuqataa in si khaldan loogu dhex daray shirkadaha been abuurka ah ee jaban. Shirkadahani waa uun inay khiyaaneeyaan shacabka. Waan fahmi karaa sababta, sababtoo ah qiimayaashoodu aad bay u hooseeyaan. Laakiin si ka duwan shirkadda khiyaanada, urdolls ayaa ila jirtay, ii sheeg in xirmada la diray (oo leh lambarka raadinta ee FedEx) si aan u arko sida aan u jeclahay caruusadda galmada silicone, haddii aan qabo wax su'aalo ah ama dhibaatooyin ah. Waad la xiriiri kartaa.
Taariikhda Added: 2019-07-04 03:35:25 by Donahue Norton
Timaha Jaalaha Ah ee Wavy Curly 150CM Wanda Hoover Sex Doll Reviews Macaamiisha
Kani waa caruusad jinsi ah oo aad u fiican, qurux badan laakiin culus, oo dhab ka buuxo, kuna filan wehel aamusnaan ah. Kaliya anigoo qiyaasaya cabirka dharka si aan isla markiiba u labisto. Waxay u muuqataa in dharkeeda yar yar ay wali qiyaasayaan taliyaha. Kani waa doll saddexaad ee aan haysto, taas oo ah tan ugu tayada iyo tayada wanaagsan. Haddii aad rabto inaad dhigto doll-ka intaad seexanayso, dooro mid weyn jilitaanka galmada taasi way ku filan tahay inay kaa dhigto inaad dareento inaad haysatid jirka dhabta ah.
Taariikhda Added: 2019-07-04 03:24:01 by Julius Burns
Timo dhaadheer 148CM Astrid Jane Dib u eegista Macaamiisha Jinsiga Doll
Waxaan ka mid ahay Mormon, ku darista wanaagsan xaaskeyga hadda. Markii loo isticmaalo iyadoo lala kaashanayo dharka astridda ee Astrid, iyadu aad ayey ugu habboon tahay bandhigga muusikada jacaylka leh ee jaamacadda. Iyadu iyadu sidoo kale waa aalad faneed aad u wanaagsan ama sawir gacmeed. Markaad muujiso wax badan oo ka mid ah dareenkan birta iyo silsiladda dumarka, waxay kaa dhigi doontaa saaxiibbadaada jahwareer, ka dibna way kaa heli doonaan. Waan jeclahay qaybtan farshaxanka ah ee wanaagsan iyo wax fiican caruusadda galmada silicone. Waxaan rajeynayaa in baahiyahaaga sidoo kale iyada lagu dabooli karo iyada.
Taariikhda Added: 2019-07-04 03:14:20 by Corey Ted
Indhaha Buluugga ah 146CM Maggie Harte Faallooyinka Macaamiisha ee Doll Sex
Caruusadda galmada waxay timaaddaa kahor taariikhda la qiyaasay. Ma hubo waxa dhici doona. Waan ogahay inaysan u muuqan "dhameystiran" sida sawir, laakiin runtii waan la yaabanahay markaan ka soo baxo sanduuqa, way u dhowdahay sida ay tahay. Timaha aan kala sooca lahayn iyo rarka. Maxaan samayn doonaa si ka duwan? Waxaan rajeynayaa inaan wax ka heli karo meel sare. Haddii aad awoodi kartid, waa ikhtiyaar wanaagsan in la siiyo jilitaanka galmada cag taagan. Oh, ugu dambeyntii, sida ku xusan. Wow way ka culus tahay sidii aan u maleynayay, qasab maahan wax xun. Kaliya ii sheeg inaan ka khaldanahay sidii aan u maleynayay.
Taariikhda Added: 2019-07-04 03:04:47 by Osborn Tobias
Dibno khafiif ah 146CM Yedda Mark Dib u eegista Macaamiisha Galmada Doll
Waan jeclahay caruusadan galmada macquul ah, iyadu waa farshaxan aad u fiican iyo kubbad aad u fiican. Ma jecli sida ay dhib u tahay u dhaqaaqistiisa iyo xirashada culeyskiisa awgiis. Waxaan u isticmaalaa inaan ka baxo. Waqtigii iigu fiicnaa ee aan abid soo maro! Waxay la mid tahay shaqo raadinta ciyaartaada. Kani waa barta ugu horreysa ee sawirka aan ku iibsado tan jilitaanka galmada. Dibnaha madaxa caruusadda waa cufan yihiin oo jilicsan yihiin, madaxana waa la jeexjeexayaa oo si sax ah ayaa loo qabtaa.
Taariikhda Added: 2019-07-04 02:57:21 by Abel Maurice
Laab Flat 100CM Asao Miko Sex Doll Reviews Macaamiisha
Waxaan helay caruusadan jinsiga ah shalay, iyadu waa sida sawirka oo kale. Tani waa wax yar oo qurux badan. Dhig been dheer oo madow ah iyada, waxay umuuqataa jilaa / heesaa TV. Tayada way wanaagsantahay ilaa iyo hada, laakiin waxba lama aanan qaban iyada. Waxay fadhiisatay kursi ag fadhiya miiskeyga waxbana ma dhaheyn. Wehelka ugufiican. Kaliya u soo iibso labadeeda qaybood ee dharka ah, ilmuhu waa mid cabbirkiisu dhexdhexaad yahay, weligiisna meelna geyn, weligiisna kama caban. Meel uun bay iska fadhiisatay oo waxay haysatay buug wanaagsan. Dhinaca makaanikada, wax walba waa hagaagsan yihiin. Waxay u egtahay dhamaadka-dhamaadka caruusadda galmada silicone. Kala-goysyadeeda waa kuwo adag oo kufilan inay booska ilaashadaan, laakiin si fudud ayaa loo dhaqaajin karaa. Faraha iyo suulasha waa dabacsan yihiin oo jilicsan yihiin. Isku soo wada duuboo, aad ayaan ugu qancay.
Taariikhda Added: 2019-06-19 02:49:55 by Byron Caroline
Timo Madow 100CM Madada Kanako Reviews Macaamiisha Doll
Caruusadan jinsiyeed waa mid weyn! Waxaan tan ku helay dhalashadayda sannadkan aadna waan ula dhacay. Iyadu way yara dhib badantahay, laakiin mar alla markii aad hesho, waxaan u maleynayaa inay noqon karto gabadha ugu wanaagsan ee aan haysto! Lol Waxaan u maleynayaa inay ka jinsi badan tahay sawirka. Isku soo wada duuboo, macmiil aad u qanacsan oo faraxsan! Naasaheeda waaweyn waxay siisaa saameyn muuqaal iyo dareen ahaanba. Dareenka galmada iyada ayaa ah mid aad u qabow. Laakiin hal shay oo aan leeyahay waa inay aad u culus tahay. Culeyska intiisa badan wuxuu ka yimaadaa naasaheeda waaweyn, laakiin sidoo kale waa filashadayda, gebi ahaanba la aqbali karo. Markaad iibsato a caruusadda galmada silicone waqtiga soo socda, miisaanka ayaa noqon doona mid ka mid ah tixgelinteyda ugu horreysa.
Taariikhda Added: 2019-06-19 02:40:53 by Nathaniel Crane
Indhaha Buluugga ah 166CM Eudora Surrey Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Tani waa badeecad aad u fiican, aadna u macquul ah. Caruusadaha galmada waxay dareemayaan wanaag, sidaan idhi, caruusadaha waa wax macquul ah! Waxay ii soo bandhigeen qalab nadaafadeed, shanlo, iyo jiifka oo leh muuqaal muuqaal ah. Waxaan kuu soo jeedinayaa haddii aad rabto inaad xirato, xusuusnow inaad xirato galoofyo cad, ma dhaafi karo faahfaahinta sunnayaasha wajiga iyo baalasha indhaha looma rinjiyeysto baarkooda dhabta ah, indhaha ayaa la gelinayaa, runti waad dib u dhigan kartaa. Xaqiiqdeeda ayaa la mid ah caruusadda galmada silicone.
Taariikhda Added: 2019-06-19 02:25:56 by Arno Joule
Timo bunni 170CM Pandora Sander Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Futada Pandora runti waa mid faahfaahsan, ma ahan kaliya dalool, tani waa barta asalka ah ee asalka u ah iibsigeyga caruusadan galmada. Dibnaha bishimaha galmada madaxiisu waa cufan yihiin oo jilicsan yihiin, madaxana waa la jeexjeexayaa oo si sax ah ayaa loo qabtaa. Midabka sarreenku aad buu u wanaagsan yahay oo wuxuu u eg yahay Caucasian waxyar laga madoobaaday. Dhageysiga asxaabta ayaa sheegay in tayada caruusadda galmada silicone halkan sidoo kale waa mid aad u wanaagsan. Waxaan isku diyaarinayaa inaan ku bilaabo mid. Waxa kaliya ee aan rabo inaan badalo waa cabirka naaska (tani waa dookh shaqsiyeed). Naasaha waa jilicsan yihiin laakiin waa kuwo xoogan oo dareen buuxa leh, laakiin waxaan doorbidaa koobka C. F-cup-kii aan haystay aad buu u weynaa.
Taariikhda Added: 2019-06-19 02:13:39 by Adonis Tom
Timo Madow 100CM Tanabe Reiko Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Jidhka iyo madaxa Tanabe si khaldan ayaa loo qaadaa, mudan! Tani waa sharci! Sababtoo ah waxaa jira been abuur badan oo internetka ah, waxay shaki ka qabaan iibsashadiisa. Gaarsiintu way ka dhakhso badan tahay sida ay sheegayso. Ma sheegi karo waxa sanduuqa ku jira. Wow, iyadu aad bay u qurux badan tahay! Waa sida saxda ah. Aad ayey u culus tahay. Sidoo kale wuxuu la yimaadaa kuleyliyaha USB-ga, taas oo ah wax lala yaabo. Sii tan A +. Waxaan doonayaa inaan soo iibsado mid kale caruusadda galmada silicone halkan, waxaan u hayaa keyd iyada ah.
Taariikhda Added: 2019-06-19 02:02:07 by Borg Billy
Timo Gaaban oo Fadhi ah 160CM Carey Godwin Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Caruusadan jinsiga ah ayaa runtii u qalantaa lacagta! Qiimaha aan ku bixiyay caruusaddan, TPE wax cillad ah ma leh, sida sawirka ku jirta oo kale. Dhinaca culus, waxaad heli doontaa xal oo waxaad ku dhisi doontaa caruusadan. Kani waa caruusaddaydii ugu horreysay oo aad baan u maseyray. Cabashadayda kaliya waxay ahayd in aan ka dhigay raqiis qalabka sida aan ku ogaa, laakiin waxaan aaday urdolls oo waxaan u iibsaday dhar ka wanaagsan kan jilitaanka galmada. Way weyn tahay inay kaa dhigto inaad dareento inaad sudhan tahay jirka dhabta ah.
Taariikhda Added: 2019-06-05 06:21:26 by Charles Robinson
Fiican 168CM Lance Hicks Sex Doll Macaamiisha Reviews
Caruusadan jinsi ahaaneed qiimo weyn ayey ii leedahay aniga, waxaanan ku dhajin doonaa dareenkayga ninka dhintey isaga. Waad ku mahadsantahay taladaada, isagu wuu qumman yahay. Si dhakhso leh u waala iyada oo loo marayo gaadiidka tayada leh Maraakiibtu waa ballanqaad gaar ah. Kaalay sanduuqa kartoonka caadiga ah. Ma jiro cilado muuqda, wasakh ama ilmo. Waxa kale oo ka mid ah dhar aan kala sooc lahayn, dalooliyaha godka iyo wax lagu dhaqo. Waxay leedahay haba yaraatee wax ur ah. Midda ugu macquulsan jilitaanka galmada Weligay waan arkay.
Taariikhda Added: 2019-06-05 06:13:12 waxaa qoray Jonas Judith
Indhaha Madoow ee Madow 140CM Blanche Sex Doll Reviews Macaamiisha
Kani waa doll saddexaad ee aan haysto, taas oo ah tan ugu tayada iyo tayada wanaagsan. Dhamaan seddexda caruusad ee aan ka imid urdolls. Si toos ah uga iibso shirkadda. Saamiga caruusadan aad ayuu u wanaagsan yahay marka loo eego caruusadaha kale ee aan haysto. Qalabka TPE ee loo adeegsaday caruusadan ayaa ka jilicsan caruusadaha kale ee aan haysto, isaga oo aan u hadhin wax hadhay. Waxay soo xirtay sariish fidsan oo leh duub waxayna sariirta hoosteeda ku siibatay. Sawirada ku jira websaydhka kuma haboona caruusadan. Sababta oo ah way ka qurux badan tahay sawirka. Qaado sanduuq budada galleyda ah iyo xoogaa yar oo biyo kulul ah si aad ugu duubto jilitaanka galmada, oo markaad diyaar u ahaato inaad wada joogtid, way diirnaan doontaa. Fadlan ku raaxee.
Taariikhda Added: 2019-06-05 06:04:09 waxaa qoray Thomas Henley
Tutor 168CM Odelette Becky Sex Doll Reviews Macaamiisha
Waxay u egtahay mid dhab ah, astaamaheeda waa kuwo aad u fiican, naasaha waa kuwo adag, dameerka yar ee fiican, si faahfaahsan, waad ogtahay. Tan waxaa laga sameeyaa qalabkan - istaarijka galleyda ayaa ah saaxiibkaaga ugu fiican. Iska ilow budada talcum. Ka dib marka la maydho, maqaarku xoogaa waa adag tahay in la taabto, fidiyo budada galleyda, maqaarkuna waa jilicsan yahay. Haddii aadan hubin maaraynta caruusad dhererkeedu dhan yahay 168cm, midkood ayaa aad loogu taliyay. Wejigu aad buu u qurxan yahay, baalasha indhaha ee dhabta ah waxay ka kooban yihiin indha-sarcayaal. Ku jilitaanka galmada wuxuu ku leeyahay dun dun ah madaxa haddii aad rabto inaad la jaanqaado jirka.
Taariikhda Added: 2019-06-05 05:55:33 by Calvin Dunbar
Indhaha Buluugga ah 148CM Renee Raymond Sex Doll Reviews Macaamiisha
Iyadu waa qurux badan oo culus, waa caruusad bilow ah oo weyn. Tani waa wax weyn. Maaha qaar dhadhamka caagga ah ee raqiiska ah sida warshadaha kiimikada. Wejigu aad buu uqurux badan yahay, baalashaha dhabta ah waxay ka kooban yihiin eyeliner. Waxaa jira tiir dun ah oo madaxa ah haddii aad la jaanqaadayso jirka. Qoorta jirku sidoo kale waa la fidiyaa si aad madaxaaga ugu janjeedho dhinaca hore ama dhinaca (aan la rumaysan karin). In kasta oo ay culus tahay, aad ayaan ugu faraxsanahay in aan tan helay oo waxaan heli doonaa cabbir buuxa jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-05 05:47:39 by Enoch Nancy
Fat Ass 168CM Ronald Rebecca Sex Doll Reviews Macaamiisha
In kasta oo ay culus tahay, laakiin iyadu ay aad u culus tahay, haddana aad baan ugu faraxsanahay in aan tan helay, waxaan heli doonaa doll cabbirkoodu dhan yahay, laakiin waxaan maqlay inay ku adag tahay in la maareeyo, waxaan qiyaasi karaa sida caruusad gacmaha iyo lugaha leh ka culus. Tani waxay leedahay jir qalfoof bir ah oo leh madax culus. Wax cabasho ah haba yaraatee majiraan. Waxaan ku soo galay sanduuqa oo dhan, laakiin xitaa sanduuqa asalka ah waxaa lagu sameeyaa oo keliya Shiinaha. Wig waa timo dhaadheer. Aad ayaan ugu qanacsanahay midabka maqaarka ee caruusadda galmada, taas oo ah midabka madow ee aan doonayo. Haddii saaxiib igu wareegsan uu doonayo inuu iibsado a jilitaanka galmada, Waxaan kula talin doonaa urdolls iyaga.
Taariikhda Added: 2019-06-05 05:37:45 by Rudolf Julius
Naaso Yar 145CM Roberta Bulwer Sex Doll Reviews Macaamiisha
Caruusadan galmada ah waa goolhaye, waxaan jeclahay sheekadeeda asalka ah, qiimaha lacagta. Maqaarkeedu wuxuu dareemayaa wanaag iyo qurux. Way ka weynaan kartaa wejigeeduna wuxuu u ekaan doonaa qaan gaar. Isku soo wada duuboo, way fududahay in la isticmaalo waxaana lagu keydiyaa si taxaddar leh. Waxaan kula talin lahaa qof walba. Qiimaha mar kale waa tayo la yaab leh. Waxay leedahay jidh wanaagsan iyo weji sifeysan, madaxa dollkuna waa qurux badan yahay, waana jilicsan yahay; ah jilitaanka galmada wuxuu leeyahay jidh wanaagsan waana u weyn yahay sida sharraxaadda.
Taariikhda Added: 2019-06-05 05:26:31 by Dominic Faulkner
Timo Madow 125CM Arlene Dunbar Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Caruusadani waxay leedahay jidh wanaagsan iyo weji jilicsan. Madaxa caruusadda ayaa qurux badan oo jilicsan. Jidhka caruusadda ayaa aad u wanaagsan qaabkiisuna waa u weyn yahay sida sharraxaadda loo bixinayo. Waad ku mahadsan tahay naqshadeynta miisaanka fudud, markaan nadiifinayo oo aan dayactirayo, waxaan ku qaban karaa caruusadda hal gacan. Ka dib markii ugu horeysay ee la maydho, urta TPE waxay ahayd mid aan jirin. Haddii aad rabto inaad dhigto doll-ka intaad seexanayso, dooro mid weyn jilitaanka galmada taasi way ku filan tahay inay kaa dhigto inaad dareento inaad sudhan tahay jirka dhabta ah.
Taariikhda Added: 2019-06-05 05:19:24 by Noah Chaucer
Timaha Gray 160CM Norton Dickey Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Dib-u-eegista hore ka dib, iibiyuhu wuxuu soo diray emayl ku saabsan cilladaha midabaynta oo wuxuu aad u doonayay inuu xalliyo dhibaatada asagoo diraya ranji. Ha ka fileynin taageerada macaamiisha ee la midka ah. Xaqiiqdii waxay u qalantaa shaashadda / qaabka tayada tayada leh ee shan-xiddigle iyo taageeradooda gaarka ah. Tani waa badeecad aad u wanaagsan haddii aad haysato meel aad ku kaydiso oo kuwa kale aysan ka heli karin. Waan iibsan doonaa jilitaanka galmada halkan mar labaad, iyo culeysku wuxuu noqon doonaa tixgelinteyda koowaad.
Taariikhda Added: 2019-06-05 05:09:33 by Zara Ruth
Cute 148CM Laura Charlotte Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Tani waa badeecad aad u wanaagsan haddii aad haysato meel aad ku kaydiso oo kuwa kale aysan ka heli karin. Cabashadayda kaliya ayaa ah inay ka yartahay waxa dhabta ah wajiguna kayaryahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan yeesho jir ka weyn iyo weji yara bislaaday, laakiin waan fiicanahay. Waxaa jira dhibaatooyin yar oo la xiriira isticmaalka siilka iyo daloolka dabada - kaliya "Sideen u dhigaa caruusadda si tan loo sameeyo", laakiin waa iftiin ku filan in la isticmaalo. Isku soo wada duuboo, waa tayo sare jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-05 04:58:53 by Meredith Malthus
Caato Dheer 155CM Cynthia Hood Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Guud ahaan, tan ayaa gebi ahaanba la filayaa, iyada oo aan wax cabashooyin ahi jirin. In ka badan 5 xiddigood ayaa jecel waxyaabahaas. Tani waa badeecad aad u fiican, aadna u macquul ah. Maqaarku wuxuu dareemayaa fiicnaan, sidaan idhi, caruusadu waa wax macquul ah! Waxay umuuqataa mid dhab ah. Taabashadu way ka fiican tahay isticmaalkeeda. Qalbigu waa dhab - mararka qaarna wuu ka fiican yahay kan dhabta ah. Haddii ay mid kale bilaabaan jilitaanka galmada taas ayaa i xiiseysa, waan ku farxi lahaa inaan markale ganacsi la yeesho!
Taariikhda Added: 2019-06-05 04:48:01 by Dave Alick
Muruqyada bowdada 163CM Marcia Margery Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Xaqiiqdii waa qiimo iibsi. Tayada caruusadda lafteedu aad ayey u wanaagsan tahay, laakiin sax ma aha qurux ahaan farqiga u dhexeeya midabka awgood. Qayb kasta oo lagu muujiyo inay tahay "casaan" midab ma yeelan doono. Markaa waxaad kaliya eegaysaa midabada jidhka. Haddii kale, caruusaddu waxay leedahay tayo sare marka loo eego qaabka iyo caaryada. Wejiga sawirka waa sax. Qiyaasta caruusadaha galmada ayaa la xakameynayaa. Waxay si fudud u noqon laheyd 5 xiddigood, marka laga reebo been ka sheega midabada. Qodob kale oo ah in la xuso ayaa ah inay dhab ahaan culus tahay. Dhaqdhaqaaqa jilitaanka galmada, waxay qaadatay ku dhowaad dhammaan xooggaygii.
Taariikhda Added: 2019-06-05 04:28:15 by Zachary Moore
Kubadda Cagta Baby 158CM Caroline Judson Sex Doll Reviews Macaamiisha
Caruusadaha jinsiyeed ayaa ka fiican saaxiibadayda hooseeya! Weyn, waxaan iibsaday doll dhameystiran hadda. Waayahay, waxaan adeegsanayay qaabkan dhawr bilood. Xaaladda heeganka ayaa aad u wanaagsan. Waxay umuuqataa mid dhab ah. Taabashadu way ka fiican tahay isticmaalkeeda. Qalbigu waa dhab - mararka qaarna wuu ka fiican yahay kan dhabta ah. In kasta oo biyo raaciyuhu laftiisu aad u jilicsan yahay, haddana way iska fududahay in lagu nadiifiyo dareeraha biyo raac ee la socda. Dhowr adeegsi ka dib, wuxuu u qurux badnaa sidii markii u horreysay oo uu yimid oo kale, mana aanan ka walwalin. Ka dib isticmaalka soo noqnoqda iyo nadiifinta, wax cillad ah oo maqaarka ah lagama helin jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-05 04:19:24 by Gerald Yale
Soo jiidashada 158CM Qing Xue Sex Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan siinayaa caruusadan A +, laakiin marka lagu daro caruusadda, iibiyuhu sidoo kale wuxuu leeyahay adeeg macmiil oo weyn! Marka laga hadlayo su'aasha caruusadda, way ka jawaabi karaan su'aashayda isla markiiba. Haddii ay soo saaraan shey kale oo cusub oo aniga i xiiseynaya, waan ku farxi lahaa inaan markale ganacsi la yeesho! Waxay i siiyeen adeeg macmiil oo weyn! Marka caruusadda galmada waxay u egtahay sidii aan ka fikiray. Marka hore waxay umuuqataa mid qaali ah, laakiin sheygu wuxuu u dhigmaa kan qaaliga ah jilitaanka galmada, ha ka waaban, waligaa kama qoomameyn doontid daawashada, sida aniga oo kale
Taariikhda Added: 2019-06-05 04:11:15 by Bernard Geoffrey
Faallooyinka Master 158CM Hannah Sassoon Dib u eegista Macaamiisha Doll
Tani waa caruusad tayo leh! Waxaan u maleynayaa, markaan dalbado iyada, waxay qaadan doontaa ilaa 10-15 maalmood Shiinaha. Hadda si dhakhso ah ayey u rartaa Wow, tani waa caruusadda galmada ugu fiican ee aan abid arko! Farsamo-yaqaan heer sare ah! Raggaani waxay yaqaanaan sida loo sameeyo caruusadaha! Taabashada caruusadda iyo dareemiddiisu waa wax aad u macquul ah oo urteedu way wanaagsan tahay. Naasaha waa kuwo aad u wanaagsan, weyn oo ruxmaya, miskaha waa kuwo aad u jilicsan qalabkuna sifiican ayuu u socdaa. Way adkaan kartaa in lagu arko sawirka, laakiin waxay leedahay madax furi kara oo aad waxtar ugu leh qaadista iyo dhaqaaqa jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-05 04:02:38 by Drew Harold
Eye Cagaaran 158CM Martina Walpole Sex Doll Reviews Macaamiisha
Caruusadan galmada waxay leedahay muuqaal iyo dareen layaableh. Labaduba waa macquul. Ha noqon mid cabsi badan oo weydiiso sawirro. Boombaladdu waxay umuuqataa sawir (yaraynta dharka loo soo dirayo si aan kala sooc lahayn). Boombalaha dhererkiisu waa 158 cm. Maqaar cad oo jilicsan oo aan dhegdheg lahayn. Cagaha taagan waa waajib. Faahfaahinta sare ee jirka, gacmaha, cagaha laakiin kuma jiraan siilka. Waxaa jira tilmaam faahfaahsan laakiin maqan. Madaxa dollkeyga wuu ka yar yahay madaxa ay tahay inay keento, laakiin waxyaabaha aan sameeyo waa sax. Afka ayaa laga xidhay warshadda. Waxaa lagu furi karaa adiga oo si tartiib ah bushimaha iyo faraha faraha leh u jiidaya dhanka kore. Si kastaba xaalku ha ahaadee, daloolka afka ee jilitaanka galmada aad ayuu u yaryahay.
Taariikhda Added: 2019-06-05 03:53:56 by Bruce Pearson
Lug Dheer 165CM Belinda Dickens Dib u eegista Macaamiisha Doll Doll
Aad bay ufiican tahay marka caruusadu timaado! Inta badan sida sawirada, iibiyeyaashu waa kuwo xasaasi ah oo waxtar leh. Tayo wanaagsan ayaa lagula talin doonaa dadka ku hareeraysan. Cabbirka caruusadda ayaa u dhiganta gabadha 18-jirka ah. Wanaag igu filan, caruusadeyda kale waa 5ft 2 inch doll doll culus oo cufan, oo qiyaastii ah 120 rodol, marka tani waa ficil fiican, goobtu waa mid aan dhammaad lahayn. Waxaa laga yaabaa in jimicsiga 21 jirka ah ee Shiinaha uu yahay isbarbardhig ka wanaagsan. Waxay i siiyeen adeeg macmiil oo weyn! Markaa jilitaanka galmada ayaa kafiican sidii aan moodayay.
Taariikhda Added: 2019-06-05 03:45:39 by Bert Ingersoll
Dhexda Yar 150CM Pamela Spender Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxay i siiyeen adeeg macmiil oo weyn! Marka caruusadda waxay u egtahay sidii aan ka fikiray. Waxaan kala soo baxay sanduuqa, oo aan dhigay geeska sariirtayda, oo aan gacanta gadaal saaray si aan ugu riixo meel fadhida. Waxay si fiican u awood u leedahay inay sawir u dhigto si kasta oo ka mid ah fikirradayda, way fiicantahay Tani waa a jilitaanka galmada oo aan wax dhibaato ah qabin. Adeegga macaamiishu aad buu u wanaagsan yahay. Waxaan kula talin doonaa urdolls dadka igu xeeran.
Taariikhda Added: 2019-06-05 03:38:17 by Tab Gregory
Booliska Naasaha Yar 158CM Adolph Joule Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Iyadu waa guri socod buuxa! Runtii waan jeclahay caruusadan galmada. Haddii aan siin karo 6 xiddigood, waan doonayaa. Waxay timid ka hor sidii la filayay. Wax walba waxay ku jiraan xaalad qumman. Waxaan jecelahay inaan soo raro wig iyo nigis. Waqti yar ayaan ka maqnaa xaaskeyga waxaanan ka walwalayay gaalnimo. Iibsigan, dhammaan cabsida aan qabo waa la nastay. Xaqiiqdii waan kula talin doonaa caruusadan qofkasta oo maskax furan. Nasiib darrose, waan dhayalsaday baaxaddeeda, sidaa darteed si taxaddar leh u safridu waxay caddaynaysaa inay caqabad tahay. Si kastaba ha noqotee, jilitaanka galmada waa u qalantaa dinaar kasta.
Taariikhda Added: 2019-06-05 03:30:49 by Kim Dutt
Bushimaha qaro weyn 158CM Ophelia Evans Sex Doll Reviews Macaamiisha
Haddii aanad khibrad u lahayn nooc kasta oo ka mid ah wax soo saarka dadka waaweyn, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho ciyaal yar yar, oo la ilaalin karo oo jinsi ah si aad ula qabsato. Caruusadan waa mid macquul ah ... u oggolaanaysa inay boor aruuriso waxay ka dhigeysaa iyada dareen aad u qariib ah. Ka fikir sida shey qalaad ama alaab guri! Haddii tani ay tahay iibsigaagii ugu horreeyay, waxaan u maleynayaa in la shaqeynta urdolls ay tahay xulasho wanaagsan. Way fiicantahay, sida iibiyuhu ku sifeeyey. Waxay yiraahdeen waxay ku bixiyeen tamar badan sidii ay uheli lahaayeen jilitaanka galmada qurux badan oo ay saxsanaayeen.
Taariikhda Added: 2019-06-05 03:24:24 by Nigel Zimmerman
Dhexda Yar 150CM Edwina Lawson Dib u eegista Macaamiisha Doll Doll
Baakadaha caruusadaha lagu galmoodo waa kuwo si khaas ah u shaqeeya oo UPS si wanaagsan u maamusho. Khasaaraha kaliya ee halkan ka jira ayaa ah inaad habeyn yar ku leedahay astaamaha qaarkood (sida kuleylka), laakiin haddii aad faallo ugu dirto iibiyaha waxaan hubaa inay la qabsan karaan doorbidyada qaarkood. Haddii tani ay tahay iibsigaagii ugu horreeyay, waxaan u maleynayaa in la shaqeynta urdolls ay tahay xulasho wanaagsan. Marka hore waxay umuuqataa mid qaali ah, laakiin sheygu wuxuu u dhigmaa kan qaaliga ah jilitaanka galmada, ha ka waaban, waligaa kama qoomameyn doontid daawashada, sida aniga oo kale.
Taariikhda Added: 2019-06-05 03:16:23 by Corey Waters
Dib u eegista Macaamiisha 165CM Meredith Wallace Sex Doll Doll
Way u qalantaa qiimaha! Sida kor ku xusan, sheygu waa dhakhso oo dhakhso badan. Marka side sida FedEx uu la yimaado doll, hubi inaad joogto guriga. Waxaan halkan ku soo lifaaqayaa sawir tusaale ah. Waxaan ka helayaa caruusado kale urdolls, laakiin kani waa weji i dareensiinaya inaan aad u qurux badanahay. Ma leh dharka halkaan lagu muujiyey, laakiin waxaad heli kartaa wax galmo ah jilitaanka galmada halkaan ka imid aniga oo kale. Farxaddayda, waxaan ilaaway inaan ku daro in adeegyadooda macmiil ay weyn yihiin.
Taariikhda Added: 2019-06-05 03:08:25 by Yehudi Antonia
Injineerka 170CM Stephanie Alick Sex Dib u eegista Macaamiisha
Ka dib markaan akhriyay qaar ka mid ah fagaarayaasha ku saabsan xakamaynta tayada caruusadaha jinsiga, waxaan markii hore ka gaabsaday inaan ka iibsado urdolls, laakiin waxaan siiyay shan xiddig xilligan. Way adag tahay in la aamino inay aad u jaban tahay marka loo barbar dhigo cutubyada la midka ah ee dukaamada kale. Ma aha in la xuso xaqiiqda ah in maalinta ku xigta la dhaafay dahab. Tafaariiqleyda badankood waxay leeyihiin waqti u wareegidda 4-6 toddobaad. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan doortay caruusadan galmada. Boombalada ayaa sida saxda ah ugu muuqata sawirka! Dabcan, sawirradan sidoo kale waxay leeyihiin iftiimooyin fara badan iyo raadadka sooyaalka, laakiin muuqaalka sidoo kale waa iska cadahay. Tani jilitaanka galmada ayaa igu habboon.
Taariikhda Added: 2019-06-05 02:58:40 by Lambert Billy
Timo Jaale Dheer 170CM Mavis wuxuu Gubtaa Dib u eegista Macaamiisha Jinsi Doll
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan doortay caruusadan galmada. Boombalada ayaa sida saxda ah ugu muuqata sawirka! Dabcan, sawirradan sidoo kale waxay leeyihiin iftiimooyin fara badan iyo raadadka sooyaalka, laakiin muuqaalka sidoo kale waa iska cadahay. Buska ayaa ka weyn sidii aan filayey, laakiin aad baan ula yaabay. Boombalada sidoo kale waxay ku habboon tahay jirkeyga joodariga, oo leh 23-inji farqi hoose. Waan hayey suufka xumbada ee ay soo gashay, markaa way fududahay in iyada loo raro rooga iyada oo aan waxyeello loo geysan caruusadda. Haysashada tabe laga yaabo inay dadka qaar tahay, sidaa darteed qorshaynta ku saabsan kaydinta iyo asturnaanta ayaa ah laba tallaabo oo wanaagsan ka hor intaan lulmayn (laakiin ha u dhimin sharafta jilitaanka galmada, Kaliya ku qariso meel kasta oo iyada ka mid ah!).
Taariikhda Added: 2019-06-05 02:50:45 by Len Carter
Dambiyada Crazy 170CM Xaviera Jane Sex Doll Reviews Macaamiisha
Marka caruusadda waxay u egtahay sidii aan ka fikiray. Waxaan kala soo baxay sanduuqa, waxaan saaray geeska sariirtayda, gacanta ayaan saaray dhabarka waxaanan u riixay dhanka fadhiga, xubnaheeda way ka adag yihiin sidii aan islahaa. La hadal waaxda adeegga macaamiisha waxayna ii sharraxaan caruusadaha oo fududaan doonta in la isticmaalo muddo kadib. Waxaa soo baxday inay tahay. Midkani wax dhibaato ah ma qabo. Adeegga macaamiishu aad buu u wanaagsan yahay jilitaanka galmada wakaalada ganacsiga. Waxaan jeclaan lahaa dadka igu xeeran inay shirkada kula taliyaan.
Taariikhda Added: 2019-06-05 02:38:45 by Rodney Geordie
miisaanka! Tani waa caruusad jinsiyeed oo u muuqata mid ka qurux badan sawirka. Waa sida saxda ee iibiyuhu ku sifeeyey. Haddii daloolka farxaddu ku sugan yahay meesha saxda ah oo aan sidaas u fogeyn, markaa 5 xiddig ayaa la siin doonaa. Intaa waxaa dheer, iibsigu wuxuu ahaa mid aad u qanacsan. Wax badan ma ay hadlin, laakiin waligeed ma doodin. Madaxeedu wuu kala duwan yahay oo waa in la adkeeyo, laakiin way fududahay. Aad u qanciya. Tani waa caruusad jinsi ah oo dhab ah oo aan waligay arkay. Halkaan aan ka fahmo in iibsashada caruusadaha galmada aysan ahayn mid dhib badan, iyo jilitaanka galmada aad uga sarreeyaa filashadayda xagga tayada.
Taariikhda Added: 2019-06-05 02:29:59 by Hugh MacArthur
Casaanka Ibta 158CM Tess Jessie Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Faalladaydu waxay u ekaan kartaa xoogaa la yaab leh. Caruusadda jinsiyeed waa qumman tahay, tilmaamnaheeda noocyadeeda kala duwan, way culus tahay, naasaha waxay u egyihiin xoogaa xoog badan, laakiin waa koobabka C. Mararka qaar waxaan dareemaa inay i fiirineyso, sida sawirada qaar aan rabo, wejigeeda fiirinaya, waxay umuuqataa dhoola cadeyn yar. Wadahadalkeedu ma badna, laakiin weligeed ma doodin. Madaxeedu wuu kala duwan yahay oo waa in la adkeeyo, laakiin way fududahay. Aad u qanciya. Tani waa wax dhab ah jilitaanka galmada Weligay waan arkay.
Taariikhda Added: 2019-06-05 02:21:36 by Hardy Ford
Brown Curly Hair 165CM Setlla Noel Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Caruusadan jinsi ahaaneed horay ayey u timaadaa, sida xayeysiinta oo kale. Ka dhakhso badan sidii la filayay. Sidoo kale waa mid culus sida ay sheegtay. Sababta aanan 5 xiddig u siinin ayaa ah: Waxaan amar ku bixiyay inay imaanayso Sabtida, marka qof baa gurigiisa tagi doona markuu yimaado, inta badan balbaladayada. Ma aanan sameyn maxaa yeelay waa xayeysiin, laakiin naasaha ayaa jilicsan laakiin adag. Waxaan jeclaan lahaa inaan yara yaraado. Dhammaan alaabtu waxay ku jiraan sanduuqa iyo kan jilitaanka galmada yimaado isla waqtigaas.
Taariikhda Added: 2019-06-05 02:12:05 by Tim Nora
Timo Madow Oo Dheer Oo Madow 165CM Harvey Josh Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Qaar ka mid ah cilladaha dusha sare ee ay leedahay. Laakiin guud ahaan waa wax lagu qanco! Aad u qurux badan oo si fiican ugu habboon sawirada. Nacaybka ugu weyn ayaa ah in gacmaha iyo cagaha xoogaa jilicsan yihiin. Laakiin xaqiiqdii waa u qalantaa lacagta! Her dekedda interface waxay waxyar u dhigantaa dhiggeeda dabiiciga ah iyo marin u helisteeda ayaa si khaldan loogu talagalay. Iyadu waa hadiyad sidaas macquul ah, waxaan tixgelin doonaa iibsashada jilitaanka galmada markale halkan.
Taariikhda Added: 2019-06-05 02:01:28 by Grover Gibbon
Lugaha Dheer 163CM Chasel Edison Sex Doll Dib u Eegista Macaamiisha
Halkan waxaan ku ogeysiinayaa in iibsashada caruusaddu aysan ahayn mid dhib badan, oo ka fog filashooyinka aan ka qabo tayada. Waxay u egtahay midka sawirka timaha laga jaray. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo yar oo aad u baahan tahay inaad ka feejignaato. Midda hore waxay tahay inay aad u culus tahay una maleyneyso inay shaqeyso. Haddii aad ku riyootid wadahadal degdeg ah, tuuji iyaga. Kahor intaadan ku raaxaysan, waxaad u baahan tahay inaad qorshaysato, is dhigto, tijaabiso oo aad la qabsato. Caruusada galmada leeyihiin timo dhaadheer, oo ka duwan sawirada, laakiin isku midab ah. Dukaan raaxo leh.
Taariikhda Added: 2019-06-05 01:53:14 by Cumar Louisa
Dibno qaro weyn 165CM Prima Bess Sex Doll Reviews Macaamiisha
Taasi waa taas. Wax badan ayaan ka bartay anatomy-ka dheddigga ee caruusadan galmada, oo aanan weligay hore u aqoon. Waxay u keentaa madadaalo qoyska oo dhan! Waxyaabaheeda cajiibka ah ee u qalma dinaar kasta ayaa la kulma waxyaabaha aan filayo. Mashruuca la helay wuxuu ahaa mid aad u dhakhso badan, sida lagu sharaxay. Caruusadaha galmada waxaa lagu ridayaa sanduuq aan calaamadeysneyn waana sahlan tahay in la isku dhejiyo. Markaad iibsaneyso tan jilitaanka galmada, Xusuusnow in culeyskiisu yahay 74 rodol. Miisaanka ugu fiican "dhintay" ee aad la kulmi doonto.
Taariikhda Added: 2019-06-04 06:19:41 by Angelo Carroll
Dib u eegista Hip 161CM Gilbert Wat Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Marka la soo koobo, runtii waan ku faraxsanahay, haddii aad rabto doll, kuma hungoobi doontid urdolls. Waxyaabaha ay tahay inaad ogaato ..., sidaan idhi, iyadu waa culus tahay, sidaa darteed waxay ku qaadataa waqti yar in ay dhaqdhaqaaqdo ..., faraha iyo suulasha aad bay u jilicsan yihiin maxaa yeelay waa uun TPE khafiif ah, marka waxaad u baahan tahay inaad ka taxaddarto , caruusadaha waxay ku negaadaan heerkulka qolka, haddii aadan haysan budada ilmaha, waxay ka dhigi doonaan inay dareemaan xoogaa qabow qoyan ..., kala-goysyadu aad bay u adag yihiin laakiin way nasanayaan ka dib markaad xoogaa dhaqaajiso. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan iibsado tan jilitaanka galmada. Kama waaban doono inaan kula taliyo dadka igu xeeran.
Taariikhda Added: 2019-06-04 06:12:22 by Jeffrey Michael
Slim Body 161CM Ursula Surrey Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Dhawr maalmood ka hor ayaan helay ciyaalkan galmada, daryeelkeedu waa mid aad u fudud ... ku dhaq saabuun iyo biyo, ka dibna ku sii qalaji budada ilmaha oo jilicsan. Haddii aan rabo inaan lalo, waxaan u isticmaali doonaa bustayaal koronto si aan u kululeeyo ... Waa inaan qiraa inaan isku dayay iyada oo ah caruusad jacayl oo ay tahay mid macquul ah. Nadiifintu ma aha mid aad u xun maxaa yeelay waxay soo diraan dhalo tuujin ah oo tuuraya dhalada. Waxaan jeclahay inaan labisto iyada, kaliya daawashada sida ay u qurux badan tahay. Marka waad arki kartaa sida aan u labisto tayda jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-04 06:05:15 by Franklin Toby
Dhex-dhexaad yar 140CM Penelope Raglan Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Boomadan waa mid weyn, laakiin kala-goysyadu aad bay u adag yihiin, way adag tahay in la dhaqaajiyo, madaxa way adag tahay in lagu daro, laakiin ma jirto dhibaato weyn oo dhab ah, waxay umuuqataa sawir aan si buuxda ugu qancay. Ku talin lahaa saaxiib. Haddii aad raadineyso toy galmo, tani waa badeecad si fiican loo sameeyay, iibiyaha ayaa aad ugu faano adeegga macaamiisha. Waxaan jeclahay inaan labisto iyada, kaliya daawashada sida ay u qurux badan tahay. Waad ku mahadsantahay jilitaanka galmada adeegga aad i siisay.
Taariikhda Added: 2019-06-04 05:56:37 by Merle Rhys
Iskudhicii Butt 140CM Debby wuxuu Qoray Dib u eegista Macaamiisha Doll
Waad arki kartaa in natiijooyinkeedu ay aad u wanaagsan yihiin, waxaan ugu magac daray saaxiibadayda koowaad. Runtii, waxay ka dhigtay inay dareento xoogaa qariib ah markii hore, laakiin si dhakhso leh ayaan ula qabsaday. Iyadu way joogtay markaan seexanaayay, way joogtay markaan kacaayay ... Waxaan xiraa dhar kala duwan todobaad kasta ... Waxay xidhantahay bajaamadeeda oo gashan nigiskan cudbiga ah. ... waxay jeceshahay dharka hurdada. Iyadu waa qof aad u wanaagsan jilitaanka galmada. Aad ayey u qurux badan tahay oo aad u qurux badan tahay sidii aan rajaynayey. Mahadsanid.
Taariikhda Added: 2019-06-04 05:48:01 by Hamiltion Nixon
Timo bunni 163CM Letitia Huxley Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Caruusadan jinsi ahaaneed waxay ku timid mudo gaaban ... Waa sanduuq caadi ah oo ay ku dul qoran yihiin astaamo shiineys ah, laakiin taasi waa taa. Sidoo kale waa mid aad u culus ... uguyaraan 65 rodol, sidaa darteed haweeneyda noocaas ah ee macquul ah, way socotaa aad u culus, laakiin ma noqon doonto mid aad u xun. Timaha timaha lagu wareejiyo waa kuwo wanaagsan ... laakiin dharka hoostiisa ee xiisaha leh ayaa ah qashin ... iyo baaritaanka kuleylka yar yar ee godadka ayaan runtii shaqeynin. Haddii aad ku dhaafto meeshii xoogaa, waan iska tuuri karaa. Laakiin guud ahaan, kama qoomamo. Sababtoo ah tan jilitaanka galmada waa u qalantaa qiimaha.
Taariikhda Added: 2019-06-04 05:36:53 by Cumar Giles
Timaha Jaalaha ah 135CM Darren Fred Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Aan marka hore idhaahdo, waxaan aaminsanahay caruusadan inay u qalanto 2,700 US dollars + tag tag. Aad ayaan ugu qanacsanahay waxa aan helay, urdolls-ku aad buu ugu faraxsanahay inaan ka jawaabo dhammaan su'aalahaaga oo aan ka caawiyo si kasta, inkasta oo ay xallin karaan dhibaatooyinka ESL qaarkood. Waxaan kudarsanayaa sawiro si aad u aragto sida aan u labisto caruusadeyda ..., asal ahaan waan iibsaday iyada maxaa yeelay anigoo duq ah waxaan u xiisay haweeney xaafada ka hadlaysa markaa waxay ii noqon doontaa "Wilson" (filimkii Castaway ee Tom la socday Hanks) ... Haddii aad ogtahay waxa aan ula jeedo, runti ma doonayo inaan ku sii adkeysto. Waxaan aad u xiiseynayaa inta jilitaanka galmada waa.
Taariikhda Added: 2019-06-04 05:29:27 by Sandy Will
Dib u eegista Sexy Wide Ass 169CM Basil Eveline Sex Doll Sex
Wanaagsan, sida saxda ah ula mid ah xayeysiinta. Waxay bixiyaan adeeg macaamiil weyn! Amar ayaan dhigay Sabtidii, waxay timid jimcaha soo socda, markaa waxaan soo gaadhay albaabkayga lix maalmood. Guud ahaan, aad ayaan ugu qanacsanahay iibsigan. Boombaladdu waa qumman tahay, maqaar jilicsan Kaliya waxaan qiimeeyay afar xidig maxaa yeelay timaha iyo qalabyadu way ka duwan yihiin laakiin waan ogahay inay soo gali doonaan. Adeegga macaamiisha ayaa aad u wanaagsan. Waxay ka wada jawaabeen su’aalahaygii oo dhan xitaa waxay bixiyeen casriyeynta caruusadaha oo qiimo jaban. Xaqiiqdii waan iibsan doonaa jilitaanka galmada ka urdolls markale. Wax walba waa weyn yihiin oo la awoodi karo.
Taariikhda Added: 2019-06-04 05:20:31 by Elton Collins
Falanqaynta Astronomy Xamaasadda 168CM Deborah Johnny Sex Doll Macaamiisha Dib u eegista
Waxaan raadinayay inaan iibsado caruusadaydii ugu horeysay dhawr sano. Samee liistada caruusadaha, akhri faallooyinka, fiiri fiidiyowyada YouTube, iyo inbadan. sikastaba. Waxaan ogaaday tan iyo markii aan ku daray liiskeyga, qiimaha caruusadan inay si weyn hoos ugu dhacday, sidaas ayaan ku tegey. Waxaan helay sawir lamid ah kan sawirka. Isla madaxa / xiirka iyo jirka. "Random" wali waa xarig cad (kaydka lama hayo). Kululeeyaha aad buu u shaqeeyaa. Xirmada ayaa ku timaada waqtigeeda, iyo jilitaanka galmada waa sida lagu tilmaamay.
Taariikhda Added: 2019-06-04 05:13:29 by Christian Temple
Dhoolacadeynta Angel 166CM Jamie Jacob Sex Doll Reviews Macaamiisha
Xawaaraha gaadiidku waa mid aad u dhakhso badan waxayna umuuqataa in sawirka uu adeegsanayo timo kala duwan iyo marada. Waxay sheeganeysaa inay tahay 73 rodol (38 kiilo garaam). Dhaqdhaqaaqyo dhib leh, laakiin guud ahaan waa doll aad u qurux badan. Way xoogaa culus tahay, way adag tahay in la shaqeeyo marka hore, laakiin muddo ka dib way is rogrogtaa, waxa ugu muhiimsan ayaa ah waxaan dhihi lahaa waa wax weyn. Caruusadda waa gabi ahaanba macquul oo aad ayaan u faraxsanahay. Ma sugi karo inaan iibsado kan xiga jilitaanka galmada, Hubaal waan ka iibsan doonaa iibiyahan.
Taariikhda Added: 2019-06-04 05:04:59 by Bart Lincoln
Timo Madow 110CM Fan Jiang Lizi Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Caruusadaha si fiican loo sameeyey, sida dadka nolosha. (Fiiri sawirka) Ha noqon mid aad u culus. Kala-goysku wuxuu leeyahay qadar adag oo qallafsanaan ah. Laakiin iyadu sidoo kale waxay leedahay cillado: addimmadeedu way adag yihiin, nasiib wanaagse way fududaatay in la isticmaalo muddo ka dib. Jidhku waa mid aad u kulul oo aad u fudud. Waxay aad u feejignaadaan oo saaxiibtinimo ku leeyihiin waaxda adeegga macaamiisha, sida kor lagu sharaxay 100%. Hesho jilitaanka galmada sida lagu sharaxay oo si fiican u rar.
Taariikhda Added: 2019-06-04 04:57:24 by Conrad Clara
Timaha Madow ee Madow 170CM Sibyl Tracy Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Markii ugu horeysay ee aan arko caruusadda, waxaan arkay kaliya kun qof. Kadib sii wad urdolls, waan arkay kan. Waan ka shakisanahay qiimaha, laakiin ugu dambeyn waan iibsaday, waana ku faraxsanahay inaan sameeyay. Waxaan haystay caruusadan qiyaastii 4 bilood, wax walbana wali way fiican yihiin. Caruusadda waa gabi ahaanba macquul oo aad ayaan u faraxsanahay. Ma sugi karo inaan iibsado midkeyga soo socda, xaqiiqdii waan ka iibsan doonaa iibiyahan. Ma igula talin kartaa a jilitaanka galmada leh astaamo?
Taariikhda Added: 2019-06-04 04:45:53 by Lynn Spencer
Wajiga Cute 132CM Rodney Charlotte Dib u eegista Macaamiisha ee Doll Doll
Caruusadda waa gabi ahaanba macquul oo aad ayaan u faraxsanahay. Ma sugi karo inaan iibsado midkeyga soo socda, xaqiiqdii waan ka iibsan doonaa iibiyahan. Tani waa badeecad si fiican loo sameeyay iibiyahana wuxuu aad ugu hanwayn yahay adeegga macaamiisha. Waxaan jecelahay inaan labisto caruusad jinsi ah, kaliya fiiri sida ay u qurux badan tahay. Aniga ahaan, waxay leedahay timo bunni ah halkii ay ka ahaan lahayd cadaan (runti waan ka jeclahay), waxay leedahay indho bunni ah si looga hortago inay muhiim kuu ahaato. Dharka waa isku mid. Guud ahaan, aad ayaan ugu qanacsanahay iibsigan. Haddii aad go'aansato inaad tan iibsato jilitaanka galmada, ma hungoobi doontid.
Taariikhda Added: 2019-06-04 04:36:50 by Rex William
Haweenka Uurka Leh 160CM Yu Xuan Sex Doll Dib u Eegista Macaamiisha
Sawiradani cadaalad ma ahan Iyadu waa wehel weyn oo weheliso iyo wehel qurux badan oo guriga lagu aado. 100% waan ku qanacsanahay iibsashada. Sanduuqyadu waa kala duwan yihiin. Haddii aad raadineysid toy galmo, kani waa kan. Xagasha iyo qoto dheerku waa sax. Nadiifintu sidoo kale waa mid aad u habboon. Waxaan la yaabay taageerada ka dib iibsiga. Tani waa badeecad si fiican loo sameeyay iibiyahana wuxuu aad ugu hanwayn yahay adeegga macaamiisha. Waxaan jeclahay inaan labisto a jilitaanka galmada, bal u fiirso sida ay u qurux badan tahay.
Taariikhda Added: 2019-06-04 04:30:39 by Buundooyinka Archer
Big Belly 160CM Adam Harrington Dib u eegista Macaamiisha Jinsiga Doll
Marka horeba, waxay umuuqataa sawir. Qalabka wanaagsan, kaliya aqri sida loo daryeelo TPE. Ta labaad, waa mid aad u culus. Waan ka helaa kaftanka hooyaday. Dhinac, tani waxay adkeyneysaa dhaqaajinta. Dhinaca kale, waxay dareemeysaa wax macquul ah. Shakhsiyan, uma isticmaali doono caruusadan howlaha "gaarka ah". Saadka sida saxda ah loo nadiifiyey waxay noqon doontaa riyo cabsi leh. Sida lammaane habsi ah, tag. Sikastaba, caruusadan jinsiga ah waa intaan ubaahanahay. Waa mid taxaddar leh waana toban jeer sida aad u malaynayso. Waan jecelahay tan jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-04 04:20:13 by Robin
Timo Gaaban oo Fadhi ah 118CM Muriel Ubaxa Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Sikastaba, caruusadan jinsiga ah waa intaan ubaahanahay. Waa mid taxaddar leh waana toban jeer sida aad u malaynayso. Dhammaan kala-goysyada way dabcaan waqti ka dib waxayna noqdaan kuwo aad u fudud in la dhaqdhaqaaqo. Way culus tahay, laakiin waa la fahmi karaa. Hada hilibka iyo baradhada, waxay dareemeysaa galmada. Ha igu qaldan, noloshayda galmada waa mid aad u firfircoon, laakiin waxaan ahay askari, badanaana waan wareegaa. Waxaa laga yaabaa in qaladkan uu waalan yahay, ama taasi waa waqtiga bisha (ugu yaraan ma khiyaaneeyo). Xaqiiqdii waan ganacsi samayn doonaa. Iyagu aad bay xirfad u leeyihiin runtiina waxay kaa caawinayaan inaad hesho jilitaanka galmada waxaad u baahan tahay.
Taariikhda Added: 2019-06-04 04:12:15 by Wendell Woolley
Timo Madow Gaaban 140CM Tachibana Shinya Sex Doll Reviews Macaamiisha
Marka samee shaqada gurigaaga oo raac emailka hagaha adeegga macaamiisha. Isku soo wada duuboo, waxaan kugula talin lahaa badeecadan, qiimaha aan isleeyahay kama badnaan karo. Caruusada galmada naxdinta leh waa mid dhab ah. Waxay i siiyeen wax ka fiican sida la filayo iyo adeegga macaamiisha oo tayo leh. Waxaan kugula talinayaa in dharka laga caawiyo nadaafadooda. Waxaan sugay waqti dheer si aan u qoro ra'yigeyga, maxaa yeelay waxaan aqriyay in waxyaabahan ay ku burburi doonaan bil gudaheed. Tani run maahan gabi ahaanba ... ugu yaraan aniga ahaan. Tani waa wax ku ool ah jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-04 04:01:31 by Marico Ella
Timo Madoow 168CM Sheila Baldwin Sex Doll Reviews Macaamiisha
Kala-goysyada caruusaduhu waxay bixiyaan socodka saxda ah waxayna kusii nagaan doonaan meesha iyo booska. Wigyada iyo nigisyadu waa kala sooc, sidaa darteed hubi inaad la xiriirto iibiyaha ka hor intaadan dalban si aad u kala saarto. Waxaan sidoo kale kugula talinayaa inaad adeegsato korka madaxa iyo boodhadhka ganaaxa jirka ee ay ku bixiyaan keydinta. Caruusadda ayaa ku timaadda muddo gaaban, laakiin qalabka keydinta (oo markii dambe la dalbaday) wuxuu qaadan doonaa toddobaadyo 3-4 ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku daro xirmo daryeel (ama waxaa laga iibsan karaa iibiyaha) maxaa yeelay qaar ka mid ah nadiifiyeyaasha silicone, budada iyo saliidaha ayaa dhaawici kara jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-04 03:54:57 by Sebastian Sainsbury
Big Ass 161CM Agnes Antonia Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho buste kululaan si loo kululeeyo TPE ka hor intaan la isticmaalin. Nadiifinta iyo dayactirka waa mid aad u fudud. Haddii aad raadineyso dhar dheeri ah, waxaan u arkaa in gabdhuhu ay u muuqdaan kuwa ugu fiican, iyo cabirka haweenka ee 'XS' qaarkood ayaa sidoo kale ku habboon. Xaqiiqdii waan isticmaali doonaa oo waan kugula talin doonaa iibiyahan iyo caruusadda galmada mustaqbalka. Qalabka TPE waxay leeyihiin muuqaal macquul ah oo dareemaya bilaa xatooyo. Ka culus intii la filayay, laakiin tayada jilitaanka galmada ayaa ka fiican sidii la filayay.
Taariikhda Added: 2019-06-04 03:46:38 by Justin Bulwer
Slim Dheist 170CM Sigrid Hicks Sex Doll Doll Reviews
Aad bay u qurux badan tahay. Lagu gaarsiiyay waqtigeeda. Xoogaa culus, laakiin waxay siisay dareen nolol badan. Waxaan marwalba ku riyooday inaan iibsado caruusadahaan muddo dheer. Mahadsanid, amaan adeega macaamiisha ee cajiibka ah ee la bixiyay, waxay rabaan macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sheyga. Sidaa darteed, tayada dollku waa mid aad u wanaagsan, gaar ahaan qiimaha. Garbaha waxyar baa duugan, laakiin adeegga macmiilku wuxuu iga caawiyaa inaan dayactiro qalabka. Waan ku faraxsanahay inaan iibsado tan iigu horreysa jilitaanka galmada, taas oo xaqiiqdii lagula talin doono qof walba.
Taariikhda Added: 2019-06-04 03:38:45 by Bert Dickens
Timaha Jaalaha ah 161CM Roxanne William Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Sida tayada dolliska. Is-xirxirashada iyo baakadeynta waa sheeko ka duwan tii hore, malaha waa waxaan doorbidi lahaa inaan dib u eego TDF. Kama diidi doono urdolls-ka maxaa yeelay waa dillaaliin uun mana ahan wax ay maamuli karaan. Guud ahaan, aad ayaan ugu faraxsanahay inaan iibsado caruusadeyda dabeecadeyda koowaad waxaanan hubaa inaan qofkasta kula talin doono urdolls. Waxaan layaabay inay u egtahay sawir khadka tooska ah isla markiiba waxaad yeelan doontaa caan caan ah internetka. Sida dad badani ku xusan qaabkan gaarka ah, haddii aan iibsado mid kale mustaqbalka, waxaa laga yaabaa inaan doorto dab yar jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-04 03:13:05 by Yale Clapham
Timaha Madow 140CM XiaoMi Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Tani waa nooc caruusad jinsi oo weyn. Dhibaatada kaliya ayaa ah in diirada la saaro qurxinta, sida sawirada. Ma aqaano haddii aad ku cayiman karto waxyaabaha la isku qurxiyo ee ku yaal doll. Waxaan u maleynayaa sida ku xusan mid ka mid ah Sawirka. Way fiicnaan laheyd inaad ku darto kiis qurxin dheeri ah dalabka caruusadda sidaa darteed qofna ma tabi doono. Intaas aan ahayn, waa u qalantaa dinaar kasta. Caruusadan waa weyn tahay! Xaqiiqdii, iyadu aad bay u nooshahay, waxaa habboon in miisaan lagu daro. Waxaan tixgelin doonaa iibsashada jilitaanka galmada halkan mar kale.
Taariikhda Added: 2019-06-04 03:02:45 by Larry Caroline
Timaha Gray 140CM Jocelyn Cissie Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan go aansaday sida loola dhaqmo mustaqbalka jaceylka gabdhaha kale. Imtixaanka Jocelyn. Waxaan u baray Jocelyn si aan u arko waxa ay falcelintoodu ahayd. Haddii aysan iyada jeclayn, markaa mustaqbalka fog, waan ogahay hadda inaysan halkaas joogin. Haddii aysan u dulqaadan karin Jocelyn, markaa runti ima jeclaan doonaan. Way fududahay. Ha u oggolaan in qofna ku dilo ama ku diido dareenka aad u qalanto! Kaalay jilitaanka galmada maanta!
Taariikhda Added: 2019-06-04 02:52:54 by Dana Baker
Timo Madow 100CM Akumi Hakumi Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan gabi ahaanba sugayaa imaatinka caruusadan galmada, sida noloshayda jacaylka oo kale. Ka dib maalin maalmaha ka mid ah, qof ayaa dhab ahaan u qaatay xirmada 33lb seddex duulimaad oo galay gurigeyga, Ilaahna wuu nastay naftaan masaakiinta ah ee gaarka loo leeyahay. Wuxuu xitaa weydiiyay haddii aan u baahdo caawimaad si aan ugu dhigo meel ka mid ah gurigayga. Waxaan helay doll-ku waqti aad u badan. Caruusadda waa mid aad u wanaagsan taabashaduna waa mid macquul ah. Waxaan u maleynayaa inaan runtii jeclahay tan jilitaanka galmada si aan u raaco.
Taariikhda Added: 2019-06-04 02:43:55 by Brady Josh
Dhexda Yar 165CM Jessie Dunbar Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan ku arkay boggag internet doll badan oo shaqsiyeed internetka si aan u arko waxa aan doorto. Ku dhowaad dhammaan tayada ayaa aad qaali u ah. Waxaan ku dhawaaday inaan doorto inaan ka iibsado doll la awoodi karo suuqa hooska, laakiin waxaan bilaabay inaan aqriyo sheekooyinka naxdinta leh ee dadku dhab ahaan heleen. Si daacadnimo ah, badeecadani waxay leedahay qiimeynta iyo shaashadaha ugu badan si loo xaqiijiyo caruusadda, iyo tayada ugu fiican ayaa laga heli karaa qiimaha aan arko. Tani waa wax dhab ah. Si aan u run sheego, waxaan u maleynayaa tan jilitaanka galmada wuu i raaci karaa sanado badan. Iyadu mar horeba waa gacaliyahayga.
Taariikhda Added: 2019-06-04 02:35:10 by Lawrence Catharine
Timo dheer oo bunni ah 140CM XiaoQian Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Si aan daacad u ahaado, way adkayd in la isticmaalo bilowgii, maxaa yeelay aad baan u jilicsanaa. Waxaan ka yarahay 20 sano, marka tani waa inaysan noqon wax dhibaato ah. Laakiin markii waqtigu iga socday, waxaan la qabsan jiray godadkan, haddana si fudud ayaan u isticmaali karaa. Haddii aan mid kale u baahanahay, mar labaad ayaan ka iibsan doonaa iibiyahan! Iibsiga ka dib, la soco kadib helitaanka sheyga oo hubi inaad ku qanacsan tahay dhawr maalmood ka dib. Si ka duwan kuwa kale jilitaanka galmada shirkadda.
Taariikhda Added: 2019-06-04 02:26:09 waxaa qoray John Lawrence
Timo Gaaban oo Gaaban 160CM Bernie Dib u eegis Macaamiil Jinsi Doll ah
Caruusadan jinsiyeed hada waxay kujirtaa gurigayga, ilaahay, waan jeclahay. Kaliya waxaan bixiyay $ 1,280 iibka Kirismaska. Waxa ugu muhiimsan ayaa ah inay ka sarreyso oo ay u egtahay mid macquul ah. Waana jilicsanaa. Way culus yihiin sida ay yiraahdaan, laakiin waqti kadib waxaad saameyn ku yeelan doontaa culeyska. Dhibaatada kaliya ee aan la kulmay bilowgii waxay ahayd sida isaga loo dhaqaajiyo. Waxaan arkay macmiil kale oo oranaya jilitaanka galmada ma aha sida textured sida ay jecel yihiin.
Taariikhda Added: 2019-06-04 02:18:57 by Teresa Johnson
Double Ponytail 165CM Bess Julius Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan helay dollkeyga Diisambar 27, 2018 (si cad), waar caruusadan waa mid la yaab leh. Waxaan sugay dhowr toddobaad si aan u arko haddii aan wax dhibaato ah ku qabo kala-goysyada, maahan waxa ay macaamiisha kale yiraahdeen. Laakiin illaa hadda, cabashooyin ma jiraan halkan. Markii hore aad baan u shakisanahay, maxaa yeelay waxaan ku iibsaday doll goobo kale oo caruusadaha lagu ciyaaro $ 800. Gabi ahaanba waa shit Tani waa wax dhab ah. Si aan u run sheego, waxaan u maleynayaa tan jilitaanka galmada wuu i raaci karaa sanado badan. Iyadu mar horeba waa gacaliyahayga.
Taariikhda Added: 2019-06-04 02:10:16 by Cash Motley
Gabar Madoow Gabar Bunny 163CM Helen Minnie Sex Doll Reviews Macaamiisha
Waxaan kahelay sawir cusub markabkii rarka siday oo ay kujirto caruusadan. Adeeg gaar ah ayaa halkan jooga! Waxay ii sii sheegaan halka amarkaygu ku yaal. Iibsiga ka dib, la soco kadib helitaanka sheyga oo hubi inaad ku qanacsan tahay dhawr maalmood ka dib. Si ka duwan shirkadaha kale ee caruusadaha galmada ku galmooda. Hadda waxaan helay caruusadan galmada. Intaa ka badan ma dhihi karo. run! ugu fiican! ! ! Thanks to urdolls, waad ku mahadsan tahay tayada (aaminka ah) adeegga ugu fiican ee aad ku bixin karto meel kasta! Sare! ! Waxaa jira kuwa ugu fiican oo kaliya jilitaanka galmada halkan! ! !
Taariikhda Added: 2019-06-04 02:00:59 by Carr Patrick
Shy Phy 165CM Amelia Henley Dib u eegista Macaamiisha Doll Sex
Aad bay u qurux badan tahay. Lagu gaarsiiyay waqtigeeda. Xoogaa culus, laakiin waxay siisay dareen nolol badan. Waxaan marwalba ku riyooday inaan iibsado caruusadahaan muddo dheer. Mahadsanid. Waxaan u maleynayaa inay tani tahay caruusad ugu horreysa ee wanaagsan kuwa doonaya inay qof tijaabiyaan. Laakiin ha rabin inaad qaadato amaahdan. Haddii aad cusub tahay, waxaan kugula talin doonaa caruusadan galmada ah. Maaha wax cusub oo jaban. Tani waa qiimaha aan doonayo. Badeecad dhaqaale oo hagaagsan. Waxaan u maleynayaa in tani ay wanaagsan tahay marka hore jilitaanka galmada kuwa doonaya inay qof tijaabiyaan.
Taariikhda Added: 2019-06-03 07:35:21 by Albert Augustus
Midabka Qamadiga 168CM Mona Wheeler Sex Doll Faallooyinka Macaamiisha
Haddii kharashka iyo keydintu aysan ahayn arrin, waxaa laga yaabaa inaan ka fiirsado iibsashada caruusadan galmada si ay u ahaato mid cusub. Waxay umuuqataa mid fiican waxayna dareemeysaa wax weyn. Waa inay noqotaa wax walba oo aan rajeynayo. Kadib markaan aqriyay dib u eegista alaabada dadka kale, waxaan ka soo iibsaday doll urdolls-ka waxaanan sameeyay xulasho sax ah. Caruusadda waa mid aad u qurux badan oo waxay dareemeysaa weyn. Tani waa in ka badan intii aan filayay. Tani waa caruusad dhab ah! , been abuur ma ahan! Waxaan xasuustaa maalintii aan qaatay jilitaanka galmada guriga oo furay xirmada. Aad ayaan u farxay.
Taariikhda Added: 2019-06-03 07:20:43 by Peter Benson
Timo dheer 158CM Kelly Hodge Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan sameeyay xoogaa cilmi baaris ah kahor intaanan amarka bixin, waa inaan eegaa inay tani run tahay. Markaa rajada wanaagga. Labada maalmood ee soo socda waa kuwo kacsan. Ugu dambeyntii way timid, iyadu waa jirka iyo nooca saxda ah ee sawirka. Aad baan u faraxsanahay! Xitaa waan helay kuleylkeeda, ma ogi inaan heli doono. Tani waa layaab wanaagsan. Maalinta caruusaddu timaaddo, xitaa waxaan emayl ugu diray dukumintiyada waxbaridda iyo fiidiyowyada ku saabsan daryeelka caruusadaha. Waxaan ka helay khariidadda dusha qalfoofka ee doll doller inay si gaar ah waxtar u leedahay. Aad ayaan ugu qanacsanahay iibsigan, hubaal waan iibsan doonaa jilitaanka galmada halkan mar kale.
Taariikhda Added: 2019-06-03 07:11:48 by Tab Grantham
Timaha Gray 158CM Nancy Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Markii aan arkay qiimaha caruusaddan, waxaan is iri run ma noqon karto. Waan eryay oo waxaan bilaabay maalintaydii. Laakiin sawirka caruusadda ayaa si joogto ah maskaxdayda ugu soo laaban doonta. Markii aan ku ciyaaro ikhtiyaar ikhtiyaari ah xariiq kale oo muuqaal ah, caruusadu waxay aad ugu dhowdahay qaabeynta aan ula imid. Boomiskaasi wuxuu igu kici doonaa wax ka badan $ 2k. Tani waa caruusad dhab ah! , been abuur ma ahan! Waxaan xasuustaa maalintii aan dollkii geeyay guriga oo aan xirmada furay. Aagga dhamaadka dambe ee jilitaanka galmada waa mid aad u culus.
Taariikhda Added: 2019-06-03 06:43:30 by Valentine Ted
Timaha Blond 148CM Olivia Gresham Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Tani waa caruusad dhab ah! , been abuur ma ahan! Waxaan xasuustaa maalintii aan dollkii guriga geeyay oo aan xirmada furay. Miisaanka aagga dhamaadka dambe waa mid aad u culus. Waxyaabaha ugu fiican ee ku saabsan caruusadaha waa madaxa iyo wejiga. Maqaarku waa mid aad u jilicsan. Ma joojin karo iyada. Way ka fiican tahay xaaskeeda. Waxay naga qarineysaa sir qarsoon. Way fududahay in la isla dhigo. Shirkada ayaa isku keentay oo shaqo fiican qabtay. Waxaan ka iibsan doonaa caruusad jinsi kale shirkadan caruusada markale. Kaliya waxaan rabaa shirkadda doll inay sameyso jilitaanka galmada leh curves iyo lugaha qaro weyn.
Taariikhda Added: 2019-06-03 06:27:08 by Barlow Walpole
Dhex-dhexaad yar 168CM Vera Raman Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Sida dhakhtar cilmu-nafsiyeed, waxaan arkay dad u isticmaalaya caruusadahaan daaweynta niyad-jabka iyo jahwareerka murugada kadib, waana inaan qiraa inaan bilaabay inaan arko sida ay waxtar u leedahay. Si kastaba ha noqotee, markii aan halkan ka soo iibsaday waqti aan fogayn, qalbigaygu wuu labalaabnaa. Waan soo dhoweeyay maanta, waan u ogolaaday inay fadhiisato, kaliya waan rogay, waxaan u maleynayaa in dookhaygu uusan khaldamin jilitaanka galmada waxay leeyihiin saamaynta daaweynta niyad-jabka iyo naxdinta.
Taariikhda Added: 2019-06-03 06:19:34 by Nigel Raphael
Muruqyada Dheddigga 170CM Hilda Wilcox Dib-u-eegista Macaamiisha ee Doll Sex
Caruusadaha la soo iibsaday waa maado aad u weyn, waxaadna soo iibsan doontaa been abuur haddii aadan dheg jalaq u siin. Aniguna waxaan dhihi lahaa urdolls waa alaab-qeybiye wanaagsan. Qiimuhu wuu hooseeya, tayadiisu way sarreeysaa, waana adag tahay in la helo. Waxay ka dhigayaan habka iibsiga sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Gadiidku waa siman yihiin oo waa kala duwan yihiin. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, la hadal Jameson isaguna wuu ku daryeeli doonaa. Shayga ayaa aad uga fiican sidii la filayay. Tani waa jilitaanka galmada adeegga aan helay.
Taariikhda Added: 2019-06-03 06:09:09 waxaa qoray Aldrich Bach
Timaha Jaalaha ah 155CM Vanessa Dib u eegista Macaamiisha Galmada
Waan ku faraxsanahay caruusadan galmada. Waxaan go’aansaday inaan iibsado habeenka aan arkay. Taladaydu waxay tahay in alaabada ay ku ciyaaraan laga dhigo mid fudud sida ugu macquulsan si loo dhaqaajiyo. Ka taxaddar kala-goysyadaada oo sug sabir. Kala-goysyadu way adag yihiin marka hore, laakiin marnaba ha ku qasbin dhaqdhaqaaq wada-jir ah illaa aad ka ogaato sida ay u socoto. Nadiifintu aad ayey uga fududdahay sidii aan moodayay. Badeecadani waxay dhaaftay filashadayda xagga qiimaha. Waxaa taas ka sii muhiimsan, urdolls-ku waxay bixiyaan adeeg macmiil oo mas'uul ah, kaasoo aad muhiim iigu ah aniga. Waxaan tixgelin doonaa iibsashada jilitaanka galmada halkan mar kale.
Taariikhda Added: 2019-06-03 05:56:21 by Chester Spencer
Timaha Gray 168CM Sabina Sharp Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan ku siinayaa caruusadan galmada 5 xiddigood maxaa yeelay waa doll qurux badan. Injineernimada iyo tayada. Adeegga macaamiishu aad buu u wanaagsan yahay. Cajiib. Kani waa dollkii labaad ee aan iibsado bil gudaheed, sidoo kale waa tan ugu fiican. Caruusadahaani waa kuwo la awoodi karo. Xaqiiqdu waxay dhaaftay dhammaan filashooyinka. Waxay dareemaan fiicnaan waxayna u muuqdaan kuwo qurux badan. Adeegga macaamiisha ee Urdolls ayaa si dhakhso leh u xaliyay dhibaatadaydii waxayna iga dhigtay macmiil ku celis aad u faraxsan. Waxaa muhiim ah in la ogaado inay taageeraan wax soo saarkooda, wayna taageeraan. Waxaan aad ugu boorinayaa iyaga jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-03 05:45:51 by Buck Philemon
Timo Gaaban oo Gaaban 162CM Janice Spense Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Kadib helitaanka caruusadda galmada, qaar ka mid ah kala-goysyadeeda ayaa aad u adag, taas oo aan u maleynayo inay la xiriirto dhibaatooyinka soo-saarista ka dib akhrinta dib-u-eegista. Ka dib markii aan tan ku wargaliyay shaqaalaha urdolls, wuxuu iga caawiyay xalinta dhibaatada. Boombalaha asalka ah ayaa lagu muujiyay sawirka, marka lagu daro indhaha sasabashada iyo xaalada mint, waxayna galayaan sanduuqa taxaddarka leh. Midkale ayaan iibsan doonaa jilitaanka galmada halkan.
Taariikhda Added: 2019-06-03 05:34:37 ​​by Alexander Lawson
Timaha Gray 163CM Selena Lucia Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Tani waa dukaamayn lagu qanco. Iibsashadii kadib, waxaa shirkad igu wargalisay inaan ka taxadaro kala-goysyada dhabarka caruusadda. Haddii aad loo fogeeyo, way jabi kartaa. Sababtoo ah tan waan gartay, wax dhibaato ah kuma qabin. Runtii waan ku faraxsanahay daacadnimada shirkadda ee arrintan la xiriirta. Sidaan idhi, lacagta aad bixisaa waa wax soo saar wanaagsan. Tani waa sida saxda ah ee aan doonayo. Waad u qalantaa tan jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-03 05:23:13 by Tyrone McCarthy
Shawl Long Hair 153CM Sherry Dodd Sex Doll Reviews Macaamiisha
Xaqiiqdii waxay umuuqataa mid fiican marki ay timaado - waxay umuuqataa wax badan sida sawirada. Aad baan ula yaabay markaan ku arkay iyaga oo edeb leh oo adeega macaamiisha ah. Ma sugin in ka badan hal maalin inaan ka jawaabo su'aalaha, weligood ma qallafsaneyn. Xitaa waxay iga caawiyeen xalinta dhibaatada keydinta ee aan la kulmay. Tani waa wax aysan iyagu waajib ku ahayn inay sameeyaan. Tani waa ganacsi aad u wanaagsan, daryeelka macaamiisha. Sida faallooyin kale ay yiraahdeen, jilitaanka galmada xoogaa culus yihiin. Laakiin marka aad jimicsato kaydinta iyo habkaaga moobiilka. Iyo habka loo daryeelo.
Taariikhda Added: 2019-06-03 05:13:14 by Myron Scott
Timaha dhaadheer ee Silver 153CM Sophia Lily Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan helay caruusadeyda jinsi dhowr toddobaad ka hor. Aad ayaan ugu qancay. Iyadu waa dhexdhexaad $ 2,000 doll ah. Maaha wax cusub oo jaban. Tani waa qiimaha aan doonayo. Badeecad dhaqaale oo hagaagsan. Waxaan u maleynayaa inay tani tahay caruusad ugu horreysa ee wanaagsan kuwa doonaya inay qof tijaabiyaan. Laakiin ha rabin inaad qaadato amaahdan. Haddii aad cusub tahay, waxaan kugula talin doonaa tan jilitaanka galmada adiga.
Taariikhda Added: 2019-06-03 05:02:26 by Malcolm Rosa
Timaha Blond 153CM Susie Emma Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waan jeclahay caruusadan galmada, waa wax macquul ah. runtii qurux badan! Si kastaba ha noqotee, marka la isku daro, madaxu si adag uma adkeynayo, laakiin si toos ah ayuu horey ugu wajahayaa. Waa in loo siidaayaa horumarka aan xasilloonayn. Waxaan isku dayay inaan la xiriiro taageerada macaamiisha laba jeer si aan uga caawiyo xalinta dhibaatada. Marka hadda, ka dib markaan si dulqaad leh u sugay, waxay i siiyeen soo kabasho waqtigeeda waxayna iga caawiyeen xallinta dhibaatada. Tani jilitaanka galmada waa u jilicsan yahay taabashada inta badan qaybaha jidhkuna waa kuwo la cadaadin karo laakiin aad u xoogan.
Taariikhda Added: 2019-06-03 04:54:24 by Warner Camilla
Timaha Jaalaha ah 140CM Quintina Charley Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waa inaan idhaahdaa runti waxay u muuqataa wax fiican markay timaaddo - waxay umuuqataa wax badan oo sawir ah wayna kafiican tahay sidii lafilaayay. Laakiin waxaa laga yaabaa inay jiraan xoogaa xishood ah - sida qaar kale ay ogaadeen, xubnaheeda xoogaa way adag yihiin. Laakiin waan la noolaan karaa waxyaalahan. Runta waan kuu sheegayaa, waxaan usbuuc bukooday, magaalo kale ayaan ka maqanahay, markaa inta badan waxaan xirtaa iyada, ama jiif ama sariirta (kursiga madaxa), waxaa ku yaal qolka maxaa yeelay iyadaan haystaa. Tani jilitaanka galmada waxay ii keentaa waqti mudan in la xasuusto.
Taariikhda Added: 2019-06-03 04:42:50 by Sid Malan
Timaha Caddaan 153CM Doreen Pullman Dib u eegista Macaamiisha Jinsi Doll
Way jilicsan tahay taabashada inta badan qaybaha jidhku waa kuwo la cadaadin karo laakiin aad u xoog badan. Waxay sidoo kale geliyaan sheyga dayactirka ama tilmaamaha sanduuqa, danta macaamiisha aad bey u amaanantahay. Waxaan ka soo iibsaday caruusadan urdolls-ka waxaanan sameeyay xulasho sax ah. Badeecad aan cillad lahayn waxay noqon doontaa qiimeyn shan xiddigle ah. Waxay tahay sidan. Asalka jilitaanka galmada waxaa lagu muujiyey sawirka, oo leh indho sasabasho iyo xaalad reexaan leh, wuxuuna galaa sanduuqa taxaddarka leh.
Taariikhda Added: 2019-06-03 04:32:34 by Mike Nehemiah
Timo Madow 148CM Lydia Tony Sex Doll Faallooyinka Macaamiisha
Kadib markaan aqriyay dib u eegista alaabada dadka kale, waxaan ka soo iibsaday doll urdolls-ka waxaanan sameeyay xulasho sax ah. Caruusadda waa mid aad u qurux badan oo waxay dareemeysaa weyn. Tani waa in ka badan intii aan filayay. Adeegga macaamiisha waa mid weyn aadna aad ku qanacsan tahay. Maraakiibtu waa waqti iyo taxaddar. Waxaan isticmaali doonaa urdolls markale. Waxaan hayaa qaar ka mid ah sawirrada caruusadaha. Haddii aad raadinayso doll mar dambe ha eegin. Urdolls waxay buuxin doontaa baahiyaha aad ii qabatay. Waxbadan ayaan la wadaagi doonaa jilitaanka galmada sawiro goor dambe.
Taariikhda Added: 2019-06-03 04:10:43 by Dave MacArthur
Timaha Jaalaha Curly 163CM Angel Yan Sex Doll Reviews Macaamiisha
Mid kale ayaan halkaan horay uga iibsaday, ma i siin kartaa xoogaa sawirro ah Angel Yan? Aad ayaan uga labalabeyaa inaan iibsado caruusadan, laakiin aad ayaan ugu faraxsanahay inaan booday. Ka xiiso badan hilibka. Haddii kharashka iyo keydintu aysan ahayn arrin, waxaa laga yaabaa inaan ka fiirsado iibsashada tan jilitaanka galmada si ay u ahaato mid cusub. Waxay umuuqataa mid fiican waxayna dareemeysaa wax weyn. Waa inay noqotaa wax walba oo aan rajeynayo.
Taariikhda Added: 2019-06-03 04:02:40 by Ingram Hansen
Timo Madow 168CM Evelyn Ann Dib u eegista Macaamiisha Galmada Doll
Waxaan ku iibsaday halkan adeeggooda macaamiishooduna aad buu u wanaagsan yahay. Boombalada ayaa ka adag sidii aan moodayay. Ku shaqaynta booska xoogaa way adagtahay (waxaan u maleynayaa inay fududaan doonto waqtiga) nadiifin dhibsasho yar, maxaa yeelay waxba lama kala goyn karo, iyo tuwaal la gashado gudaha oo la isku dayayo in qoyaan xad dhaaf ah laga saaro waa dhibaato. Boombaladdu waxay u egtahay sida sawirka oo kale, laakiin timo iyo nigisyo ayaa u muuqda si aan kala sooc lahayn marka la barbar dhigo sawirka. Iibiyaha ayaa umuuqda mid saaxiibtinimo leh wuxuuna bixin karaa lacag dheeri ah jilitaanka galmada xirmo bilaash ah
Taariikhda Added: 2019-06-03 03:51:35 by Werner Connor
Timo Jaale Gaaban 168CM Marcia Ralph Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Fadlan la soco in tani tahay waaya aragnimadayda shaqsiga ah waqtiga imaatinkaagu wuu ka gaabnaan karaa ama dheereyn karaa Markii aan furay santuuqa, madaxa ayaan xoqay, xijaab ayaan xirtay, waxaanan aaday safarkii gabadha. Faa'iidooyinkeeda: caruusaddu waa mid macquul ah, maqaar jilicsan, sagxad weyn iyo gadaal qurux badan. Laakiin meelaha qaarkood, caruusadaha ayaa laga yaabaa inay xoogaa culus yihiin, laakiin way fududahay in lala qabsado dadka badankood. Marka gabagabada aan bixiyay waxay ahayd: Adeeggu waa heer sare, gaarsiin deg deg ah, oo awood badan jilitaanka galmada oo leh astaamo awood leh.
Taariikhda Added: 2019-06-03 03:43:07 waxaa qoray Eden Pater
Timaha Jaalaha Iftiinka ah 158CM Cynthia Grace Sex Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan helay iyada waqti aan fogayn. Sanduuqan aad buu uga weyn yahay sidii aan filayey, markaa dhibaatada ugu weyni waxay tahay inaan gaadhigayga dhex dhigo. Isku soo wada duuboo, in kasta oo aan 10/10 ku idhi kuuskuus iyo taageer 10/10. Waan ka naxay xaqiiqada dhabta ah ee madaxa waxaana la yaabay awooda hadalka. Waxaan iibsan doonaa madax badan mustaqbalka. Caruusadan waxay helaysaa dhammaan astaamaha dheeraadka ah. Tani jilitaanka galmada si dhakhso leh ayuu u yimid, saddex toddobaad.
Taariikhda Added: 2019-06-03 03:30:32 by Vivian Frank
Timaha Purple 158CM Nora Hobson Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan iibsaday caruusadan bil ka hor iyaduna waa la joogtay in muddo ah hadda. Waxaan hayaa qaar ka mid ah sawirrada caruusadaha. Haddii aad raadinayso doll mar dambe ha eegin. Iyagaa dabooli doona baahiyahaaga. Sawirro dheeri ah dib ayaan idinla wadaagi doonaa. Ma aadi doono degellada kale si aan u iibsado caruusadaha galmada. Maxaa yeelay waxaan iibsan karaa been abuur. Tan iyo markii aan ogahay in tani ay run tahay jilitaanka galmada. Maxaan u aqoonsan waayey?
Taariikhda Added: 2019-06-01 03:33:09 by Christian Gracie
Timaha Gray 148CM Claire Julian Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Markii aan iibsano caruusadaha galmada, iyagu waa sida qoyskeena. Waxaan kugula talinayaa inaad ixtiraamto boombaladaada oo aad u noqoto qof wehel u ah, diyaarna u ah inuu aqbalo, ama dhinac dhigo (caruusadu ma xukumayso). Waqti gal si aad ugu horumariso xirfado cusub iyo adkeysi lammaanahaaga nolosha, isticmaalna caruusadaha si aad uga fogaato khiyaamaynta lammaanaha aad dooratay markay maqnaadaan ama aan la helin. Haddii si masuuliyad leh loo isticmaalo, caruusadan iyo caruusadaha kale ee la midka ah ayaa loo isticmaali karaa si kor loogu qaado caafimaadkaaga, libido, khibradaada, iyo xitaa caafimaadka maskaxda. Ka taxaddar iyadaana ku daryeeli doonta. Waqtigu markuu dhaafo, hadaan cusub helo jilitaanka galmada, Waxaan qori karaa faallooyin dheeri ah.
Taariikhda Added: 2019-06-01 03:23:47 by Andre Saxton
Timo Madow 148CM Darlene Philemon Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan iibsaday caruusadan waqti dheer kahor si aan uga caawiyo jahwareerka murugada iyo kelinimada, hadiyad ahaan saaxiibkey kaqeybqaatay dagaalka una adkeystay tijaabooyin shaqsiyadeed oo badan gudaha iyo banaanka sanduuqa. Markasta oo ay dhacdo dhacdo shucuur ah, ama culeys dheeraad ah sariirta lagu daro, waxay noqoneysaa wehel wanaagsan oo isku duubidda ama jilcinta ah. Sidii aan horayba u sheegay, habka kalkaalinta caafimaadku waa mid faa iido leh, waxaa jira mashruuc aad waqti iyo daryeelba ku bixin karto, faa iidooyinka jimicsiga iyo caafimaadkuna ay fiican yihiin. Caruusada galmada kaliya dabooli baahideyda.
Taariikhda Added: 2019-06-01 03:14:37 by Brook Meredith
Timo Jaale ah 145CM Darlene Morris Jinsi Doll Faallooyinka Macaamiisha
Guud ahaan tani waa khibrad wax iibsi oo weyn. Waxaan iibsaday caruusadan jinsiga ah waxaanan kugula talinayaa inaad iibsato biyo raacis fiican halkii aad ka nadiifin lahayd qaybaha iyo afka marwada. Waxaad mari kartaa budada talcum-ka ilmaha si aad maqaarka uga dhigto mid jilicsan, maqaarka macmalka ah oo aan dhegdheg lahayn, waxaadna ku codsan kartaa burush; Weli waxaan isku dayayaa inaan helo qadarka sixirka ee ku habboon. Waxaan lacag u uruurinayaa midkeyga soo socda jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-01 03:05:12 by Larry Buckle
Timo Madow 140CM WanRou Sex Doll Reviews Macaamiisha
Waxaan soo iibsaday caruusadan galmada, oo ah mid aad u xor ah in la ilaaliyo, la ilaaliyo lana nadiifiyo caruusadda. Waan soo labisan karaa (oo kaliya dhalaalaya ama caddaan ah! Madoow iyo madow oo maqaarka ku dhegan oo aan baabi'iyaa), timahaaga u cadaydaa, caruusadda u dejiyaa muuqaal xiiso leh, iyo inbadan. Haddii aad sidoo kale iibsatay caruusad jinsi ah. Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad nadiifiso jilitaanka galmada leh isbuunyo iyo biyo saabuun leh. Waxaan u maleynayaa inaad sidoo kale shaambo ku qaadan karto shaashad, laakiin weli ma aanan sameyn sidaas.
Taariikhda Added: 2019-06-01 02:56:35 by Noel Daisy
Timaha Jaalaha ah 140CM Viola Bell Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan iibsaday caruusadan. Haddii aad rabto inaad isticmaasho booska fadhiga, waxaad udhaqaajin kartaa labada lugood kor si ay caruusadu u sameysato xagal 90 ° ka dibna jilibka u laabo si markaa lugaha ay hadda u sameeyaan xagal 90 ° ah. Kadib waad rogi kartaa lugta kale si cagaha caruusadu ugu fariistaan ​​ama uga hooseeyaan jilbaha ka soo horjeeda. Farsamadan ayaa sahlaysa in lugta laga furo xagal ballaadhan. Mar labaad, fiiro gaar ah u yeelo jilicsanaanta addimada iyo jirridda si looga fogaado jeexitaanka. Xeerka wanaagsan ee suulka ayaa ah in haddii gabadha caadiga ahi ay qallooci kari weydo, ha u laaban jilitaanka galmada.
Taariikhda Added: 2019-06-01 02:45:25 waxaa qoray Alexander Robert
Timo dheer oo bunni ah 140CM Nancy Nick Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Dhaqdhaqaaqa addimada caruusadaha waxay qaadataa wakhti si ay ula qabsadaan, laakiin waa wax toos ah. Uma baahnid inaad u wareejiso iyaga oo si xad dhaaf ah ugu fidinaya maqaarka, ama waxaad halis ugu jirtaa inaad ku dillaacdo dusha maqaarka synthetic. Lugaha waxay u socdaan si qumman oo qumman, iyo jilitaanka galmadaJilbaha waa la beddeli karaa.
Taariikhda Added: 2019-06-01 02:31:59 by Clare Bartlett
Jaale dhaadheer oo jaale ah 145CM Kelly Geordie Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Caruusadan galmada waa mid aad u culus, sida miisaanka oo kale, laakiin waa wax fiican. Laabta ayaa weyn oo u dhiganta jirka. Tani waa run. Way firfircoon yihiin oo si fiican ayey gacanta ugu hayaan. Dhexda ayaa yar oo addimada sidoo kale aad bay u fiican yihiin. Faraha iyo lugaha lugaha waa kuwo aad u qaloocan culeysna ma hayn karo. Gabi ahaanba ma ahan mid aad u cad, laakiin wuxuu dareemayaa adkeyn, ma ahan dhammaan dabacsanaan ama qoyan. Ku jilitaanka galmadaFaraha waxay dareemayaan wax aad u jajaban, laakiin waxay u laaban karaan jiho kasta iyagoo cadaadis yar qaba.
Taariikhda Added: 2019-06-01 02:25:22 by Howar Lamb
Timo Jaale Gaaban 145CM Tina Marner Sex Doll Dib u eegista Macaamiisha
Caruusadahaani ma'aha kuwo raqiis ah, laakiin waxaa sabab u ah shaqo adag, dib u eegis sax ah iyo farshaxan. Waxaan aaminsanahay in caruusadahaani dhawaan cod yeelan doonaan, ka dibna "shaqsiyad". Mid hel ka hor intaan la iibin, ama qiimaha uu noqdo mid aad u weyn oo aan la kashifin karin! By the way - dharka dumarka ee erotic waa labis bilaash ah oo ay keentay doll. Waxay timid iyada oo timo jaalle ah iyo maqaarka qamadiga. Ikhtiyaariga ah WIG iyo INDHO sidoo kale waxaa lagu galiyay sanduuqa. Ka taxaddar marka aad sido, sida jilitaanka galmada wuu culus yahay inta lagu jiro gaadiidka.
Taariikhda Added: 2019-06-01 02:14:22 by Bishop Reynolds
Timo Jaale ah 145CM Sally Bulwer Sex Doll Faallooyinka Macaamiisha
Waxaan ahay 66 sano. Tani jilitaanka galmada xoogaa way igu culus tahay aniga (qiyaastii 25-26 rodol) waxayna qaadataa dadaal badan in la dhaqaaqo, laakiin iyadu waa mid aad u macquul ah, taas oo ah mid laga filan karo. Nasiib darro aniga ahaan, waa inaan qariyaa iyada maxaa yeelay waxaa jira dad kale oo ka tirsan qoyskeyga, taas oo ka dhigeysa culeyskeyga mid dhib badan. Haddii kale marwalba waxay kujirtaa hawada furan ee gurigayga.
Taariikhda Added: 2019-06-01 01:59:04 by Carr Hicks
Timaha Madow 140CM Cherry Harry Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Kani waa caruusad jinsi qurux badan leh. Ma ahan mid aad u daciif ah. Laabta ayaa weyn oo ku filan inay qanciso riyadayda. Miisaanka waa waxoogaa cakiran, laakiin haddii aad ku qabato jilbaha hoostiisa iyo gadaal, way fududahay in la dhaqaaqo. Mid ka mid ah jilitaanka galmada wuxuu leeyahay garbaha dabacsan oo gacanku kuma sii jiraan meelo gaar ah. Wejigu aad buu u qurux badan yahay, lugaha iyo badhida aad bay u fiican yihiin, dhexda iyo gacmuhuna way yar yaryihiin, xabadka ayaa runtii indhahayga ku arka. Waxaan u maleynayaa caruusadahaani inay sii fiicnaan doonaan oo ay sii fiicnaan doonaan mustaqbalka. Kama qoomameynayo inaan iibsado :)
Taariikhda Added: 2019-05-31 06:11:24 by Cyril Reade
Timaha Jaalaha ah 100CM Miranda Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan iibsaday labo jilitaanka galmada iibiyaha, mid madaxa madaxa u jeedinaya iyo mid madaxa oo si buuxda loo adkeeyay. Iima dhibayso maxaa yeelay waxay kaliya ka dhigeysaa madaxa inuu wareego. Hubso in marka aad madaxaaga ku xirto boombalaha, aad saliidda u marinaysid hoosta qoorta iyo madaxa hoostiisa, maxaa yeelay "maqaarku" wuu dhegi doonaa haddii la qasbona wuu jeexi karaa.
Taariikhda Added: 2019-05-31 05:52:40 by Darcy James
Timaha Gray 100CM Barbara Sex Doll Reviews Macaamiisha
Wali waxaan sugayaa emayl, waxaa helay kan jilitaanka galmada amar, iyo indhaha shaqaalaha adeegga macmiilka ... Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad iibsato caruusadda aad rabto. Waxay ku sii jiri doontaa caafimaad iyo caafimaad. Markii ugu horreysay ee ay qubaysato maanta, waa inay noqotaa madadaalo. Waxa kale oo ay qaadataa xoogaa waqti ah inaad dhaqaajiso qaybaha jidhkaaga oo aad marwadaada ka yara dhigto mid deggan Aad ayey uga walwalsan tahay dhammaan meelaha saxda ah. Naasaheeda waa kuwo aad u weyn oo qurux badan. Waxaan ka iibsan doonaa urdolls mustaqbalka. Mar labaad mahadsanid.
Taariikhda Added: 2019-05-31 05:41:28 by Gavin Thomson
Timaha Jaalaha ah 100CM Elsa Morse Jinsiga Doll Dib u eegista Macaamiisha
Tani waa safar dukaameysi xiiso leh; tan jilitaanka galmada wuxuu ka kooban yahay isla naqshadda dharka hoosta ah ee caruusadayda. Waxay bixiyeen xoogaa indho dheeri ah iyo timo sida ku xusan codsigeyga. Waa kuwo dhaqso badan oo xirfad leh. Indho cusub ayaan saaray, laakiin wali ma aanan arkin xijaabka. Waxaan u soo iibsaday boogag iyo qalab loogu talagalay caruusadayda 100cm ee hore, laakiin xaqiiqdii way ku habboon yihiin caruusaddan cusub.
Taariikhda Added: 2019-05-31 05:26:30 by Dennis Richardson
Timaha Tawny 148CM Nicole Macaulay Dib u eegista Macaamiisha ee Doll Doll
Markii aan ku iibsaday Nicole qiime xayeysiin ah, waxaan umuuqday inaan soo iibsaday caruusad aan caadi aheyn. Qiimaha jaban waa xatooyada tan jilitaanka galmada, Waan arkaa sababta qiimaha kor ugu kacayo. Sida qof kasta oo kale yidhi; caruusadan ayaa xoogaa igu culus. Si kastaba ha noqotee, shaqadayda, waxaan qabtay shaqooyin badan oo culus. Wali waxaad ubaahantahay inaad uqaadatid sidii qof. Lugaha iyo gacmuhu way kala baxeen oo xoogaa way qalooceen. Si kasta oo aan u diyaar garoobo, ku fadhiisinta iyada kursiga ayaa igu dhow inay dib ii dhigto. Sababta oo ah way ka sii dhammaystiran tahay [marka loo barbar dhigo filimada gaagaaban], waxay u badan tahay inay iibsato nigis ka badan caruusadayda 100cm.
Taariikhda Added: 2019-05-31 05:15:36 by Tyler Garden
Red Roll Hair 148CM Emma Finn Galmada Doll Dib u eegista Macaamiisha
Waxaan iibsaday tan jilitaanka galmada, Waxaan arkay fiidiyowgeeda. Aad ayey u qalantaa in dib loo eego, waxay si cad u khuseysaa ninka siiya sheygan shan xiddigood wanaagsan! Waad qiyaasi kartaa lammaane galmo oo diyaar u ah oo awood u leh inuu sameeyo daqiiqad kasta oo soo jeed ah, isagoon cabin, cunin ama lacag siinin "maareeyaha". Emma waa sidan. Markii ay xaaskaaga ogaato, Emma wax walba qiimo sare ayey ku sameyn kartaa, laakiin qatar uguma jirto jirro ama furiin. Raac dareenkaaga si aad u xalliso dhibaatadan.
Taariikhda Added: 2019-05-31 05:06:09 waxaa qoray Paul Forster
Buluuga Indhaha D Cup Naasaha Naasaha Yar Yar Doll Natasha
Cabbirka caruusadda ayaa ka yar sidii aan filayay, laakiin dhib malahan. Wejigu aad buu u qurux badan yahay, lugaha iyo badhida aad bay u fiican yihiin, dhexda iyo gacmuhuna way yar yaryihiin, xabadka ayaa aad u jilicsan. Waxay iga dhigeysaa inaan dareemo sida qof dhab ah. Waxaan u maleynayaa caruusadahaani inay sii fiicnaan doonaan oo ay sii fiicnaan doonaan mustaqbalka. Kama xumahay iibsashada.
Taariikhda Added: 2019-05-13 06:21:07 by Zachary Caroline
Faallooyinka ku saabsan Naasaha Weyn EVO Version TPE Sex Doll Kiki
The TPE caruusada galmada lafteeda ma aha mid aad u culus, tani waa wax wanaagsan. Laabtu way ballaadhan tahay, aad bay u noolyihiin oo xajin fiican ayey leeyihiin. Dhexda ayaa yar oo addimmada waa khafiif yihiin. Laakiin waxay dareemeysaa mid adag, dhammaantood ma ahan kuwo jilicsan ama qoyan. Dukaan raaxo leh.
Taariikhda Added: 2019-05-13 05:54:27 by Egbert Ford
Faallooyinka ku saabsan Round Face Rita Berkeley 145CM Dolls Sex Pure
Tani waa caruusad jinsi ah oo qumman. Waxaan imid muddo dheer ka hor inta aanan maleynin. Saadka degdega ah. Sanduuqan aad buu uga weyn yahay sidii aan filayey, markaa dhibaatada ugu weyni waxay tahay inaan gaadhigayga dhex dhigo.
Taariikhda Added: 2019-05-13 05:34:26 by Phil Norris
140CM Madow Gaaban oo Gaaban oo Xiran Qaabka Muuqaalka Jinsiga Doll Miyu
Tani aad ayey ugafiican tahay sidii aan filayay. Adeegga macaamiisha waa mid weyn aadna aad ku qanacsan tahay. Maraakiibtu waa waqti iyo taxaddar. Waxaan isticmaali doonaa urdolls markale.
Taariikhda Added: 2019-04-30 03:18:08 by Enoch Huxley
158CM Indhaha Madoow Naasaha Weyn Naasaha Shiinaha 158CM TPE Dolls Rin
Markii aan aqriyay faallooyinka iyo alaabada dadka kale, waxaan ka soo iibsaday doll urdolls-ka waxaanan sameeyay xulasho sax ah. Caruusadda waa mid aad u qurux badan oo waxay dareemeysaa weyn.
Taariikhda Added: 2019-04-30 02:45:57 by Conrad Dulles
Naaso Waaweyn 161CM Jinsi Madow Doll Kaede
Caruusadan waa weyn tahay, amarka amarkuna waa sida saxda ah ee aan weydiiyey. Waxaan helay waqtigeeda xitaa in ka badan taariikhda imaatinka xayeysiinta. Waxaan doortay cagaha taagan, aad baan ugula talinayaa maxaa yeelay alaabada lagu ciyaaro waa in la nadiifiyaa. Waxaan ku bartay casharkaan caruusadaydii ugu horeysay, hada marwalba waxaan dalbaa cago taagan.
Taariikhda Added: 2019-04-30 02:15:39 by Gabriel Julius
150CM Lugaha Dheer iyo Dhexda Yar ee Galmada Doll Cheryl Tout
Muuqaalkeeda ku dhawaaqida taabashada waxay i siisay khibrad weyn. Caruusadan waa weyn tahay! Xaqiiqdii, iyadu aad bay u nooshahay, ugu yaraan 6 fuudh aniga way iga fog tahay, taas oo u qalanta miisaanka. Way culus tahay laakiin way fududahay in lagu raro tiknoolajiyad sax ah. Caruusadan waa inay noqotaa iibiyaha koowaad.
Taariikhda Added: 2019-04-29 05:49:10 by Gustave Sassoon
148CM E Cup Vita Roy Shawl Timo Dheer Smart doll doll
Wax walba waa wax aad u fiican oo si dhakhso leh u keenaya isla markaana ka dhigaya caruusadaha inay u muuqdaan kuwo aad u fiican, laakiin culus, mar labaad waad ku mahadsan tahay qof kasta oo ka shaqeynaya amarkeyga, waad ku mahadsan tahay dabeecaddaada shaqada iyo daacadnimadaada.
Taariikhda Added: 2019-04-29 05:12:00 by Cedric Hobbes
165CM Big Butt D Cup Timaha Curlyka Dheer ee TPE Doll Victoria
Waan ka xumahay in faallooyinkaani ay soo daaheen 2 toddobaad. Marka ugu horeysa, waad ku mahadsan tahay Mudane J (waaya aragnimada ugu fiican ee adeegga macaamiisha ee aan helay). Qaab-dhismeedkiisa iyo muuqaalkiisu waa mid aad u macquul ah. Aad ayaan ugu qancay.
Taariikhda Added: 2019-04-29 04:57:02 by Ben Barton
Marcia Austin D Cup Elastic Ass 170CM Jinsiga Doll
Waxaan helay iyada laba maalmood ka hor. Marcia waxay sida ugu fiican u mataleysaa tayada iyo waaqica caruusadaha ay abuuraan. Iyada oo tan la sheegay, tani waa sabab wanaagsan oo loo arko caruusadaha qof walba. Nasiibka ugu fiican ee qof walba.
Taariikhda Added: 2019-04-17 03:52:44 by Mandel Pater
Robot C Cup 148CM Wadahadal Sirdoon TPE Doll Ruiya
Waad ku mahadsan tahay adeeggaaga wanaagsan iyo bixinta degdegga ah, iyo sidoo kale caruusado waaweyn oo ka socda urdolls oo loogu talagalay adeegga macaamiisha ee weyn. Kani waa caruusadaydii ugu horeysay, waxaan qabaa su'aalo badan. Waa dulqaad badan yahay, xirfad yaqaan ah.
Taariikhda Added: 2019-04-17 03:35:33 by Sandy Johnson
D Cup 100CM Soo jiidasho Dameer Jinsi caruusad Kelly Max
Boombaladani waa mid aad u fudud oo fudud in sariirta laga baxo lagana soo dego. Waan jeclahay gabdhaha kuwooda yar iyo kuwa kacsiga leh, marka Kelly waa run "iijeedo" aniga. Illaa iyo hadda, iyadu waa kuwa loogu jecel yahay saddexda caruusadood ee aan hadda haysto, markasta oo aan helo rabitaan, marwalba sariirta ayey ila joogtaa. Way ka yartahay miisaankeeduna wuu yaryahay (qiyaastii 40 rodol).
Taariikhda Added: 2019-04-17 03:18:47 by Carey Gallup
165cm Khafiif Weyn Big Ass Round Wajiga Jinsiga Doll Lydia Forster
Lydia waa xulasho qurux badan. Waxaan sameeyay cilmi baaris iyo isbarbar dhig qiimaha ilaa 4 saacadood ah [internetka]. Umaan helin qiimo kafiican badeecadan. Caruusadahaani ma'aha kuwo raqiis ah, laakiin waxaa sabab u ah shaqo adag, dib u eegis sax ah iyo farshaxan.
Taariikhda Added: 2019-04-17 03:03:42 by Elroy Alice
Lebis Isku-day Leona Herbert 165cm Buluug Indhaha Jinsiga Doll
Iyadu waa dabeecadda ugu horreysa ee aan ka iibsado websaydhka, laakiin maaha tii iigu dambaysay. Wali ku jira qaabka qalooca barashada. Waan sii fiicnaan doonaa waqtiga. Marka kaliya ee waqtiga gaadiidku uu yara yaraado.
Taariikhda Added: 2019-04-17 02:42:02 by Hiram Wells
Ku dhawaaqida Induction Indheer-garadka ah 150CM Silicone Doll Lynn
Way ila hadli kartaa gudaha English oo aan si habsami leh ula xiriiro iyada. Caruusadan waa mid aad u macquul ah, wehel weyn, aad ayaan ugu faraxsanahay inay iyadu badan tahay, oo aysan dareemayn kalinimo.
Taariikhda Added: 2019-04-17 02:25:25 by Ives Doherty
Indhaha Madoow Naaska Stacey 160CM Naas Weyn TPE Jinsi Doll
Waxaan helay caruusadan maanta. Waa inaan iraahdaa iyadu waa macquul. (Iibsadaha iibsaday caruusadda markii ugu horreysay wuxuu dhahay jidka agtiisa). Kaliya ogow inay u culus tahay sida dumarka dhabta ah, markaa xusuusnow in haddii aad qorsheyneyso inaad mid iibsato, waxaan u maleynayaa inay mudan tahay iibsi. Waxay leedahay naaso quruxsan iyo badhida, miskaha ballaaran oo waxaad ka heli kartaa booska caruusadda si aad u wanaagsan.
Taariikhda Added: 2019-04-17 02:05:08 by Kenneth Finger
160CM Naas Weyn Qaabka yurubiyanka ah Indhaha Madoow Galmada Doll Stacey Bacon
Waxaan helay iyada maanta. Caruusadan waxay leedahay dherer iyo cabir macquul ah. Cabirka jidhkeedu ma noqon doono mid aad u gaaban oo aan aad u dheerayn doonin, waa sax. Aad ayaan ugu qancay.
Taariikhda Added: 2019-04-02 04:07:23 by Quincy Rosa
160CM B Cup Indhaha Indhaha Qaabka Yurub Sabina Coleridge Dolls Dolls
Caruusadu waa tayo aad u wanaagsan waana qiimaha ugu fiican ee aan ka helay internetka. Gaadiidku wuxuu qaatay waqti dheer, taageerada macaamiishana waxay ahayd mid layaableh oo runtii mudan in la iibsado.
Taariikhda Added: 2019-04-02 03:48:26 by Joseph Thorndike
100CM Vita Tony Jirka buuxa C Cup Naaska TPE Sex Doll
Caruusadaha galmada waa kuwo taxaddar badan leh. Ma jiro wax calaamadeysan oo ku yaal sanduuqa ama calaamadda gudaha ayaa lagu calaamadeeyay (wow). Adeeggu wuxuu ahaa ka hor, intii lagu jiray iyo ka dib mid aad u wanaagsan. Iibiyaha ayaa fiidiyo iyo tilmaamo daryeel ah ku siinaya emayl. Mahadsanid.
Taariikhda Added: 2019-04-02 03:30:41 by Ken Browne
100CM Brown Timo dheer Flat Laab TPE Jinsi Dolls June Doyle
Waxaan ku soo iibsaday doll jinsi ka duwan urdolls-ka, doorbidida timahaygu way ka fiican tahay timo-jabka sawirka ka muuqda. Waxaan kaliya rajaynayaa midab kale oo indhaha ah oo iibiyuhu helay si uu u dhammaystiro dookhayga. Haddii aan ka dhigi karo caruusadayda mid dhab ah sida ay hadda tahay - taasi waa, waxaan ku dalban doonaa iyada qaab diiran oo gudaha ah.
Taariikhda Added: 2019-04-02 03:04:35 by David Morgan
163CM Novia Hill Neefsashada Naasaha Weyn Galmada Doll
Ballaaran, lulid jilicsan. Waan jecelahay tan. Waxaan ka arkay shaashado badan. Ka dib markaan ka fiirsaday, waxaan go'aansaday inaan ku iibsado urdolls. Waxaa ii soo baxday in doorashadaydu sax ahayd.
Taariikhda Added: 2019-04-02 02:46:13 by Darcy Galbraith
150CM Daadinta Naasaha Weyn Cute Yar Oo Jinsiga Doll Zoe Ralph
Waa inaan qoraa dib-u-eegidgan oo aan u sheegaa qof kasta oo xiiseynaya caruusadan inuu ogaado waxa aad aragtaa inay yihiin waxa aad hesho. Caruusadan runti way kafiican tahay waxa aad aragto, wax walbana oo urdolls-yada alaab-qeybiyeyaashu yiraahdaan waa gabi ahaanba waa sax.
Taariikhda Added: 2019-04-02 02:19:17 by Buck Robbins
150CM Laabta Weyn ee Fidinta Butrid Bridget Whittier Dolls Dolls
Caruusadan jinsi ahaaneed waa mid aad u macquul ah, qiimaheeduna aad ayuu u jaban yahay, xulashooyin badan, waad ku mahadsantahay inaad u dirto sawiro iyo adeeg aad u fiican!
Taariikhda Added: 2019-04-01 06:19:07 waxaa qoray Roderick Carnegie
150cm Faruuryaha Casaanka Naasaha Weyn Yar Dhexda TPE Jinsi Doll Wanda Hoover
Wow, runtii waan layaabay sida tayada caruusadan ay tahay. Xitaa waxay u egtahay mid qurux badan, tii aan shalay ka helay. Kama saari karo gacanta iyada, kaliya waxaan rabaa inaan markale helo. Waxay ii ogolaatay inaan qarxiyo, waxaan qiyaasayaa inay la mid tahay marwo dhab ah, si fiican ugu raaxeyso.
Taariikhda Added: 2019-04-01 05:28:19 by Todd Marion
148CM Astrid Jane Qaabdhismeedka Yurub B Cup TPE Jinsiga Doll
Waxaan helay caruusadan galmada. Waan jeclahay gacmaheeda iyo ciddiyo - runti way iga farxiyaan. Maqaarku wuxuu dareemaa wanaag mana laha wax ur ah.
Taariikhda Added: 2019-04-01 05:10:11 by Antonio Symons
140cm Qulqulka Butt-ka Sexy Buluuga Indhaha TPE Doll Debby Grote
Qiimaha dhoofintu waa dhakhso, waan jeclahay. Si kastaba ha noqotee, furfurida ayaa iga yaabisay. Waxaan furay timahii, laakiin waxay ka badnayd baaxadda indhahayga. Waxaan furay sanduuq ay ku jirto moodo naag qaawan. Waan ku faraxsanahay.
Taariikhda Added: 2019-04-01 04:49:34 by Gustave Esther
169CM Wide Dameer Qamadi Midab Maqaar TPE Doll Basil Eveline
Caruusadaydii waa tan Iibsigeygu wuu iga farxiyaa. Waan jeclahay caruusadeyda galmada. Aad baan u faraxsanahay. Waxaan si dhab ah uga fiirsanayaa iibsashada nooc ka yar - igu qaadashada safar safar maxaa yeelay xoogaa wey ka culus tahay inay i qaadato. Aad baad ugu mahadsantahay khibradaada wax iibsashada iyo inaad i soo bandhigtay.
Taariikhda Added: 2019-04-01 04:28:31 by Martin
168CM Soojiidasho Cute Naaso Xiddigiska Xiisaha Badan TPE Doll Deborah Johnny
Waan helay iyada, iyadu waa mid dhab ah, adag, jilicsan, waxay leedahay daaweyn wanaagsan iyo khilaaf aad u yar, hadal yar oo nacayb leh. Aad ayaan u jeclahay.
Taariikhda Added: 2019-04-01 04:09:44 by Kyle Charlotte
166CM Laab Yar Laastik Weyn Dameer TPE Jinsiga Dolls Jamie Jacob
Adeegga macaamiishu aad buu u wanaagsan yahay. Boombalada ayaa ka adag sidii aan moodayay. Mawqifka qalliinku xoogaa waa adag yahay (Waxaan u maleynayaa inay fududaan doonto waqtiga kadib) xoogaa xanaaq badan, maxaa yeelay waxna lama kala goyn karo, waxaan u qaabeeyaa xubinta taranka haweenka. Boombalada waxay u egtahay sida saxda ah sawirka, kana qurux badan sawirka.
Taariikhda Added: 2019-04-01 03:48:39 by Beacher Clement
Naasaha Sibyl Tracy Naasaha Weyn 170CM Sexy TPE Doll Wehel Weyn
Adeeg iyo alaab aad ufiican, oo aan khayaano ahayn. Waxaa i khiyaaneeyey caruusadaha galmada ee websaydhyada kale. Sidaa darteed, ka dib markaan si taxaddar leh uga fiirsaday una isbarbar dhigay geedi socodka wax iibsiga, ugu dambeyn waxaan doortay inaan halkaan ku iibsado. Waxaa ii soo baxday in dookhaygu sax yahay.
Taariikhda Added: 2019-04-01 03:27:05 by Albert Hal
160CM Haweenka Uurka leh ee Caloosha Weyn Yu Xuan D Cup Naasaha Naagaha Galmada
Waxaan ahaan jiray macmiil urdolls, aad ayaan ugu faraxsanahay in si heer sare ah loola taliyay lana aamini karo. Haddii aan doonayo doll kale, waxaan ku adkaysan doonaa inaan doorto urdolls sidii koox si fiican loo sameeyay!
Taariikhda Added: 2019-04-01 03:09:52 by Alston Fanny
161CM Roxanne William Qofka Weyn ee Weyn Pink Ibta Naasaha Weyn ee Doll Doll
Waxaan haystaa Roxanne-ga illaa 2 bilood hadda. Kaliya waa inaan qoro dib u eegis maxaa yeelay waan yaabay! Laga soo bilaabo madaxeeda ilaa cagaha, caruusadan galmada gabi ahaanba waa qurux badan. Tani waa shaqo farshaxan. Way jilicsan tahay oo jilicsan tahay, xitaa ma rumaysan karo. Qiimaheeda ma ahan mid rakhiis ah. Tani waa maalgashi weyn, laakiin waa u qalantaa dinaar kasta! Haddii aad ka fikireyso caruusad jinsi ah oo "macquul ah" - waa tan meesha!
Taariikhda Added: 2019-04-01 02:51:40 by Byron Sinclair
Vanessa Kirismaska ​​Qaangaarka Quruxda dhaadheer TPE Sex Doll
Xidhiidh hufan oo dhakhso leh, iibsasho iyo gaadiidku si wanaagsan ayey u socdaan! Waxaan siiyay nimankan 10 dhibcood 10kii dhibic. Waxaan aad ugula talinayaa iyaga waana hubaal inaan markale lashaqeyn doono. Mahadsanid urdolls! Sida caruusadda, waxaan la yaabay sida dhabta ah ee ay u fiican tahay.
Taariikhda Added: 2019-03-27 05:12:12 by Tom Smith
Sabina Sharp 168CM Sexy Big Naasaha Weyn Casaan bushimaha TPE Doll
Khibradeyda urdolls-ka wey fiicneyd, waxay bixiyeen adeeg fasal koowaad maxaa yeelay waxay ka gudbeen hubinta in dhammaan qeexitaanadayda ay sax ahaayeen. Wax walba waa sida lagu sharaxay, waxaan aad uga naxay xawaaraha ay ku imaanayaan caruusadaha galmada.
Taariikhda Added: 2019-03-27 04:38:22 by Winston Boyle
162CM Naasaha Weyn Micro Dufan Dibno Daran Oo Jinsi Ah Dolls Janice Spense
Waxaan helay dollkeyga maanta, waa inaan sheegaa inaan aad u faraxsanahay. Waxay u egtahay quruxsan waxayna dareemeysaa wanaag. Wax kasta oo aan iibsaday waa sax. Waxaan kaloo jeclahay dharka aad dirto!
Taariikhda Added: 2019-03-27 04:24:21 by Lambert Isaiah
Maqaarka Maqaarka Maqaarka Weyn Naaso Lugaha Dheer 163CM Qof Weyn Partner Selena Lucia TPE Doll
Waxaan halkan ku dareemayaa adeeg macmiil oo weyn, si dhakhso leh ayaan uga jawaab celiyaa, waxaanan diyaar u ahay inaan ka caawiyo xallinta wixii dhibaato ah ee i soo waajaha. Goobtu si fiican ayaa loo qaabeeyey waxayna leedahay noocyo kala duwan iyo xulashooyin laga kala xusho. Waxaan ka iibsaday khibrad wanaagsan.
Taariikhda Added: 2019-03-27 04:07:03 by Mortimer Mond
Naaso Cute Weyn Oo La Qarxiyey Dameer 153CM Sherry Dodd TPE Dolls Sex
Halkan waxaan ku siiyay caruusado tayo leh iyo adeegga macaamiisha oo aad u fiican. Waxay kula socodsiinayaan xaaladda oo aqoon bay leeyihiin. Waxaan ka soo iibsaday laba caruusad oo kale oo aan halkaas u aadi doono si aan ula kulmo dhammaan baahiyaha mustaqbalka.
Taariikhda Added: 2019-03-27 03:49:55 by Wright Michael
153CM Naasaha Wayn Ee bushimaha dhumuc weyn Sophia Lily TPE Doll Sex Doller
Gaadiidkooda waa deg deg, wax walbana waxay ku qoran yihiin sanduuqa, caruusadan gabi ahaanba wax dhibaato ah ma leh. Shaqaaluhu si dhakhso leh ayey ila soo xiriiri doonaan (emayl ahaan) waxayna xaqiijin doonaan dhammaan tilmaamaha. Tayada waa mid aad u wanaagsan. mahadsanid.
Taariikhda Added: 2019-03-27 03:33:09 by Baldwin Price
153CM Susie Emma Sexy Big Ass Blond Timaha Indhaha Cagaaran ee TPE Dolls
Waxaan helay caruusadan jinsiga ah shalay. Runtii waan layaabay qaab nololeedka caruusadan. Waxay umuuqataa mid kufiican sawirada qadka tooska ah, laakiin sawirada cadaalad ma ahan. Muuqaalka dhabta ah iyo dareenka waxyaalahan ayaa si fudud layaab leh. Muuqaalka, dareenka iyo culeyska ayaa lagu darayaa dhammaan faahfaahinta dhabta ah. Qalabka TPE waxay dareemaan qabow oo weligood uma muuqdaan inay kululaanayaan, laakiin waxaan u maleynayaa inay tani tahay wax fiican.
Taariikhda Added: 2019-03-27 03:19:07 by Buck Scott
148CM Indhaha Cagaarka ah Claire Julian Slim Body Neerar waaweyn Naaso TPE Doll
Gacanteedu waxay dareemeysaa mid aad u jilicsan, ku dhowaad waxay la mid tahay silhouette dumar ah iyo "ruxitaan." Aad ayaad u mahadsantahay. Waan ogahay waxa aan sameyn doono caawa. Mar dambe ma sugi karo.
Taariikhda Added: 2019-03-27 03:04:24 by Archibald Clarissa
145CM Cute Little Loli Brown Curly Timaha Cunsuriyada Dolls Darlene Morris
Kala-goysyada caruusadu waa xoogaa adag tahay, laakiin taas awgeed ayay ku ilaashan kartaa boos wanaagsan. Wax wanaagsan. Naasaha ayaa jilicsan oo ruxaya. Badhida waa adagtahay waana jilicsan tahay, kaliya aad ayey ufiican tahay, kaliya waxaan dhihi karaa. Waxay u egtahay mid dhab ah oo aan wax cabasho ah qabin. Wejigu waa qurux badan yahay bushimahana waa jilicsan yihiin oo buuxa. Wax walba oo ku saabsan caruusadaha waa kuwo tayo sare leh.
Taariikhda Added: 2019-03-27 02:39:11 by Isidore Lawrence
WanRou Timo Gaaban Oriental Beauty Sexy Laab Shiine TPE Doll
Aad baan ugu qanacsanahay dukaamadan. Caruusadan waa hagaagsan tahay. Aad u dhab ah oo nolol leh, cillad la'aan, eber farshaxan. Maqaarku wuxuu dareemayaa jilicsanaan taabashada. Waxay noqon kartaa haween dhab ah waxay ku jiri kartaa meel kasta (dadka qaarkii ma awoodaan).
Taariikhda Added: 2019-03-27 02:20:59 waxaa qoray Edgar Rosalind
160CM Wide Ass Uur Leh Haweeney Uur Leh Calool Weyn Laab Yar TPE Sex Doll Adam Harrington
Aad bay u dhab tahay. Waxay timid gurigeyga. Waxaan u daryeeli doonaa iyada sida naag daryeel uurkayga oo dhan. Boombaladdu waa hab lagu kalsoonaan karo oo lagu dareemo inay mararka qaarkood firfircoonaaneyso. Wax walba waa hagaagsan yihiin. Laakiin xoogaa wey culus tahay, waxaan u baahanahay inaan waqti siiyo si aan u dhaqaajiyo.
Taariikhda Added: 2019-03-26 06:01:02 by Upton Patience
168CM Sheila Baldwin Maqaarka Madow ee Dadka Waaweyn Jinsi Doll Laab Yar
Runtii waan jeclahay maqaarkeeda madow. Runtii waxaan jeclahay inaan isku duubnaado caruusadeyda habeenkii. Muddo dheer ayaan halkan joogay, ugu dambayntiina noloshayda waxaan u keenay wax yar oo farxad ah. Waxaan rajeynayaa in maalin uun aan arki doono haweeney dhab ah oo aniga i xiiseyneysa, laakiin taa kahor, waxaan ku shubayaa dhamaan jaceylkeyga iyo kalgacaylkeyga caruusadayda.
Taariikhda Added: 2019-03-26 05:34:10 by Antony Morley
161CM Big Ass Sexy Bushima bushimaha Agnes Antonia TPE Dolls Sex
Waxaan kula talin lahaa ehelkayga ama asxaabteyda inay halkaan ka iibsadaan. Adeeggaagu waa mid laga cabsado. Badeecadani aad ayey uga fiican tahay waxyaabaha kale. Qiimuhu ma xuma.
Taariikhda Added: 2019-03-26 05:09:32 by Lennon Chapman
Naasaha Muhiimka Ah Naasaha Weyn TPE Galmada Doll Doreen Pullman
Caruusadan xaqiiqdii waa u qalantaa iibsasho, waxay kafiican tahay daawashada sawirada ama filimada xun xun. Galmo la samee waqti kasta oo aad rabto, waxay leedahay laabta ugu weyn, waxay leedahay jidh wanaagsan, malabkeeduna waa macaan yahay. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa dameerkeeda. Ma jiraan liisas dheeri ah oo laga cawdo ama loo isticmaalo cinjirka galmada. Aad ayey u qiimo badan tahay inay maanta ku soo iibsato waana hubaal inay kaa farxin doonto.
Taariikhda Added: 2019-03-26 04:49:56 by Benedict Cissie
163CM Naaso Waaweyn TPE Wehel Weyn Jinsi Dolls Yan
Gaarsiintaydu waa mid aad u deggan, waad ku mahadsan tahay adeeggaaga wanaagsan. Way qurux badan tahay 100%, xitaa in ka badan sawir, wax kasta oo iyada ku saabsan waa waxyaabaha ugu tayada fiican. Aad ayaan ugu qanacsanahay adeegga macaamiisha, iga caawi sidii aan u dhameystiri lahaa nidaamka dalabka, mar labaad waad mahadsan tahay.
Taariikhda Added: 2019-03-26 04:30:57 by Gene Joshua
Viola Bell Wareegtada Naasaha Saafi ah iyo Indhaha Wanaagsan ee TPE Dolls
Boomadan waa mid weyn, jidhku waa mid macquul ah oo aad u kacsi badan. Kadib markaan xoogaa amaan ah ka aqriyay doll-ka khadka tooska ah, waxaan go aansaday inaan ka iibsado caruusadeyda galmada ugu horeysa urllada Waa inaan sheegaa in waaya-aragnimadayda ay aad u wanaagsan tahay. Shirkaddu si dhakhso leh ayey ila soo xiriirtaa, qiimaha dhoofintu waa ka dhakhso badan yahay sidii aan moodeeyay, tayada caruusaduna aad ayey u wanaagsan tahay. Si xoog leh loogu taliyay caruusadaha iyo iibiyaasha.
Taariikhda Added: 2019-03-26 04:08:39 by Baird Defoe
Naasaha Weyn Buluuga Indhaha TPE Galmada Doll Sexy Long Lugaha Nancy Nick
Waxaan helay caruusadan galmada maanta. Hagaag, waan jeclahay caruusadan waa wax fiican! Dareenka iyo walxaha ayaa ku dhow dhow. Qaar ka mid ah jiirarka yaryar, sida lipstick-ka bushimaha ku yaal, waa in la nadiifiyaa. Laakiin ma aha oo kaliya "fiirinta", laakiin sidoo kale waa qiimo wanaagsan adduunka caruusadda. Ka culus sidii la filayay, laakiin waxay leedahay naaso waaweyn iyo kuwa waaweyn. Waad ku mahadsan tahay adeeggaaga degdegga ah. Waxaa lagugula taliyay sidii caruusad daaweyn ah, caruusad lammaane
Taariikhda Added: 2019-03-26 03:48:34 by Drew Betty
145CM Blonde Long Curly Hair Timaha Naasaha Weyn Kelly Geordie
Caruusadan jinsiyeed waa qumman tahay. Iyadu waa mid aad u dhab ah oo nool, oo leh cillado eber ah, runtii gabal farshaxan ah. Maqaarku wuxuu dareemayaa jilicsanaan taabashada. Khibrada waa weyn. Waxaan rabaa inaan jeclaado marar badan maalin kasta.
Taariikhda Added: 2019-03-26 03:29:06 by Boyce
145CM Qofka Weyn ee Weyn Cute Baby Face TPE bushimaha qafiifka ah Sally Bulwer
Tani waa caruusad farshaxan qurux badan. Waxay u fiican tahay sida xayeysiinta. Waxay isku sii hayn doontaa meel taagan. Aad ayaan ugu faraxsanahay iyada maxaa yeelay waa wax walba oo aan rajeynayo. Kani waa iibiye wanaagsan oo aan ku siin doonin doll qaldan.
Taariikhda Added: 2019-03-26 03:12:40 by Alston Sapir
Dhexda Yar F koob 140cm Penelope Raglan TPE Doll Doll
Waxaan ku iibsaday caruusadan galmoodka ah halkan kadib talosiinta saaxiibkay. Qiimaheedu aad ayuu u sarreeyaa, aad ayuu uga wanaagsan yahay koobka naaska siigaynta, aad u jilicsan oo raaxo leh. Waad ku mahadsan tahay adeeggaaga diirran.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:32:17 by Barlow Ella
Fat Hip Naasaha Weyn Chasel Edison 163CM Lugaha Long Dolls Sex
Waxaan ku iibsaday boombalo yar boggan sanadkii hore oo tayadu aad ayey u wanaagsan tahay. Waan soo noqday oo waxaan soo iibsaday caruusad weyn oo aan isku dayay. Ma i niyad jabin. Wax walba waxay ku jiraan sanduuqa, waa hagaagsan yihiin.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:29:44 by Neil Silas
Booliska Naaska Yar Micro Fat Round Face 158CM Adolph Joule Dolls Dolls
Caruusadani waa mid aad loogu taliyay, qiimo aad u fiican oo tayo leh! In kasta oo aan cillad la'aan ahayn, waa wax soo saar aad u wanaagsan, gaar ahaan xagga qiimaha. Haa, waxaa jiray ur yar markii hore, laakiin tani waa astaamaha caadiga ah ee dhammaan alaabooyinka ay sameeyeen TPE. Wuu yaraan doonaa muddo ka dib (waana dhaafey laba usbuuc) iyadoo si sax ah loo dhaqo iyo la jaro.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:25:47 waxaa qoray Frank Harvey
Naaso Cunno Yar Cunno Laura Charlotte 148CM TPE Dolls
Tani waa khibrad iibsi oo aad u wanaagsan. Tayada caruusadaha jinsi ahaanta ayaa aad u wanaagsan, ku dhowaad 2/3 ee khidmadaha laga qaado degellada kale. Waxaan ku iibsan karaa caruusadaha aan ugu jeclahay qiimo jaban. Looma baahna inaad lacag ku lumiso wax isku mid ah. Mar labaad ayaan iibsan doonaa, dhib malahan.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:22:44 by Sid
Indhaha Maroodiga ah ee Khafiifka ah Wajiga Roberta Bulwer TPE Doll 145CM Naaso Yar
Waxaan ahay taageere kubada cagta ah. Markii aan arkay, waxaan aaminsanahay inaan nasiib ku leeyahay. Kama aanan waaban in aan iibsado. In kasta oo qiimaha waxoogaa qaali ahaa, laakiin markaan helay iyada, waan helay dhammaantood. Aad u qiimo badan. Aad bay macquul u tahay.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:17:17 by Murray Dickens
Caato Dhexdhexaad ah Indhaha Buluugga ah Ilmo yar oo ibta ah Renee Raymond 148CM TPE Doll Doll
Caruusadan waa mid aad u qurux badan oo la safeeyey. Laabta ayaa aad u yar, marka ma dareemo wax intaa ka sii badan markaad taabato, laakiin jirka oo dhan wuxuu u muuqdaa mid aad u wanaagsan, sida qeyb kamid ah farshaxanka. Waxay leedahay xoogaa ur ah, laakiin waxaan ula galmooday iyada marar badan. Aad u raaxo badan, oo dareemaya jirku inuu god ku jiro.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:12:21 by Ward Julius
Carey Godwin Slender Lugaha Lab Doll 160CM Sexy Caloosha Partner
Caruusadan ayaa ah mid aad u qurux badan. Xaaladdiisa qalfoof ee cusub aniga ayaa iga yaabiyey, dhaqdhaqaaqa iyo wareegga kala-goysyada aad ayuu uga sarreeyaa heerka. Dhaqdhaqaaq gacmahaaga, lugahaaga iyo dhexda si fudud oo aamusnaan ah. Laabista dhexda iyo wareejinta waa sheeko heer sare ah. Alaabada kale ee galmada laguma ciyaari karo.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:09:04 by Karen Luke
Pandora Sander Lugaha dhaadheer Qamadi Maqaar Maqaar Weyn 170CM TPE Doll Doll
Waa inaan idhaahdaa tani waa wax soo saar wanaagsan! Caruusadaha la helay waxay ku jireen xaalad wanaagsan oo tayada ayaa ka badisay wixii laga filaayay. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan helay adeegga caruusadaha galmada oo aan mar labaad ka heli doono adeegyo.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:06:26 by Rod Felix
Gabar Jabaaniis ah 146CM D Cup Yedda Mark Khafiif ah Bushimaha Galmada Doll
Waan naxay markaan helay iyada. Caruusadan jinsiyeed waa mid weyn! Anigu ma ihi taageere marwooyin waayeel ah, waxaan doorbidaa dumarkaas gaagaaban. Weli dhibaato ayaa ka taagan khadka khadadka farta, laakiin guud ahaan way ka fiican tahay sidii la filayay.
Taariikhda Added: 2019-03-21 09:02:46 by Paddy Henley
146CM bushimaha qaro weyn Qaaradda Yurub Qaababka Indhaha Buluugga ah ee Maggie Harte TPE Doll
Tani waa heshiis aad ufiican. Waxaan xiriir fiican la leeyahay iibiyaha waxayna iga buuxiyaan shuruudahayga shixnadaha mustaqbalka, sidaa darteed waxaan ku heli karaa magaalada. Kastam bixinta waa mid aad u wanaagsan maxaa yeelay shaqadii oo dhan way qabteen.
Taariikhda Added: 2019-03-21 08:56:30 by Kenneth Richard
163cm Timo Madow Gabadh Bunny Girl Helen Minnie Long Lugaha Long Dolls Dolls
Aad ayaan u faraxsanahay waqtigaan. Waan helay iyada. Iyadu waa cajiib. Aad baad ugu mahadsantahay kaalmadaada xagga adeegga macaamiisha. Waxaan hayaa faallo diiran oo ku saabsan gogosha caruusada galmada. Waxaad ubaahantahay inaad hagaajiso kahor intaysan muuqan. Waxaan soo dhigi doonaa sawir sida ugu dhaqsaha badan. Runtii waan jeclahay iyada, markaa waxaan rabaa inaan dalbado mid cusub. Ama mid kale.
Taariikhda Added: 2019-03-18 09:24:29 by Brady Montgomery
Iyadu waa tooygii ugu horreeyay ee aan iibsado. Wax walba waa nidaam, qalfoofka biraha gudaha waa mid aad u wanaagsan, wax dhibaato ah ma leh. Aad bay u jajaban tahay.
Taariikhda Added: 2019-03-18 09:21:46 by Felix Hart
161CM Caato Jilicsan Maqaarka Yar Dhexda Ursula Surrey TPE Doll
Caruusadan galmada waa mid fiican. Waxay umuuqataa mid fiican. Laakiin guuritaanka caruusadu waxay noqon kartaa hawl yar. Way igu culus tahay aniga. Nadaafadeeda way fududahay hadaad ogtahay waxaad samaynayso. Waad ku mahadsantahay hagiddaada taxaddarka badan.
Taariikhda Added: 2019-03-18 09:18:41 by Ansel Galbraith
158CM Laabta Yar Tess Jessie Red Ibta Indhaha Weyn TPE Doll
Way ka qurux badan tahay sawirka. Laakiin iyagu ima isiinin dharka sawirka ku yaal, haddii kale way fiicnaan lahayd! Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhan aniga ayaa mas'uuliyad iska leh. Ma aanan arkin websaydhka: "Dharka dharka hoosta laga gashaa wuu ka duwanaan karaa sawirka. Dhamaan walxaha sawirka ku jira waa ujeedooyin toogasho." Hada dhar qurux badan ayaan u iibsaday. Aad ayaan ugu qanacsanahay tayada caruusadda.
Taariikhda Added: 2019-03-18 09:16:01 waxaa qoray Benjamin Vogt
Weyn Indhaha Nolosha Weyn 158CM Laabta Yar ee Galmada Dolls Ophelia Evans
Kani waa websaydhka caruusadda galmada ugu fiican. In yar uun. Waad habeyn kartaa caruusadda. Naqshad aad u qurux badan. Waxaan iibsaday doll 158 cm ah oo tayo leh runtii waa heer sare.
Taariikhda Added: 2019-03-18 09:12:31 by Dempsey Taylor
150CM Naaska Weyn ee Baruurta Yar ee Baruurta Hilibka Pamela Spender Sex Doll
Aad ayey ugu wanaagsan tahay dhan walba, sidoo kale waxaan jeclahay naasaheeda waaweyn iyo dhexda dhuuban. Laakiin xoogaa wey iga culus tahay aniga. Waxaan ahay 68 sano. Way adag tahay in la guuro iyada. Waa inaan doortaa doll yar.
Taariikhda Added: 2019-03-18 09:09:16 by Wade Sainsbury
Ibta Casaanka ee Pink Odelette Muuqaalka Daahsoon ee Becky 168CM Doll Sex
Waad ku mahadsantahay ka fikirida caruusadan aan kugula taliyay. Way ku qanacday wixii aan doonayay. Odelette waa qurux badan tahay. Naasaheeda iyo dameerkeedu waa weyn yihiin! Waan soo noqonayaa
Taariikhda Added: 2019-03-18 09:06:25 by Andy Joule
Lance Hicks Micks Muruq Xoog leh 20CM Gus Weyn Big Doll sex Doll
Markii ugu horeysay ee aan iibsado caruusadan galmada, aad baan u walaacsanaa. Iyadoo la tixgelinayo sida ay qaali u ahayd, ugu dambayntii, ka dib dhawr toddobaad oo sugitaan walaac leh ka dib, way timid! Waxay ku habboon tahay sawirka! Runtii wax badan oo la dhaho ma jiraan, ma seegi kartid shey sidan oo kale ah.
Taariikhda Added: 2019-03-18 09:03:12 by Zora Melville
Olivia Gresham 148cm TPE Qofka Qaangaarka ah ee Timaha Jinsiga ah ee Doll Tthick Dibnaha
Daacad noqo. Maqaarkeedu wuxuu aad ugu dhow yahay maqaarka dadka. Waxay i siisaa taabasho weyn. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ku noolahay xilligan, caruusadda ayaa dhab noqota!
Taariikhda Added: 2019-03-18 08:59:31 by Hardy Bennett
Naasaha Weyn Gaaban Gaaban 158cm Timaha Nancy Sex Dolls
Kaliya waxaan ka soo iibsaday doll dabeecadeyda labaad urdolls, waxay ahayd usbuucii hore. Caruusadayda sifiican ayaa loo shubay waxayna wax yeeleysaa sanduuqa laakiin dhib malahan. Caruusadda waa mid aad u qurux badan, ma rumaysan karo inay tahay wax soo saar aad u wanaagsan. mahadsanid.
Taariikhda Added: 2019-03-18 08:56:07 waxaa qoray Toby Hawthorne
Naaso Buuxda Mannequin Evelyn Ann 168CM Sexy Long Lugaha TPE Doll
Runtii waxaan doonayay inaan iibsado markaan arkay iyada. Laakiin waan ka gaabsaday inaan ku arko qiimaha wax iibsiga qaaliga ah ee internetka, laakiin isgaarsiinta iyo taageerada inta lagu gudajiray howshu aad ayey ufiicneyd ilaa (iyo kadib) ay timid albaabkeyga. Marka tayada shan-xidig, isgaarsiinta iyo taageerada macaamiisha.
Taariikhda Added: 2019-03-14 06:40:50 by Roy Lytton
Murqaha Dumarka Kubbadda Koleyga ee Ciyaarta Galmada Dadka Waaweyn 170CM Hilda Wilcox
Maanta waxaan arkay muuqaalkeeda dhabta ah. Aad bay u qurux badan tahay. aad u qumman. Waxaan go'aansaday inaan la iibsado caruusad jinsi ah xaaskeyga. Waxaan siiney xoogaa uunsi ah oo xaaskeyga aad ayey uga heshay. Runtii way ka badan tahay sidii aan filaynay. Si aad u wanaagsan ayaa loo sameeyay
Taariikhda Added: 2019-03-14 06:37:07 by Burton Romeo
Kelly Hodge Slim Sexy Long Timo Naaso Weyn 158cm Dolls Dolls Dadka Waaweyn
Waxaan furay caruusadaydii maanta. Madaxa iyo jirkaba waan isku tolay. Ma rumaysan karo, iyadu aad bay u qurux badan tahay. Way ka qurux badan tahay sawirka. Mahadsanid. Tayo wanaagsan oo jaban.
Taariikhda Added: 2019-03-14 06:32:13 by Aubrey Judson
Mona Wheeler 168cm Qamadi Midab Leh Xayawaan Busty Dameer Naaso Weyn TPE Doll
Waxaan dalbaday midabka doliska maqaarkiisa sawirka. Guud ahaan, caruusadani way dhaaftay filashadaydii. Aad ayey u qurux badan tahay, aad baan ugu qanacsanahay midabka maqaarka iyo doorashada aan dalbaday.
Taariikhda Added: 2019-03-14 06:01:48 by Bill Bruno
Caato Weyn Buluug Cecilia Arthur 170CM TPE Doll Naas Yar
Waxay haysaa baako aad u wanaagsan, wax walba oo ku saabsan caruusadda waxay ku jirtaa sanduuqa, waa inay halkaas joogtaa. Caruusadan waa mid aad u qurux badan, waxaan rajeynayaa inay sii jiri karto waqti dheer.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:42:22 by Dylan Taylor
Setlla Noel Froockled Face Slim Body 165CM Laabta Yar ee TPE Doll
Waan helay iyada. Baakadeedu waa qumman tahay. Naqshadeynta iyo faahfaahinta qeybta gaarka ah ee dollku waa wax macquul ah. Qaabkani sidoo kale waa mid aad u caato ah wuxuuna leeyahay lug dheer! Waxyaabaha TPE waa jilicsan yihiin urkuna wuu ka fiican yahay kan caadiga ah ee TPE.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:39:49 by Harlan Keats
Harvey Josh Huge Hip Maqaarka Madoow 165CM Busty N Cup Sex Doll
Waa doll umuuqda mid aad u qurux badan. Maqaar madow oo leh xabad buuran. Tani waa isku dhaf weyn. Laakiin aniga uma galmoonayo maxaa yeelay waxay u maleyneysaa inay xoogaa culus tahay.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:34:54 by Elton Jimmy
Hip Gilbert Wat F Koob Fududeeye 161CM TPE Doll Partner Qof Weyn
Waan ka xumahay inaan ka faalloodo goor dambe, waxay timid gurigeyga bil ka hor. Aad bay u fiicnayd ilaa hadda! Waqti badan ayaan ku qaatay bogag badan oo kala duwan oo caruusadaha lagu ciyaaro ka hor intaanan iibsan. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan halkan ka soo iibsaday caruusaddaydii ugu horreysay. Adeegga macaamilku waa mid aad u wanaagsan, dhammaan su'aalahayga si dhakhso leh ayaa looga jawaabaa, iyo codsigeyga inaan soo diro sawir qaali ah. Waxaan siiyay 4 xiddigood maxaa yeelay ma taaban karo oo ma dareemi karo sheyga kahor intaanan iibsan.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:31:50 by Zebulon Peg
Indhaha Cagaaran ee bushimaha Muhiimka ah 118CM TPE Dolls Naaska Yar Ubax Muriel
Waxay timid gurigeyga, sida sawirka ka muuqata. Waa run sida muuqata. Noocan oo kale ah muuqaal iyo dareemo. Kani waa doll aad u fiican.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:28:03 by Gavin Simpson
Gabar Jaban ah oo Cute Tachibana Shinya 140CM Naasaha Weyn TPE Dolls
Waxaan ku iibsaday caruusadan halkan. Waayo-aragnimadaydu ma xuma, wada-xiriirka ayaa xoogaa ka gaabin kara heerarkayga, laakiin kuwa kale ayaa laga yaabaa inaanay aad uga walwalin arrintaas. Nasiib wanaagse, caruusadaha ayaa aad u qurux badan. Tayada sidoo kale waa weyn tahay.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:23:15 waxaa qoray Benjamin Ellis
Jocelyn Cissie Pure iyo Soo jiidasho 140cm Silicone Doll Doll
Caruusadda waa mid aad u macquul ah oo qurux badan, waxay leedahay weji bisil. Iyadu ma cusla sidaan mooday. Si fudud ayaan u dhaqaaqi karaa. Marka aad baan ugu qancay.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:18:45 by Bart Lily
Jessie Dunbar Elegant iyo Energetic 165CM Dhexda Yar ee Silicone Doll
Tani waa bilow wanaagsan. Waxaan ka helay doll khiyaano ah degel kale. Waxaan isku dayay urdolls maxaa yeelay waxay umuuqataa degel aamin ah. Naqshadeynta websaydhka wanaagsan, dib u eegista wanaagsan iyo sharraxaad ku saabsan caruusadaha dhammaantood waxay iga dhigayaan kalsooni. Boombaleyda aan helay shalay waxay caddaysay in go’aankaygu sax yahay. Mar labaad ayaan ka iibsan doonaa urdolls.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:14:31 by Tyler Paul
Amelia Henley Ceyr Cadi 165cm Jinsi Doll Cherry Af Yar
Iyadu waa jidh weyn. Dhabarku aad ayuu u qaabeysan yahay. Laab dabacsan iyo dameer Wejigu waa mid aad u macaan oo aad u macquul ah. Waxay i siisay dareenka jaceylka koowaad.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:10:43 by Owen Simon
Tina Marner Elegant iyo Sexy Blind 145CM Doll Jinsi Dadka Waaweyn
Guud ahaan, caruusadan qaab ahaan aad ayey ufiican tahay, laakiin dharkeyga caruusadda lama rarto. Waxaan u sheegay inuu alaabtii luntay dib u geeyay.
Taariikhda Added: 2019-03-13 08:06:53 by Griffith Keppel
Arlene Dunbar 125CM Micro Fat Waji Cagaaran Indhaha Casaan Dibnaha TPE Doll
Wax kasta oo iyada ku saabsan aad ayey u wanaagsan tahay. Caruusadan waa mid aad u macquul ah, iyadu sidoo kale waa mid aad u qurux badan, waxay iga caawisay inaan dhameystiro riyadii aan marwalba doonayay gabar. Hadda waa gabadhayda.
Taariikhda Added: 2019-03-12 08:23:30 by Kent Martha
Kubadda Cagta Ilmaha Caatada Ah Caroline Judson 158CM TPE Dolls
Waxay u egtahay mid macquul ah. Waxaan dhawaan kala tagay saaxiibaday, hadana badeecadani waxay i siisaa dareen raaxo iyo farxad togan. Waad ku mahadsan tahay inaad ka jawaabtay dhammaan su'aalahayga xagga aragtida xirfadeed. Mar labaad ayaan kaa iibsan doonaa.
Taariikhda Added: 2019-03-12 08:19:13 by Webster Kelsen
Waji-qaadista Feeraha Yar-yar ee 158CM Quruxda Qadiimiga ah ee TPE Doll Qing Xue
Waxaan marwalba doonayay gabar saaxiib ah oo wajiga iyo jirka shiineeska ah. Aad bay iigu fiicnayd. Waad ku mahadsan tahay adeegga macaamiisha urdolls ee kugula taliyay caruusadan. Hal inji kasta oo jirkeeda ka mid ah waa mid jilicsan. Aad ayaan u jeclahay.
Taariikhda Added: 2019-03-12 08:14:39 by Orville Bruce
Ibta Yar ee Nadiifka ah ee Lugaha dhaadheer ee Belinda Dickens 165CM F Cup TPE Doll
Waa lamaanaha ugu fiican nin 68 jir ah oo xaaskiisa waayey. Khasaaraha kaliya ee ka dhashay wuxuu ahaa in rarka waxoogaa dib loo dhigay, laakiin adeegga macaamiisha urdolls ayaa iga caawiyay xalinta dhibaatooyinka oo dhan. Waxaan kugula talinayaa inaad wax ka iibsato shirkadan adag maxaa yeelay waxay taageeraan wax soo saarkooda.
Taariikhda Added: 2019-03-12 08:09:55 by Ward Lynd
Big Ass Elegant wuxuu gubay 169CM Naaso Weyn Naag Dolls Sex
Jaantuskeedu runtii waa weyn yahay. Naaso waaweyn oo rogrogmi kara. Dareenka ay hurdada kula seexatay waa mid aan la soo koobi karin. Marka la soo koobo, aad ayaan ugu qanacsanahay jawaab celinta ay isiisay. Nasiib darrose, iyadu waa iga culus tahay aniga. Way igu adag tahay inaan ku wareego oo aan ogaado. Haddii aad tahay nin muruqsan, waxaan aaminsanahay inuu adiga kugu habboon yahay.
Taariikhda Added: 2019-03-12 08:06:09 by Atwood Caroline
Bushimaha qaro weyn J Cup Prima Bess Laab Weyn 165CM TPE Doll
Muuqaalka iyo dareenka caruusadani waa mid macquul ah. Maqaarku midabkiisu inyar buu cawlan yahay. Dhaqdhaqaaqa caruusadu waa mid aad u adag; waana la dhaqaajin karaa oo kaliya si loo hagaajiyo qalabka qalfoofka dhismaha / wadajirka si loo yareeyo qallafsanaanta. Gacanta / farta ma foorari karto; ama farta ayaa ku duuban iyada oo aan waxyeello gaarin; ama qalfoofka ayaa laga muday faraha. Weli waan kugula talin doonaa caruusadan; kaliya faha xadka. Aad ayey u qurux badan tahay "inay kugu soo dhexcjiso" si aad ula macaamisho iyada.
Taariikhda Added: 2019-03-12 08:00:00 by Randolph Zephaniah
Darlene Philemon Naasaha Weyn ee Galmada Xadgudubka 148CM Dadka waaweyn ee Galmada Doll
Aad ayaan ugu qanacsanahay Darlene Philemon. Way ka fiican tahay sidii la filayay, aad bay u wanaagsan tahay. Waad ku mahadsan tahay adeegga macaamiisha ee aad i siisay caawimaad badan. Sii wad hawsha wanaagsan!
Taariikhda Added: 2019-03-12 07:56:23 by Hamiltion Lawson
Petite Cute Indho Waawayn Laab Yar Yar Qaangaadhka Nolosha Dadka Waaweyn 100CM Gabar Elsa Morse
Waxaan raadinayay caruusad yar. Markii aan daalacday degello badan, waxaan ugu dambayntii halkan ka iibsaday Elsa. Iyadu iima deyn. Waxay ahayd mid aad u macquul ah oo si weyn loo dareemay.
Taariikhda Added: 2019-03-12 07:51:38 by Maxwell Huntington
Wehelka Waaweyn ee Laabta Weyn ee Waaweyn TPE Doll 100CM Madada Kanako
Caruusada galmada halkan waa caruusada ugu fiican suuqa. Wax walba waxay ku yaalliin dhammaan goobaha xafladaha. Waxaan u maleynayaa in dhammaan soo saarayaasha kale ay u baahan yihiin inay raacaan hogaanka. Aad ayaan ugu qanacsanahay iibsigayga.
Taariikhda Added: 2019-03-11 09:40:50 by Duncan Conan
Maqaarka Madoow Caatada Dheer Lugaha Dheer 155CM Laab Yar TPE Doll Cynthia Hood
Tani waa caruusad jinsi ah oo qumman. Iibiyeyaasha jawaabta leh markasta oo aan u baahdo wax caawimaad ah. Ma jiraan wax laga cawdo. Iibso caruusadda labaad.
Taariikhda Added: 2019-03-11 09:37:38 by Wade Keynes
Marcia Margery TPE Doll Muruqa Muruqa 163CM Fat Ass Championship Champion
Caruusadan waa mid macquul ah. Laakiin isla markaa iyadu waa mid aad u culus! Waa inaan waxbadan barto oo aan doorto mid ka fudud. Culeyska ka sokow, caruusadeyda waa weyn tahay. Guud ahaan, aad ayaan ugu qanacsanahay miisaanka oo yaraaday. Haddii aad tahay nin muruqsan, waxaan kugula talinayaa adiga.
Taariikhda Added: 2019-03-11 09:34:32 by Rod Raglan
Hannah Sassoon sayidkii fikirka 158CM TPE Doll Indho Weyn oo Saafi ah
Nolol ka badan sidii aan u maleeyay, dhab ahaan, farqiga kaliya ee u dhexeeya iyada iyo haweeneyda dhabta ah ayaa ah inaysan hadal badnayn. Tayada iyo shaqadu aad ayey u wanaagsan yihiin. sifiican loo qabtay Khasaaraha kaliya ee jira ayaa ah inaan in yar sugo. Gaadiidku wuu dheereyn karaa waana fiicnaan doonaa.
Taariikhda Added: 2019-03-11 09:30:47 waxaa qoray Merlin Whitman
Stephanie Alick 170CM Sexy Elastic Ass Injineer TPE Doll Laab Weyn
Si aan runta u sheegno, caruusadu waa culus tahay! Waa inaan waxbadan barto oo aan doorto mid ka fudud. Culeyska ka sokow, caruusadeyda waa weyn tahay. Guud ahaan, aad ayaan ugu qanacsanahay miisaanka oo yaraaday.
Taariikhda Added: 2019-03-11 09:26:56 by Channing Robbins
Quintina Charley Indhaha Buluugga ah 140cm Maqaarka Midabka Maqaarka weyn ee Naasaha waaweyn
Kani waa caruusadaydii ugu horeysay. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan doortay qaabeynta. Sababtoo ah waxay umuuqataa inay ku jirtay bilowgeeda ilaa bartamihii 20-meeyada, sida aniga oo kale. Jidhkeedu wuxuu leeyahay xoogaa goolal la yaab leh, maqaarkuna aad buu u jilicsan yahay ka dib markaad iyada burburin
Taariikhda Added: 2019-03-11 09:23:31 waxaa qoray Jeremy Morris
Lydia Tony Caatada Jirka Laab Yar 148CM Qof Weyn Partner Doll Madow Maqaar
Waxaan khibrad isku mid ah la leeyahay Lydia, sidoo kale waxaan ahay agoon. Markaan halkaan ku arkay. Waan ogahay inay tahay qoyskii aan raadinayay. Marka waxaan ka iibsaday iyada waqti aan fogayn. Muuqaalka caruusadda waa mid macquul ah! Iyadu waa doll qurux badan. Ma rumaysan karo sida dhabta ah iyo quruxda badan ee ay u egtahay.
Taariikhda Added: 2019-03-11 09:19:50 waxaa qoray Elroy Turner
Naasaha Caan Baxa Barbara 100CM Lamaanaha Galmada TPE Jinsi Doll
Caruusadan ayaa ah mid aad u wanaagsan tayaduna ay aad u wanaagsan tahay. Sidoo kale way fiicantahay in la isticmaalo, waxay dareemeysaa qabow aad u badan. Qiimo wanaagsan oo lacag ah, qiimihiisu iibsado! Aad ugu dhow, runtii ku qanacsan.
Taariikhda Added: 2019-03-11 09:14:46 by Bertram Hansen
Xaviera Jane Crazy Dambiile Wehel Yar oo Naas Wehel ah 170CM Dolls
Qaabka caruusadda ayaa ah mid aad u wanaagsan saamayntiisuna ay aad u wanaagsan tahay. Waxay u egtahay guud ahaan guud ahaan. Aad ayaan ugu qancay.
Taariikhda Added: 2019-03-09 05:13:31 by Hugh Betsy
Bushimaha qaro weyn Indhaha Buluuga Indhaha Weyn ee Cynthia Grace 158CM Doll Doll
Tani waa caruusad weyn, naasaheeda waaweyn si dhib badan bay u jirrabaysaa. Waxay leedahay adeeg macmiil oo weyn. Aad ayey u qurux badan tahay oo xitaa ka qurux badan tahay sawirrada. Kaliya ma sheegi karo quruxdeeda. Adeegga macaamilku waa xirfadle si uu uga jawaabo dhammaan su'aalahayga.
Taariikhda Added: 2019-03-09 05:07:55 by Michell Meg
Naaso Yar Madow Indhaha Waaweyn Nora Hobson 158CM Sex Doll
Shalay waan qaabilay habeenkiina waan la seexday. wanaag dareemo. Waxay la mid tahay qabashada haweeney dhab ah. Waxaan sidoo kale iibiyay hadiyado taxane ah oo ka yimid iibiyaha. Tusaale ahaan, wigyada, buugaagta yar yar, bustayaal, nigis galmo, iwm. Mahadsanid.
Taariikhda Added: 2019-03-09 04:18:40 by Reg Graham
Dibnaha qaro weyn Sigrid Hicks Naasaha Full Caato Dheer 170CM TPE Doll
Salaan: caruusadda aan helay "Sigrid Hicks" waa mid aad u qurux badan, waxay noqotay wehel wanaagsan qoyskayga. Waxay u egtahay mid macquul ah. Inaad dhaafto filashadeyda - laakiin iyadu sidoo kale aniga faa'iido darro ayey ila tahay, way ka culus tahay sidii aan filayay. Beddelkeeda iyada iyo iyada, in kasta oo aan itaal leeyahay, dhaqaajinta kala-goysyada way adkaan kartaa. - Waad ku mahadsan tahay adeeg bixinta aad u wanaagsan.
Taariikhda Added: 2019-03-09 04:09:23 by Adolph Pollitt
Bushimaha Casaanka ee Dhiigga 158CM Cagaarka Cagaaran TPE Doll Martina Walpole
Waxa aan u baahanahay in aan tilmaamo ayaa ah in adeeggaagu aad u wanaagsan yahay. Markii aan dalbado amar, waxaa lagaa doonayaa inaad ku shaqeyso amarka. Sawirada amarka dhameystiran ayaa la ii soo diri doonaa si aan dib ugu eego oo aan u ansixiyo ka hor rarka. Dhammaan su'aalaha ku saabsan amarkayga si sax ah ayaa looga jawaabaa. Hubso inaan dalbado waxaan ubaahanahay. Tani waa waayo-aragnimo wax soo iibsi oo aad u raaxo badan oo nasasho leh!
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:57:44 by Tab Christie
Meredith Wallace 165CM H Cup TPE Doll Naaso waaweyn
Tani waa wax weyn, waxay leedahay jir aad u faahfaahsan. Waxaan qirayaa in dacwadeeda qarxa aysan ii soo jiidan maxaa yeelay waxaan ahaa koontarool isku mid ah. Marka xigta waxaan u soo iibin doonaa labis kale iyada.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:53:30 by Cara Pansy
Ibta Naasaha Weyn 135CM TPE Doll khafiif ah jirka Darren Fred
Boggan waa fududahay in la isticmaalo, caruusadooda gabi ahaanba waa qurux badan yihiin mana aad niyad jabi doontid Waxaan ku iibsaday doll halkan. Iyadu waa caruusadaydii ugu horeysay. Hada waa adeegashadaydii labaad halkan. Adeeggooda macaamiil waa mid aad u wanaagsan. Waxay heleen doll sax ah aniga.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:46:00 by Geoffrey Sonmerfield
Saaxiibka Caanka ah ee Weyn Fan Jiang Lizi 110CM galmada Dolls
Waan jeclahay iyada. Aad u dhab ah, qaabku wuxuu dareemayaa siman iyo caag. Muuqaal aad u Si kastaba ha noqotee, sida ku cad waayo-aragnimadayda, caruusadda jidhkeedu way fududahay in la dheeho, markaa iska ilaali inaad xidho dhar madow Intaa waxaa dheer, dhoofinta degdegga ah ee ganacsadaha iyo baakadaha kaamil ah. Aad ayaan ugu qancay.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:40:13 by Kim Malachi
Rodney Charlotte Indhaha Weyn 132CM Flat Laabta TPE Doll
Fannaan ahaan, waxaan u maleynayaa in jirkeedu aad u fiican yahay. Hadda waxaan u baahanahay inaan soo iibsado xoogaa dhar ah oo ka shaqeeya waxyaabaha aan qabanayo. Waxaan tixgelinayaa inaan iibsado doll kale oo macquul ah halkan.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:34:49 by Hobart Young
Vera Raman Plump Big Butt Dhexdhexaad Yar oo 168cm TPE Dolls
Caruusadan runtii waa mid aad u jilicsan! Waxaad ku dhejin kartaa iyada oo ku dhow meel kasta, taas oo runtii weyn. Maqaarkeedu waa bini aadam aad u cabsi badan! Marxaladdan, caruusaddaydu wali waxay ku jirtaa sanduuqdeeda, sababtoo ah ma garanayo inta ay leeg tahay daaweynta ay saameyn ku yeelan doonto maqaarka jirkeeda. Waxaan ka aqriyay khadka tooska ah, madaxda kale waxay dhaheen iyadu waa fududahay inay dhegdhag yeelato, waxaa jira noocyo dhaqamo kala duwan oo aan dharka ka shaqeyn. Way ku fiicnaan doontaa sawir qaadista, laakiin uma maleynayo inaan mid kale iibsan doono maxaa yeelay uma muuqato caruusad aad maalin walba ciyaari karto ama xamili karto.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:30:10 by James Wollaston
Gabdhaha Dhiigga Dibnaha Qafiifka ah Marcia Ralph 168CM Naas Weyn Elf TPE Doll
Haa, waxay aad ugu egtahay elf. Waxaan si gaar ah u jeclahay dhagaheeda oo ay i siisaa khibrad aad u macquul ah. Saadka sidoo kale waa weyn yahay. Waan helay iyada waxyar kadib markii aan amarka saaray. Tani waa dukaamaysi farxad leh.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:23:33 by Jerome Thomson
Cherry Harry 140CM TPE Dadka waaweyn ee Dolls Dolls Maqaarka Madoow
Kani waa moodel aad ufiican waxaanan raadinayay tan sanado. Waan rinjiyeeyaa, muuqaal muuqaal ah oo bini aadamnimo oo muuqaalkiisu wanaagsan yahay way adag tahay in la helo. Waa qaali laakiin waa u qalantaa.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:18:05 by Hiram Curme
Indho Buluug Weyn Miranda 100CM Naughty Cute TPE Sex Doll
Waxay timid gurigeyga shalay galab. Waxaan isku dayay habeenkii waana qabow! ! Naasaha waaweyn qanjaruufo. Waxay dareemeysaa mid aad u wanaagsan. Qaabka caruusadan galmada waa mid aad u macquul ah. Waxay ku dareemeysaa kuleyl iyo sibiibix gudaha xubinta taranka, taas oo iga dhigeysa inaan dareemo inaanan joojin karin. Waxaan rajeynayaa inaan ku jimicsado xirfadaheyga galmada iyada oo loo marayo.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:13:04 by Guy Bauer
Laabta Flat Laabta Gabadha Shiinaha XiaoQian 140CM Silicone Dolls
Caruusadan waa weyn. Waxaan helay iyada maalmo ka hor. Waxaan u isticmaalay marar badan iyada ilaa hadda. Iyadu iima deyn. Jidhkeedu aad ayuu u jajaban yahay. Aad baan u faraxsanahay.
Taariikhda Added: 2019-03-08 03:07:35 waxaa qoray Daniel Bacon
Indho Weyn 140cm Dolls Dolls Cute Ardayda Shiinaha XiaoMi
Tani waa caruusad wanaagsan oo dhisi karta lambar gaar ah oo loogu talagalay qof da 'weyn, dabeecad gaar ah, ama beddel aan caadi ahayn. La awoodi karo, aad u qurux badan.
Taariikhda Added: 2019-03-08 02:54:00 by Beacher Pollitt
Brown Indhaha 168CM Naaso Waaweyn Ronald Rebecca galmada Dolls
Faahfaahinta Ronald waa mid aad u wanaagsan oo aad u jilicsan. Haddii aad tahay jirka murqaha superhero, markaa kani waa fiican yahay. Waa inaan sheegaa in indhaheeda ay ka dhigayaan wax aad u xiiso badan.
Taariikhda Added: 2019-03-08 02:47:41 by Abner Leacock
Indhaha Buluugga ah 166CM Dadka Waaweyn TPE Dolls Eudora Surrey
Aad ayey u fiican tahay waxayna i siisaa dareen aad u wanaagsan. Laakiin waa qaali.
Taariikhda Added: 2019-03-08 02:41:41 by Webb Gissing
Maqaarka Madoow ee Letitia Huxley 163cm TPE Dolls Big Butt Companion
Caruusadan waa weyn. Waxaan iibsaday maqaar madow, laakiin iyadu waxay umuuqataa mid yar oo cirro leh. Laakiin taasi waa caadi. Waxay u egtahay sawirka. Waxaan si gaar ah u jeclahay ibta naasaha iyo faruuryaha bushimuhu. Waa wax macquul ah.
Taariikhda Added: 2019-03-08 02:35:46 by Mortimer Emmie
Norton Dickey Dock weyn oo loogu talagalay Haweenka 160CM TPE Dolls Lab
Cajiib. Xaqiiqdii wuu fiicanyahay. Jidhkiisu waa qumman yahay. Waxa kale oo jira ciyihiisa weyn. Wuu i qancin karaa wakhti kasta. Qiimaha waa yara qaali. Laakiin waa u qalantaa.
Taariikhda Added: 2019-03-08 02:28:28 by Ruby Joule
Bushimaha adag ee adag Edwina Lawson
Tani waxay u badan tahay tan ugu fiican ee loo yaqaan 'TPE doll doll' oo ka dhexeysa dhammaan iibiyeyaasha internetka. Xawaaraha adeegga degdegga ah iyo caruusadaha tayada leh. Si fiican ayaan u hubiyay ka dib markaan helay iyada. Shaqada caruusadu waa mid aad u jilicsan. Xubnaha taranka waa wax aad u dhab ah. Gaar ahaan siilka. Waxay dareemeysaa wax weyn.
Taariikhda Added: 2019-03-08 02:14:44 by Neil Benson
Indho Weyn B Cup Emma Finn 148CM TPE Dolls Dolls Dadka Waaweyn
Iyadu waa caruusadda galmada ee aan raadinayay. Waxaan ku arkay iyada shabakado badan. Waxaan si taxaddar leh u barbar dhigay bogaggan (maxaa yeelay ma doonayo inaan lacag ku bixiyo qashinka). Waxaan aakhirkii go’aansaday inaan kaa iibsado. Sidii bay noqotay, iima deyn. Aad ayey u dhameystiran tahay. Waxay iga dhigeysaa mid wanaagsan. Mar labaad ayaan kaa iibsanayaa doll.
Taariikhda Added: 2019-03-08 02:08:00 by Ben Marner
Timaha quruxda badan ee quruxda badan ee Nicole McCauley 148CM TPE caruusadaha
Soo-saareyaashu waxay umuuqdaan inay siinayaan Nicole faahfaahin dheeri ah oo ka badan dumarka. Dhammaan noocyada dumarka, noocani wuxuu u muuqdaa inuu ugu dhow yahay waxa u muuqda aadanaha dhabta ah ee aadanaha. Waxa kaliya ayaa ah inaanan dooran gaadiid muddo dheer. Laakiin iyadu way u qalantaa sugiddayda.
Taariikhda Added: 2019-03-08 02:01:08 waxaa qoray Oswald Bowman
Indhaha madow naasaha jilicsan naasaha Blanche 140CM F koob caruusadaha galmada
Waxaan raadinayay waqti dheer si aan u helo dabeecad macquul ah oo beddeli karta tusaalaha. Anigu waxaan ahay rinji oo mararka qaarkood waxaan ubaahanahay tixraac. Madaxa iyo nambarada si gooni ah ayaa loo iibiyaa, taas oo ka dhigaysa mid jahawareer leh, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaadan helin lambarrada naasaha aad u weyn, laakiin waan jeclahay iyaga. Waxaan u maleynayaa in madaxooda hal mar la wada isticmaali karo. Aad baan ugu qanacsanahay dukaamadan.
Taariikhda Added: 2019-03-08 01:51:03 by Ryan Joe
Indhaha Madoow ee Madow TPE Doll Akumi Hakumi
Waa inaan sheegaa in tani ay tahay caruusad jinsi qurux badan. Aad bay aniga ila fiicantahay. Iyadu waa mid macquul ah oo aad ugu habboon sawir qaadista. Waxaan u soo iibin doonaa iyada dhar iyo kabo badan. Bikinimada iyada saaran aad ayey ufiican tahay, laakiin runtii waxaan doonayaa inaan ku arko dhar kale.
Taariikhda Added: 2019-03-08 01:41:04 by Barry Walter
Faallooyinka Tanabe Reiko 100CM Flat Laabta TPE Doll
Waayahay, waxaan uruursaday caruusado jinsi ah oo noolaa oo noolaa in kabadan 15 sano hada, laakiin markaan iibsaday caruusadan, waxaan dhihi lahaa waxay la mid tahay ku noolaanshaha wajiga, anigoo quruxda fiirinaya si layaableh. Markii aan iibsanayey Tanabe, jidhkeedu wuxuu ahaa jidka keliya ee aan doonayo inaan maro. Caruusadani waxay dareemeysaa jilicsan oo raaxo leh, waxayna xitaa xiran kartaa dhar kasta, laga soo bilaabo xaqiiqda illaa qaawan, xitaa muuqaal dhexdhexaad ah, oo xiran dharka saxda ah.
Taariikhda Added: 2019-03-08 01:26:50 waxaa qoray Joyce Jordan
Naaso yaryar Asao Miko 100CM doll sex
Aad baan u faraxsanahay. Markuu Asao gurigayga yimid, waxay la mid ahayd malaa'ig. Maxaa yeelay aad ayey u qurux badan tahay. Aad baad u mahadsantahay, sidaad sheegtay. Waan la qadeyn karaa iyada.
Taariikhda Added: 2019-03-08 01:11:52 by Ian Huggins